.: ကရင်စာပေဦးဥတ္တမနှင့် ကရင်စာဆိုတော်နေ့သမိုင်းအကျဉ်း
ဖူ့ကျိုင်ဥတ္တမ စ၀်အဲဆိုဒ် (ဗုံးက်ုတိက်) ၏ ထေရုပ္ပတ္တိကထာ (အကျဉ်း) (နမော အာစရိယဿ) နိဒါန်း ။ ။ တကမ္ဘာလျှင်၊ မဟာဗြဟ္မေ၊ လျှာကုဋေဖြင့်၊ ဆန်းနေဂိုဏ်းညီ၊ ဂါထာစီ၍၊ ကြူးချီမြွက်ဖေါ် ၊ ဆိုလှည့်သော်လည်း ၊ဘုန်းတော်ကဲလွန် ၊အနေကန်ကို ၊ဝေဖန်ချီးမြှောက် ၊ ပြီးမရောက်လိမ့်--ဟူဘိသို့ ---။
ကျေးဇူးရှင် ဖူ့ကျိုင်စ၀်အဲဆိုဒ် ခေါ် ဖူ့ကျိုင် ဥတ္တမ၏ တပည့်ရဟန်းများသည် ဆရာရှင်ဖြစ်သူအား သူ၏ ကြီးမားသော ဂုဏ် ၊ လွန်ကဲသော ကျေးဇူးတော်များကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ကာ အထက်ပါအတိုင်း ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုသင့်သည်သာဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ချီးကြူးလျက် သူ၏ဂုဏ်အထူးကို အောက်မေ့ဆင်ခြင်မြွက်ဆိုလိုက်သော်လည်း လွန်ကဲသော စကားကို ဆိုရာရောက်အံ့မထင်ပေ။ ဆရာအရှင်--- ဥတ္တမထေရ်ကျော်သည် ထူးခြား၍ ရှားပါးသော ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် တစ်ပါးအပါအ၀င် ဖြစ်သည်။ ဆရာအရှင်ဥတ္တမသည် ထိုသို့ မြွက်ဖေါ်၍ သူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချီးကြူးသင့် ချီးကြုးထိုက်လောက်အောင် တပည့်ဒါယကာတို့အဖို့ ထူးခြားလွန်ကဲသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပင်ဖြစ်ပါပေ၏။ သူသည် စာပေအရာတွင် ၀ိရိယကြီးမားစွာ ရှာဖွေလိုက်စားမှတ်သားစုဆောင်းတတ်သူဖြစ်၏။ မှတ်ဥာဏ်ထက်မြက်လှသူသည်။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းပီပီ ကြည်လင်ထက်မြက်သော သဒ္ဓါတရားဖြင့် သာသနာကို ယုံကြည်သူ ဖြစ်သည့်အလျောက် သာသနာကိုချစ်မြတ်နိုးလှသူတည်း။ သာသနာစိတ်ရှိ၍ သာသနာတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးသည်နှင့်အတူ မိမိ၏ ကရင်အမျိုးသားများကိုလည်း မြတ်နိုးချစ်ခင် သံယောဇဉ်အထားကြီးသူလည်း ဖြစ်ခဲ့သူပါပေ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကြသည့် မိမိ၏ ကရင်အမျိုးသားများအတွက် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောကြားတော်မူသည့်တရား ဓမ္မများကို မိမိနားလည်တတ်ကျွမ်းသလောက် ဖြန့်ဖြူးပေးရန်ဆိုသည့် သာသနာပြုစိတ်ဓါတ် အပြည့်အ၀ရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါပေသည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် ရှေးရှေးကရင်စာဆိုတော်များ၏ ထုံးနည်းမှီကာ ဓမ္မကျမ်းစာ မြောက်များစွာကို ကရင်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုကာ ရေးသားခဲ့သည် ကိုယ်တိုင်လည်း ဟောပြောဆုံးမခဲ့သည် ၊ သူ့နည်းတူ ရေးသားဟောပြောဆုံးမ နိုင်အောင် တပည့်များကို မပျင်းမရိပဲ လွန်ကဲသော စေတနာဖြင့် သင်ကြားပြသဆုံးမခဲ့သေးသည်။ ကရင်အမျိုးသား ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အတွက်နားလည်လွယ်အောင် ကဗျာလင်္ကာဖြင့် တစ်နည်း ၊ စကားပြေဖြင့်တစ်ဖုံ ၊ စကားပုံဖြင့်တစ်မျိုး---တို့ဖြင့်ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်ပါ ဓမ္မတရားစာများကို ပြုစုရေးသား ဟောပြောခဲ့သူ ဓမ္မကထိက စိတ်ဓါတ်လည်း ရှိပါပေသည်။ သူ၏ကဗျာ-လင်္ကာ- စကားပြေ-စကားပုံ-မှတ်သားဖွယ်ရာ ဆိုဆုံးမချက်များမှာ လူကြိုက်များလှ၏။ လူကြီးလူငယ်မရွေး သူ၏ ဟောပြောဆုံးမချက်များကို နှစ်သက်ကြ၏။ နားရှင်းကြ၏၊ သဘောပေါက်လွယ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ထိုဆရာအရှင်ကို ကြည်ညိုကြသည်၊လေးစားသမှုပြုကြသည်၊ ကျေးဇူးကြီးလှသည် ဆရာအရှင်အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားကြပေသည်။ လက်ရင်းတပည့်တပန်း ဒါယကာ ဒါယကာမအပေါင်းတို့ကို ကျော်လွန်၍ စာပေမြတ်နိုးသူ ဘာသာတရားကြည်ညိုသူ မိမိ၏ ကရင်အမျိုးသားသည်ပင် သူအား အားကိုးလာကြသည် ၊ ချီးကြူးဂုဏ်ပြုကြသည် ၊ ကြည်ညိုရင်းစွဲ ဖြစ်လာကြသည်။ သူ့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကရင်အမျိုးသားများ၏ နေမင်းတစ်ဆူဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုလျှင် အားလုံးပင် သဘောကြိုက်ညီကြသည်။ မှန်ပေသည် သူကား အသိဥာဏ် မှောင်မိုက်နေသူ ကရင်အမျိုးသားတို့အား စာပေအလင်းရောင်ဖြင့် ထွန်းညှိဖြန့်ဖြုးပေးခဲ့သည့် စာပေရှင် ကရင့်နေမင်းတစ်ဆူပင်ဖြစ်ပေသည် မဟုတ်ပါလော။ ကရင်စာဆိုရှင်၊ ကရင်အလင်းရောင် ဖြန့်ဖြုးရှင် ကရင့်စာဆို ဆရာအရှင်ကို တပည့်တပန်းများက ထာဝရ အလင်းရောင် ပေးနိုင်သူအဖြစ် တည်နေစေချင်ကြ၏။ သူ၏ မဟာသမုဒ္ဒရာနှင့် နှိုင်းစာရလောက်အောင် ကျယ်ပြောသော ကျေးဇူးဂုဏ်ကို မနားတမ်းချီးကြူးလိုကြ၏။ သူ၏ မြင့်မိုရ်တောင်မက ကြီးမားသောဂုဏ်ကို ဖေါ်ထုတ်လိုကြပေသည်။ သူ၏ စာပေကို ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် အလင်းရောင်အောက်တွင် စာပေ၏အမြုတေ ရတနာများကို ရှာဖွေစုဆောင်းကာ တိုးပွားအောင်ကြိုးစားလိုကြ၏။ သို့သည့်တိုင် ကရင့်စာဆို ကရင်စာပေရှင်ဆရာတော် ဖူ့ကျိုင်ဥတ္တမကား သူ၏ သံယောဇဉ်ထားလှသည့် သူ၏ ကရင်အမျိုးအနွယ်ကို မျက်ကွယ်ပြုကာ ၊တစ်ဖန် မထတော့သော အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် အနားယူလိုက်ပေပြီတကား။စာပေဖြင့် ရေးသားဟောပြောခဲ့ရုံမျှမက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် မြွက်ကြားခဲ့သော သင်္ခါရ၏ ဖြစ်ပျက်အစဉ်ကို ကိုယ်တော်တိုင်ပင်သရုပ်ဖေါ်ကာ ကျန်ရစ်သူတို့အတွက် သံဝေဂစိတ်စွဲ မမြဲသည့်သဘောကို ဟောပြောဆုံးမဘိအသွင် မြင်လွယ်အောင် မှာတမ်းပြုသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေတော့သည်။ ဆရာတော်အရှင် ဖူ့ကျိုင် ဥတ္တမကား ကျန်ရစ်သူအပေါင်းကို ဆိုဆုံးမပြီးသည့်နောက် မသိအပ်သော ဂတိသို့ ကြွမြန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စင်စစ် ကျန်ရစ်သူတို့သည် သူ့အား မမှိတ်မသုန်သောသဘောဖြင့် ဘ၀နတ်ထံသို့ အမှန်ပင် ပြန်ကြွသွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ကြလေသည်။ အကျင့်သီလ မြင့်မြတ်စင်ကြယ်သူတို့အဖို့ ကောင်းရာသုဂတိသို့ ကြွမြန်းလေမည်ဆိုတာကို ယုံကြည်ထိုက်လှတော့သည်သာ။ ဆရာအရှင် ကရင့်စာဆို ၊ကရင့်စာပေရှင် ၊ ဖူ့ကျိုင်အဲဆိုဒ် ခေါ် ဖူ့ကျိုင်ဥတ္တမကို ကရင့်စာပေကြယ်ပွင့်ကြီးတစ်ပွင့်အလား အားထားကြည်ညိုနေကြသူတို့အဖို့ ယနေ့ ထိုကြယ်ပွင့်ကြီး ကြွေလင့်ခဲ့လေပြီဖြစ်၏။ ကြွင်းကျန်ရစ်သူ ကျွန်ုတို့သည် သူ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အောက်မေ့ချီးကြူးနေကြရုံမျှဖြင့် အပြီးမသတ်သင့်ပေ။ သူကဲ့သို့ ထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ထေရုပ္ပတ္တိစာတမ်းတစ်စောင်ကိုပြုစုကာ နောင်လာနောက်သားတို့ အတုယူစံမှီးနိုင်စိမ့်သောငှါ စာတစ်စောင် ပေတစ်ဖွဲ့ဖြင့် သမိုင်းမှတ်တိုင်စိုက်ထူနိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်မှာ ကျန်ရစ်သူ မိတ်ကောင်းဆွေမွန် တပည့်တပန်းများ၏ အပေါ်ကျရောက်လာပြီးဖြစ်ပေသည်။ အို ဆရာအရှင်---အရှင်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ဒီစာတမ်းငယ်ဖြင့် ဖေါ်ကြူးလိုက်သော်လည်း အကယ်၍ကား ---ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဖေါ်ကြူးရာမရောက်သေး ဟူငြားအံ့။ပညာဥာဏ်မရင့်သန်သေးသူ အရှင်တပည့်များအား
အနူးအညွတ်ခွင့်လွတ်စေကြောင်းခွင့်ပန်တောင်းလိုက်ပါသည်။ အို ဘယ့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆရာအရှင်--- ။
ဆရာတော်လောင်းလျာ-----။ ။ ဆရာတော်လောင်းလျာကို ကောဇာသက်ကရာဇ် ၁၂၈၂ ခုနှစ် မုက္ကဒိရွာ အောက်ပိုင်း ဦးမန်းထွန်းသောင်း ဒေါ်နန်းမယ်ချိန်တို့မှ မီးရှူးသန့်စင် ဖွားမြင်ခဲ့ပေသည်။ မိသားစုအတွင်း ညီအကိုမောင်နှမများတွင် ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်လေ၏။ ငယ်မည်မှာ စောအာစီ ခေါ် စောအဲဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ တနင်္ဂနွေသားတည်း။ ငယ်စဉ်ကပင် ပညာဥာဏ်ထက်မြက်လှသူဖြစ်သည်။ ငယ်ဆရာတော်ဖြစ်သူ ဆရာတော် ဦးအာဒိစက စောအာစီကလေး၏ အစွမ်းအစ ထက်မြက်လှပုံကို အကဲခတ်ပြီး စောအာစီ၏ ပညာရေးကို ရှေ့ရှုလျက် ဒီမည်သော တောရွာတွင် မထားစေဘဲ မော်လမြိုင်မြို့သို့ ပညာသင်ကြားရန် အစအဦးကပင် ရည်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်လေသည်။ စင်စစ် ဆရာတော် ဖူ့ကျိုင်ဥတ္တမဖြစ်လာသည့် ပုဂ်ဂိုလ်ကျော်သည် ငယ်စဉ်ကပင်လျှင် ပညာဥာဏ်ထက်မြက်သည့်အလျှောက် အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင် ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ရည်ရွယ်ချက် မြင့်မားလှသူ ဖြစ်လေသည်။ သကျရှုပံ၊ ကြံကြံသမျှ၊ တောင်းတရာရာ၊ တတ်ကောင်းစွာသား၊ ၀ိဇ္ဇာသိပ်ပလူကိစ်စကို၊တစ်စမကျန် သင်ကြားယူလိုသည့်ဆန်ဒမှာ သူ၏ ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလကပင် အစပျိုးလာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သူ၏ ဦးရီးတော်ဖြစ်သူ မုက္ကဒိအောက်ကျောင်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော ဆရာတော် ဦးအာဒိစ္စလူအမည် (နဲအုန်းပွင့်)က သူငယ်ကလေး စောအာစီအား တတ်ကောင်းတတ်ရာ ၀ိဇ္ဇာသိပ်ပပညာရပ်များကို သင်ကြားတတ်မြောက်မှသာလျှင် လောကတွင် တင့်တယ်နိုင်မည်ဆိုတဲ့အကြောင်း တဖွဖွပြောပြဆုံးမခဲ့သည်ကို ငယ်စဉ်ကပင် ကြားဖူးပြီးဖြစ်၍ နားရည်ဝကာ မိမိ ပညာသင်ကြားလိုသော စိတ်ဓါတ်ကို အားပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့ကြောင့်လည်း သူငယ်စောအာစီသည် ဦးရီးတော် ဦးအာဒိစ္စ၏ သွန်သင်ချက် ၊ ညွန်ကြားပို့ဆောင်ပေးချက်ကို နာခံယူကာ အသက် (၁၁)နှစ်သားအရွယ်ကပင်လျှင် မော်လမြိုင်မြို့ ဇွဲကနာခေါ် ဇွဲကလာကျောင်းသို့သွားရောက် ပညာစတင်သင်ကြားခဲ့လေသည်။ ဦးရီးဆရာတော် ဦးအာဒိစ္စက ဇွဲကလာကျောင်းဆရာတော် ဦးကေသရထံ အပ်နှံပြီးနောက် ထိုဇွဲကလာကျောင်း၌ပင် သာမဏေဘောင်သို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ဇွဲကလာကျောင်း၌ ရှင်သာမဏေဘ၀နှင့်ပင် ပညာဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပြီး ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၂-နှစ်သို့ ရောက်သောအခါ အသက် (၂၀) ပြည့်၍ ရဟန်းဘောင်သို့ တက်ရောက်ရန် အချိန်တိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေသည်။ ယခု မြင်တွေ့ရသော မုက္ကဒိအောက်ကျောင်းကို ဆရာတော် ဦးအာဒိစ္စမှ ၁၂၈၀-ပြည့်နှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်၍ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ မမွှေးမှီ (၂)နှစ်ခန့်က ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်လေသည်။ ရဟန်းလောင်း အရှင်ဥတ္တမခေါ် ကိုရင် အာစီ ရဟန်းဘောင်သို့ ၀င်မည့်နှစ်တွင် ထိုခေတ်က အောင်စိန်ကျောင်းခေါ် ယခု မုက္ကဒိအောက်ကျောင်း၌ သိမ်တော်သမုတ်ခြင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်ခဲ့လေသည်။ သိမ်တော်ကို မော်လမြိုင်မြို့ ရတနာဘုံပျံကျောင်း ဆရာတော် ပထမဆုံး ပထမကျော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဦးကေတုမာလာက ဦးဆောင်ပြီး သမုတ်ခဲ့သည်နှင့် ကြုံကြိုက်လျက် ရှိနေ၏။ အရှင်ဥတ္တမသည် ထိုသိမ်တော်ကို သမုတ်၍ အပြီး ပထမဦးဆုံး ဘုံပျံဆရာတော်ကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ကျုံပကိုကျောင်းဆရာတော်က အနုသာသန ဆရာဆောင်ရွက်ပြီး မြင့်မြတ်သောရဟန်းဘောင်သို့ တက်ရောက်ခဲ့လေသည်။ ထိုစဉ်က သိမ်တော်ကို သမုတ်ရာ၌ မော်လမြိုင်မြို့ ဘုံပျံဆရာတော် ဦးကေတုမာလာ၊ ဇွဲကလာကျောင်း ဆရာတော် ဦးကေသရတို့ ကြွရောက်လာပြီး မိဇံတိုက်ကျောင်း ဆရာတော်ကြီး ဦးနန္ဒ၀ံသ၊ ၀င်းဒရယ်ကျောင်း ဆရာတော် ဦးဥာဏ၊ကျုံပိုက်ကျောင်း ဆရာတော်နှင့် ဆရာတော် ဦးအာဒိစ္စ၏ ကျောင်းကို ပြန်လည်ဆက်ခံသော ဦးအဂ္ဂသာမိ စသော သံဃာတော် (၅၀)ကျော်တို့ ပါဝင်ကြသဖြင့် အလွန်ပင် သိုက်မြိုက်ပြည့်စုံလှသည်ဟု ဆိုနိုင်လေသည်။ ဦးဥတ္တမ ရဟန်းဘောင်သို့ တက်ရောက်ခဲ့စဉ်က နဲတာပိုလိနှင့် နဲဗိုင်းခေါ် ရဟန်နှစ်ပါးနှင့်အတူ ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ နှစ်ပါးမှာ ရဟန်းဘောင်မှာ မမြဲကြပေ။ မကြာမှီ လူဝတ်လဲလိုက်ကြသဖြင့် ဦးဥတ္တမ တစ်ပါးသာ ရဟန်းဘ၀တွင် မွှေ့လျော်ပေသည်။
ဦးဥတ္တမ ရဟန်းဘောင်သို့ တက်ရောက်ပြီးသည့်နောက် အခြားသော အဖေါ်ရဟန်းတော် နှစ်ပါးကဲ့သို့လူဝတ်လဲရန် စိတ်မကူးပဲ ဆက်လက်ပြီး ပညာသင်ကြားရန် အာရုံစိတ်စောလျက်သာရှိပေ၏။ သို့ကြောင့်ပင် တစ်ရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ် ဆိုသကဲ့သို့ မိမိနေခဲ့သည့် မော်လမြိုင်ဇွဲကလာကျောင်းတွင် ဆက်မနေတော့ပဲ အင်းစိန်မြို့ မဂ္ဂင်ကျောင်း ဆရာတော် ဦးဓမ္မိကထံ ပညာရင်နို့သောက်စို့ရန်အတွက် သွားရောက်နေထိုင်ကာ ပညာကို ဆက်လက်ပြီး သင်ကြားခဲ့လေသည်။ အင်းစိန်မြို့မဂ္ဂင်ကျောင်းတွင် သွားရောက်နေထိုင်ပြီး မကြာမီ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားလာခဲ့တော့သည်။ ဂျပန်တို့မြန်မာပြည်တပြည်လုံးကို သိမ်းကြုံး အုပ်စိုးသည့် (၃)နှစ်တာကာလအတွင်း အင်းစိန်မြို့မဂ္ဂင်ကျောင်းတွင်ပင် သောင်တင်ကာနေရပ်ဋ္ဌာနသို့ မပြန်လာနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် အထက်ကဆိုသကဲ့သို့ ပညာရှာမှီးရန် စိတ်ဆန္ဒအပြည့်အ၀ထားသူဖြစ်သည့်အလျောက် ဂျပန်ခေတ် တိုင်းပြည်ကမောက်ကမ ဖြစ်နေချိန် တွင်ပင် လက်လှမ်းမှီရာ ဂျပန်စာကို သင်ကြားခဲ့ပေသေးသည်။ ဂျပန်စာကို ဟိတခဏ အဆင့်မျှပင်မက အဆင့်မြင့်စာပေကို ဖတ်ကြားနိုင်သည်အထိ သင်ကြားယူခဲ့းသေသည်၊အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာ ထိုစဉ်ကပင်အသုံးပြုလာခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေ၏။ အင်းစိန်တွင်နေထိုင်ခဲ့စဉ်က သူတစ်ဦးတည်း မဟုတ်ပေ။ ယခုမုက္ကဒိ အထက်ကျောင်းတွင် သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူသော ဆရာတော်ဦးဥာဏနှင့်အတူ ဖြစ်လေသည်။ ထိုအရှင်နှစ်ပါးတို့ ဂျပန်ခေတ်တခေတ်လုံး အင်းစိန်တွင် နေထိုင်ကြပြီးနောက် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသဖြင့် မိမိတို့ နေရပ်ဋ္ဌာနသို့ ပြန်ကြွလာရန် တိုင်ပင်စီစဉ်ကြတော့သည်။
မော်လမြိုင်မြို့သို့ ထိုခေတ်က ရန်ကုန်မြို့မှ မော်လမြိုင်မြို့သို့ပြန်လာရန်မှာ ခရီးအလွန်ိခက်ခဲလှသည် မီးရထား၊မော်တော်ကားများကို အဆင့်ဆင့်ပြောင်းပြီး ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ပြန်လာခဲ့ရ၏။ ထမ်းပိုးနိုင်သမျှ အထုတ်အပိုးများကို ပုခုံးတွင်ထမ်းဆောင်ကာ ခြေလျင်ခရီး လျှောက်လာခဲ့ရသည့် အခါလည်း လျှောက်ခဲ့ရလေသည်။ နေရပ်မုက္ကဒိကျောင်းတွင် ကြာကြာမနေခဲ့ပေ။ ဂျပန်တို့ လက်နက်ချပြီး ဗြိတိသျှတို့ ပြန်ဝင်လာသော အချိန်တွင် သူသည် မော်လမြိုင်မြို့ တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုက် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဦးနာဂသေနာဘိဝံသထံတော်တွင် သွားရောက်နေထိုင် ပညာဆက်လက်သင်ကြားပြန်လေသည်။ မော်လမြိုင်မြို့တောင်လေးလုံးကျောင်းတွင် ပညာဆက်လက်သင်ကြားရင်း-----သက္ကရာဇ် ၁၃၀၉-ခုနှစ် ၀ါတော်(၆)၀ါ အရတွင် မော်လမြိုင်မြို့တွင် ကျင်းပသော ပရိယတ္တိ သဒ္ဓမ္မပါလစာမေးပွဲ ပထမအဆင့်ကို အောင်မြင်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုသက္ကရာဇ် ၁၃၀၉ -ခုနှစ်မှာပင် မော်လမြိုင်မြို့သုသမာစာရ အငယ်တန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပြန်သည်။ တဖန် သက္ကရာဇ် ၁၃၁၀-ခုနှစ်တွင် အစိုးရ ပထမပြန်စာမေးပွဲ ပထမငယ်တန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၁၃၁၁-ခုနှစ်တွင် ပထမလတ်တန်းကို အောင်မြင်ခဲ့ပြန်လေသည်။ ထိုနောက်တွင်မူ ဦးဥတ္တမသည် တတ်ကောင်းတတ်ရာ ပညာရပ်များကို ဆက်လက်သင်ကြားလျက်ရှိသော်လည်း စာမေးပွဲဖြေဆိုမှုကို မပြုတော့ချေ။ ဆရာတော် ဦးအာဒိစ္စ (ဦးဥတ္တမ၏ ဦးရီးတော်) တည်ထောင်ခဲ့သော အောင်စိန်ကျောင်းခေါ် မုက္ကဒိအောက်ကျောင်းကို ဦးအာဒိစ္စ ပြန်လွန်တော်မူပြီးသည့်နောက် ကျောင်းထိုင်ကြီးအဆက်ဆက် ကျောင်းထိုင်ကြသေးသည်။ သို့သော် ထိုကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးများက သာသနာဘောင်တွင် မမြဲကြပေ။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် တစ်ပါးပြီးတစ်ပါး လူဝတ်လဲလိုက်ကြသည်၊ နောက်ဆုံးမုက္ကဒိရွာသားနဲတာတူးခေါ်ဦးအဂ္ဂသာမိကိုပင့်ဆောင်ကာကျောင်းအပ်ကျောင်းထိုင်စေလေတော့သည်။
ဦးအဂ္ဂသာမိသည် ထိုစဉ်က ဖါးအံမြို့အနီး
ထောင်ဝိကျောင်းတွင်ကျောင်းထိုင်အဖြစ်နေထိုင်ဆဲဖြစ်နေလေသည်။ သို့သော် မိမိဇာတိရွာဖြစ်သည့် မုက္ကဒိကျောင်းတွင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး ပြတ်လပ်လျက်ရှိနေသည်ကို ငဲ့ညှာတော်မူသောအားဖြင့် ဒကာတို့၏ ပင့်ဆောင်ချက်ကို လက်ခံလိုက်ပေသည် ၊ ပြီးနောက် မုက္ကဒိအောက်ကျောင်းတွင်ပင် ပျံလွန်တော်မူသည်အထိ ဆက်လက်နေထိုင် သီတင်းသုံးတော်မူသည်။ ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂသာမိသည် မည်သည့်အဆောက်အအုံမျှမရှိသေးသည့် မူလသိမ်တော်နေရာတွင် သိမ်တော်အဆောက်အအုံကို တည်ထောင်လိုက်လေသည်။ တဆက်တည်းပင် ယခုလက်ရှိ တွေ့မြင်ရသော တိုက်ကျောင်းအဆောက်အအုံကိုလည်း စတင်တည်ထောင်လိုက်သေးသည်။ ယင်းကျောင်းတော်ကြီးကို တည်ထောင်၍ မပြီးမြောက်မီ သက္ကရာဇ် ၁၃၁၉-ခုနှစ်၌ ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂသာမိသည် လူကြီးရောဂါဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသွားခဲ့ပေ၏။ ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂသာမိ ပျံလွန်တော်မမူမီ နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကပင် ကျောင်းကို အထက်ကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီး ဦးဥာဏအား ပုဂ္ဂလိကအဖြစ် အပ်နှံလိုက်ပြီး ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော် ဆရာတော် ဦးဥာဏမှာ လက်ရှိမုက္ကဒိ အထက်ကျောင်းကို ဦးစီးနာယကပြုကာ တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ကျောင်းထိုင်နေပြီး ဖြစ်သဖြင့် တာဝန်ကို မနိုင်မနင်း ထမ်းဆောင်နေရသည်ကို တွေးမိဟန်တူပေသည်၊ သို့ကြောင့်ပင် ဆရာတော်ပျံလွန်တော်မမူမီ နှစ်မှာပင်ဆရာတော် ဦးဥာဏကို ပင့်ခေါ်လိုက်ပြီး တဖန် မုက္ကဒိအောက်ကျောင်းကို ဦးဇင်းအာစီ (ဦးဥတ္တမ) အားပုဂ္ဂလိကအဖြစ် အပ်နှံရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုက်သည်။ ဆရာတော် ဦးဥာဏအဖို့ ဦးဥတ္တမအပေါ် ကြည်ညိုစွဲရှိပြီး ညီငယ်အရင်းသဖွယ် ချစ်ခင်မြတ်နိုးနေသည်သာဖြစ်၍ အကယ်၍သာ မုက္ကဒိအောက်ကျောင်းကို ဦးဥတ္တမအား အပ်နှံတာဝန်ပေးလိုက်လျှင် သာသနာကြီးပွားတိုးတက်စရာ အကြောင်းရှိသည်ကို ကြိုတင်မြင်ထားသဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပင် သဘောတူညီလိုက်လေသည်။ သို့သော် ဦးဥတ္တမအား ထိုအချိန်က ကျောင်းကိုလက်ခံယူရန်အတွက် ငြင်းဆန်လိုလေသေးသည်။ ဆရာတော် ဦးဥာဏ၏ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းကို ဤကဲ့သို့ ထပ်ဆင့်လက်ခံယူလိုက်ခြင်းသည် မသင့်လျော်ဟုမြင်၍ လက်မခံလို ဖြစ်ပေသည်။ ထိုသို့ပင် ဖြစ်သော်လည်း ဆရာတော် ဦးဥာဏက ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂသာမိ စိတ်ချမ်းသာလို၍၎င်း၊ အစီအစဉ်မှာ သင့်တော်လျောက်ပတ်သော အစီအစဉ်ဖြစ်သည်ဟု မြင်နေသဖြင့်၎င်း ၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖြောင်းဖြပြောဆိုပြီး ကျောင်းကို လက်ခံယူလိုက်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်၏။ မိမိရိုသေလေးစားမှု ရှိနေသူ ဆရာတော် ဦးဥာဏ၏ အကြံပေးချက်ကို မရှောင်မလွဲသာပဲ လက်ခံယူလိုက်ရတော့၏။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ မုက္ကဒိအောက်ကျောင်းဆရာတော်သည် မိမိ လက်ရှိနေထိုင်သောကျောင်းမှာ အထက်ကျောင်း ဆရာတော်၏ အာဝါသအောက် သြ၀ါဒခံကျောင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း စကားစပ်မိသူတိုင်းအား ပြောဆိုလျက်သာ ရှိနေပေသည်။ စင်စစ် သူသည် ‘‘ဂါရဝေါစ’’ မင်္ဂလာတရားကို အစဉ်နှလုံးသွင်းလိုက်နာသူဖြစ်ကြောင်း သက်သေထူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါပေသည်။ ဆရာတော် ဖူ့ကျိုင်ဥတ္တမသည် သက္ကရာဇ် ၁၃၁၈ -ခုနှစ်ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂသာမိ သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်ကပင် ကျောင်းကို လက်ခံလိုက်သော်လည်း နောက်နှစ် သက္ကရာဇ် ၁၃၁၉-ခုနှစ်၊ ဦးအဂ္ဂသာမိ ပျံလွန်တော်မူပြီးနောက်မှ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးအဖြစ် ရေတွက်ယူရတော့မည်။ သို့ကြောင့်ပင် ဆရာတော် ဖူ့ကျိုင်ဥတ္တမကျောင်းထိုင်သက်မှာ ၁၃၄၆ -ခုနှစ် ပျံလွန်တော်မူသည့်နှစ်တွင် ရေတွက်လျှင် ၂၇-နှစ်ဖြစ်ပေသည်။ ခုနှစ်ဖြစ် သက္ကရာဇ်များ၏ ဖေါ်ပြချက်အရ ဆရာတော်သည် သက်တော် ၆၄-နှစ်၊ ၀ါတော်အားဖြင့် ၄၅-၀ါ ကျောင်းထိုင်သက် ၂၇-နှစ်ဖြစ်ကြောင်း တွက်ယူ၍ ရပေသည်။
‘‘ ကရင်စာပေနှင့် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ’’
နမောတဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ပုဒ္ဓဿ
လိက်အင်းသံင်း ( ကရင်စာလုံးရိုက်ဖို့ ဗျည်း-သရ မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်ဖတ်နိုင်ရန်တောင်းပန်ပါတယ်)
၁။ ယ်ုဝါထင်း ကျာ်ဓ၀်.သင့်ဟှံင် ယ်ုမုလ၀်လင် လိက်အင်းသံင်းမ္နီဟ် လ်ုဖုံခ၀့် ထံင်အ်ုအိင်းလှ်။
၂။ လိက်အင်းသံင်းသီးလ်ုဖး ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် မွဲာဟ်ုမောဝ်.ဟ်ုဖါ.ခ၀့် ဟ်ုလ၀်သှေ်ဆေ၀်. ၊ မွဲာဟ်ုစံင်အ္စာခ၀့်ဟ်ုလ
၀်သှေ်ဆေ၀်.၊ မွဲာဟ်ုထီဟ်ုသိုဝ်ခ၀့် ဟ်ုလ၀်သှေ်ဆေ၀်.လှ်။ စင်ဝိုဝ် ဟ်ုအေသှေ်ယာ့ လိက်အင်းသံင်းလ်ုဟှာဟှာဏှ် ကဲထင်းဝေ့ တုာပညာ့လ်ုအုဍးဝးဆ်ုအး- လ်ုအုဟှိုင့်ဝးဆ်ုအးထုက် လ်ုဟှာဟ်ုလ၀်သှေ်ဝေ့လှ်။
၃။ ဆ်ုကျုင်းက်ုထူ့လ်ုဟှာဏှ် ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝး ထံင်ခ၀့်လယ့်မ်ုသှေ်။ ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးလ်ုအှ်ဝး ဟ်ုလုဟှာဏှ် အ်ုသောဟ်အ်ုသင့် ထံင်ခ၀့်လယ့်မ်ုအှ်။ ဆ်ုဝှ်ဆ်ုယ၀့် လ်ုအှ်ဝးဟ်ုလုဟှာဏှ် မ်ုမာဝုံးမာဝါ ထံင်ခ၀့်လယ့်မ်ုဏေ၀်.။ မာဝုံးမာဝါ လ်ုဏေ၀်.၀း ဟ်ုလုဟှာဏှ် ထံင်ခ၀့်လယ့် မ်ုဏေ၀်.နိဗ္ပာန်။
၄။ ဆ်ုဝးဍံင်ဍေ ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးယိုဝ် အ်ှဝေ့ဏင်မိင်အေးလှ်။ ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးသီးလ်ုဖး က်ုမုိုဝ်ဟှယ့်အင်းဟှူးဝေ့ ဏေ၀်.အေးလှ်။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးသီးဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့်လှ်။ ဏင်ကျးဍ၀်ခ၀့် မ်ုယှူးမုက်ဝ်ှယ
၅။ ပ်ုအေဍးလောဟ်ဍးဍံင် ပညာ့လ်ုမိင်မိင်လာ.ဏှ် ၊ ယ၀့်ခိုဝ်းလ၀့် ၊ ယှာ.ခိုဝ်းလ၀့် ၊ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဏှ် ဟ်ုအှ်ကှေ်ဝေ့ဟ်ုသာ ဏင်ဆောဝ်အေးလှ်။ ပ်ုဝးထံင်ဏာင်းဏေ၀်.ထ၀ယ် လ်ုဟုသာဖိုင်ဏှ် ဝေသိုဝ်ပ်ုအံင်ထောဝ်ထင်းဖု.ံသိုဝ် ဝေ့သိုဝ်ထီ့လင်ဆင်သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ယိက်ထင်းခိုဝ်း အးထင်းဝေ့ဍးလှ်။
၆။ ဟ်ုနိုဝ် ဆ်ုလ၀်ဆ်ုခုါင် ပညာ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် ၊ ဟ်ုစူးသှေ်ခင်းမာပညာ့မွဲာအ်ုဟှေဝ်၊ ပေ၀့်ခိုဝ်းလ၀့် ယှာ.ခိုဝ်းလ၀့်ဏှ် အ်ှဝးသာလ်ုဃှေဝ် ။ ပ်ုအေသှေ် ထံင်အ်ုလုက်ဆိင့်စ်ါဝိုဝ် ပညာ့လ်ုမိင်လ၀့် လာ.ဏင့်သီး အင်းဝူးလင်သာကဲဝေ့ထ်ုမာ.လှ်။
၇။ လ်ုလာင့် (ခေါဟ်လံင်) ကိုဝ်ဖုံးဍေဏှ် လုံ.ဟှေဝ် မ္နိက်ဟှေဝ်အ်ှဝေ့အေးလှ်၊ က်ုဆင့်ကိုဝ်ဍူဍေဏှ် အသာင်း (အမြုတေ) မ်ုအှ်မွဲာအေးလှ်။ စုန့် (ဆံင်လံင့်)ပ်ုကေ၀်ဏှ် မ်ုအှ်ဝေ့ ကိုဝ်မိင်လးဍေမွဲာအေးလှ်။ အ္စာတုာပညာ့
ဍ၀်သီးလ်ုဖး မ်ုအှ်ဝေ့ကိုဝ်တွာန့်ဍေ မွဲာအေးဆေ၀်.လှ်။
၈။ ဆ်ုလုတွာန့်လ်ုဖုံးဖိုင်ဏှ် တုာပညာ့အှ် ပ်ုအေဟှိုင့်ဝးစ်ါဝိုဝ် လံင်အင်းဃှူ့ပညာ့ဆာ.သီးလ်ုဖး လ်ုအ္စာတုာပညာ့အ်ှတွာန့်အိုဝ် လ်ုထံင်ဝးဝေ့မ်ုထံင်သိုဝ် ပ်ုဝးကေုစိုဒ်လေ၀်ဝေ့လှ်။
၉။ ဆ်ုသှေ်ဝးသီးယိုဝ် ပ်ုဝးမာလောဟ်ဝေ့အဲုခိုဝ်းလှ် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာသီးဏ်ှဍ၀် ပ်ုဝးအင်းဃှူ့ဝေ့ကျဝ်ကျဝ်လှ်။ လာင့်ခေါဟ်လံင်သီးဏှ် ဟ်ုဝးထင်းဝေ့ဃှယ်ဃှယ်လှ်။ ဆ်ုလုကာမဂုဏ်ဖေါဟ်သီးအ်ုဆုမာဏှ် ဟ်ုဝးသာဝေ့ဆာဆာလှ်။ ဆ်ုသာဟှယ့်ထင်းဆ်ုဏှ်သီး ဟ်ုဝးဍုဂ်ထင်းဝေ့၀းဍာလှ်။
၁၀။ ဟှိုင့်ဝးဍးဝးဆ်ုသှေ် ၊ တာင်ခွင်.ဆ်ုသှေ် ၊ အင်းဒွါခ္နံင်.ဆ်ုသှေ်၊ တါင်ဆ်ုဏါင့်ဆ်ုသှေ်၊ အင်းသံင်းလ၀်ထာင်ဆု သှေ်၊ ဆ်ုဍီးဆ်ုထင်.လင်ဆ်ုသှေ်၊ ဏါဍိင် ဆ်ုဖေါတ်ဆ်ုအူးဆ်ုသှေ် ၊ အင်းဒွါဆ်ုဝီ.ဆ်ုဏးဆ်ုသှေ် ၊ ခီုးခုါဆ်ုသေ်ှ ၊ ဆ်ုခုါင်မူ့လာဟ်ုယှာ.ဆ်ုလ၀်ဆောဝ်ဆ်ုသှေ်။
၁၁။ သီးဖါ.စာသ၀့်ဆ်ုသှေ် ၊ လ၀်ထာင်ဆ်ုလ၀်ဆောဝ်ဃွှာဆိုဒ်ဝံင် ဆ်ုပါမုက်ပါလာဆ်ုသှေ် ၊ ဗိင်ဒိုဟ်အင်းခါဆ်ုသှေ် ၊၀ုါ်ဝါမာက္ဋာဆ်ုသှေ် ၊ ဆံင့်ထင်းလ်ုဝါ် လင်္ကာ ထာခေါဟ်ဆ်ုသှေ် ၊ လ၀်ထါင်လ၀်ခေ၀်ဆ်ုခုါင်ကဲဆ်ုသှေ် ၊ ဆ်ုအူးဆ်ုပ၀်ဆ်ုသှေ် ၊ လိက်အ်ုလူ.အ်ုထာ့ လိက်သဒ္ဒါဆ်ုသှေ်၊ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ် ဆ်ုသှေ်သီးလ်ုဖး အှ်
၁၂။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုမ္နီဟ်တုာပညာ့သီးလ်ုဖး ဆ်ုလုအင်းစာဝး ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့တ်ုဗုင်.ပုံတံင့်သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဆ်ုအင်းစာအေအ်ှဏှ် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ်ဆ်ုဆိုင်သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်တုာပညာ့ လ်ုမွဲာဝးသီးလ်ုဖး ဆ်ုအင်းစာမွဲာအ်ုဟှေဝ် လ်ုအင်းစာဝးမွဲာအ်ုဟှေဝ် လ၀်ဝေ့ကဲကု်လှ်။`
၁၃။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် အ်ှဝေ့လ်ုလိက်ဖိုင်ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးဏှ် မွဲာအ်ုဟှေဝ် ၊ ပ်ုဆုအေအှ် လ်ုဖုံးစူးဖိုင်ဏှ် မွဲာအ်ုဟှေဝ် မွဲာပ်ုဆုလ၀့် ဟ်ုစါ်သှေ်အေး ။ က်ါကျာအေအှ် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာအေအှ် ဟ်ုလံင်အင်းဃှူ့ဝးအေးလှ်။
၁၄။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် မွဲာထီ့ယောတ်ဟှး မွဲာထီ့ဆူ.ဟှးဏှ် ပ်ုယောဝ်.တ်ုက၀်ဝံင် သွာ့ဝံင်အေဟှံင် ပ်ုသှေ်ယာ့ဝးလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ယိုဝ် မွဲာအ်ုဆိုဒ်ဟှေဝ်ဟှး မွဲာအ်ုဆိုဒ်အိုင်ဟှးဏှ် ပ်ုဍးဝးအ်ုဏင့်ဆာ.စာင်းထင်းစာင်းလင်အေဟှံင် ပ်ုသှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။ ဟ်ုလုဟှာအ်ုပညာ့အ်ှလုအ်ှဏှ် ပ်ုဆံင့်ဏးယောဝ်. အ်ုဆုခုါင်အေဟှံင် ပ်ုသှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။ဆ်ုလုဟှင်းခေါဟ်သီး ဟှေဝ်လ်ုဟှေဝ်ဏှ် ပ်ုဍးဝးဏင်းလင်ယီးလ်ုလင်ယီး ဏင်းလင်ယ်ါလုလင်ယ်ါအေဟှံင် ပ်ုသှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။
၁၅။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် အ်ုပညာ့လ်ုအှ်ဝး ဟ်ုလုဟှာဏှ် အေသှေ်ပညာ့ လ်ုပေ၀့်လ်ုခေ၀်.လ၀့် လာ.ဏင့်သီး ပါလင်အ်ုသာသှေ်ပညာ့ဍောဟ်မာ.လှ်။ အ်ုသဲုးဍောဟ်ထင်းဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဍေဟ်ခ္မိက် လ်ုဍးဝးမာ့ဆ္မ်ါဏင်.ဆောဝ်
၀းသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဍးဝးဝေ့ထီ့လ်ုပ္နာ.ခင်းလင်.ဖိုင်ဟှံင် အ်ှဝးအ်ုသာထီ့အ်ှအးယုဂ်လှ်။
၁၆။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် လ်ုဟှင်ပေ၀့်ခါ့ အေလ်ုသှေ်ပညာ့ဝး ၊ လ်ုသာဝင်းဍ်ာခါ့ ပ်ုလုဏေ၀်.ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာ(ဥစ္စ)ဍ်ာဝး ၊ လ်ုစာင်းထင်းစာင်းလင်ကဲဍ်ာခါ့ ပ်ုလုဏေ၀်.ဓ၀်.ဍ်ာဝး ၊ ထံင်သာ့လ်ုပုသာယှာ.ပ်ုမေံခ်ါပုဏာ.အုိုင်ခါ့ခိုဝ်း ပ်ုမာဆ်ုသှေ်ဝးဏင်.မိင်လိုင်အေးလှ်။
၁၇။ ဖေါဟ်သီးဟှေး မာလောဟ်ဏေ၀်.ပညာ့ဏှ် ၀းလယ့်ဝးကျုင်းက်ုထူ့ဏှ် ၊ ဖေါဟ်သီးဟှေး ကိုဝ်ဏီကိုဝ်ဏာဍေ မာလောဟ်ဏေ၀်.လာ.ပညာ့ဏှ် ပညာ့လ်ုအှ်ဝးဟ်ုလုဟှာဏှ် ဖုံဂမုိုင်.သီးလ်ုဖး ၀းပူဇ၀်.၀းဝါလှ်။
၁၈။ မောဝ်.ဍေဖါ.သီးယိုဝ် ဍုဂ်မာလောဟ်ဖှေ်ဟု ပညာ့အေး လ်ုဍုဂ်မာလောဟ်ဖှေ်ပညာ့ဝး မောဝ်.ဖါဏ်ှအိုဝ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုဖေါဟ်သီး အ်ုယင်.သူ့သ္နာဝေ့လှ်။ ပညာ့လ်ုအှ်စး ဟ်ုလုဟ်ှဏှ် ၊ လေ၀်ဝေ့အေထံင်လ်ုဂမိုင်.ကုာခိုဝ်း အ်ုမေံဃှီ့အေးလှ်။မွဲာဝေ့စေ့သိုဝ် ကုာထိက်စါလေ၀်ဆံင်.လင် လ်ုဟင်္သာကုာသိုဝ်လှ်။
၁၉။ သိင်းလ်ုမိင်လးကုာသီး အ်ုဆူးဏှ် ဆ်ုလုသွဲစူဖှေ်အ်ှဏင်ဟှာအေး။ စူဍးအ်ုဝေ့လှ်။ ထ်ုရဲာအ်ုမေံသးခီု့ဏှ် ဆ်ုလေ၀်ဆင်လင်ဖှေ်အ်ှဏင်.ဟှာအေး ၊ ဖါန်ဍးအ်ုဝေ့လှ်။ တ်ုက၀်ဖ၀့်ဟှယ့်မဲထင်းလ်ုဖိက်ပါပိုင်ကုာဏ်ှသီးလ်ုဖး ဆ်ုလေ၀်ဆူ့လင်ဖှေ် အ်ုရ၀်.အ်ှဏင်ဟှာအေး နိုင့်မိုင့်ဍးအ်ုဝေ့လှ်။ စေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ဂကူဟှေဝ်အွာသီးလ်ုဖး ဆ်ုမာလောဟ်မာဍံင်ဖှေ် အ်ှဏင်.ဟှာအေး လာ.ဏင့်သီးဆ်ုသီးဆ်ုစး ဆ်ုသှေ်ယာ့ဏှ် ဟှယ့်ဖုဟ်ထင်းဝေ့ လ်ုအုသာဖိုင်ဏ်ှလှ်။
၂၀။ ပ်ုအင်းဖူလးဏှ် ၀ိုင်အေလ်ုပါဝး အ်ုရ၀်.သာ့ အ်ှသှေ်အေးလှ်၊ ဟ်ုယှင်းဖေါဟ် မာဃှီ့အ်ုသာဏှ် ဟ်ုယောဝ်.ဃှီ့အေးလှ်။ အင်းဖံင့်အင်းသိုင့် ထီ့လးအေလ်ုပါဝးဏ်ှဍ၀် ၀ုါဆေံဝေ့လှ်။ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ လ်ုသှေ်လိက်ဝး ဟ်ုလုဟှာဏှ် အေကဲထင်းအ္စာလ်ုဝါ်ဍ၀် က်ုလုဂ်ပ်ုဝါဝေ့အေးလှ်။
၂၁။ ဆ်ုထံင်ဏာင်းဖါဝး ပညာ့သီးယိုဝ် မွဲာဝေ့ဆ်ုဍုဂ်ပါင်ဍေသုတပညာ့ ဟ်ုစါ်ကဲဝေ့လှ်။ ဆ်ုမုဍောဟ်ယှာ.ထင်းထ၀့်ဏေ၀်.ဟ်ုဏှ် မွဲာဝေ့ဆ်ုဍုဂ်ပါင်ဍေသုတပညာ့ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဍုဂ်ပါင်ဍေသုတပညာ့ လ်ုဟှာဏှ် မ်ုသှေ်ယာ့ဝေ့ ဆ်ုဟှေဝ်ဆ်ုဝးကဲလှ်။ အေသှေ်ယာ့ဝေ့ ဆ်ုဟှေဝ်ဆ်ုအွာဏှ် ၀ှ်ယ၀့်ယှူးမုက်ဏေ၀်.အ်ုဝေ့ဍး မ်ုကဲဝေ့ ဟှေဝ်ဟှေဝ်၀းဝးလှ်။
၂၂။ ဆ်ုမီ့ ဆ်ုအင်း ဆ်ုမာမေထုံသီးလ်ုဖး ဆ်ုနိုင့်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုမ္နီဟ်မွဲာအ်ုဟှေဝ် အ်ှသှေ်ထ်ုမာ.လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ယိုဝ် ဆ်ုသှေ်ယာ့ဥာဏ်ပညာ့ အ်ှဝေ့ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုသှေ်ယာ့ဥာဏ်ပညာ့အေလ်ုအှ်ဝး ဟ်ုမ္နီဟ်လ်ုဟှာဏှ် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဆ်ုနိုင့်သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။
၂၃။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဆ်ုဝးဍံင် ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့်ဏှ် မွဲာဝေ့ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးပညာ့ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဝးဍံင်ယင်သူ့သ္နာဏ်ှမွဲာဝေ့ ဆ်ုစုဂ်ဆ်ုဆာ့ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဟုဝးအဲကဲုထုက်ဏှ် မွဲာဝေ့ဟ်ုဏင့်ဆာ.ယိုဝ်လှ်။ ဆ်ုကဲထင်းဟ်ုဟှာင်.ဟ်ုဝျာ ဟ်ုဝးပ်ုထဲာသာဏှ် မွဲာဝေ့ဆ်ုဝုံးဆ်ုဝါဏ်ှလှ်။
၂၄။ လ်ုထောဟ်ဟင်္သာကုာဏှ် ကုာအေလေ၀်ဆံင်လင် ဟိုယောဝ်.ဃှီ့အေးလှ်။ လ်ုဇာဒီသိုင့်ကုာဏှ် ဆ်ုနိုင့်အေလေ၀်အှ် ဟ်ုယောဝ်.ဃှီ့အေးလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါကုာဏှ် တုာပညာ့အေလေ၀်အှ် ဟ်ုယောဝ်.ဃှီ့အေးလှ်။
၂၅။ ဟ်ုမ္နီဟ်ခ်ါစီ့စးသီးယိုဝ် လေ၀်အ်ှလာ.ဏင့်လ်ုတုာပညာ့ကုာ ထံင်အ်ုယုက်အုဂ် လာ.ဏင့်သီး မ်ုသှေ်ယာ့ဆ်ုသှေ်ဓ၀်.ဏ်ှမွဲာအေး။ မွဲာဝေ့ဝေ့သိုဝ် နောတ်ဝှး လ်ုသှေ်ဝးအ်ုရ၀်.သာ့သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။
၂၆။ ဟ်ုမ္နီဟ်ဖါန်ဆိင့်ပြင်သီးယိုဝ် လေ၀်အ်ှဝေ့ လ်ုတုာပညာ့ကုာ လ်ုထုရိက်လ၀့် လာ.ဏင့်သီး သှေ်ယာ့ဏးသှေ်ဍးဝေ့ ဆ်ုဟှေဝ်ဟှေဝ်၀းဝးလှ်။ မွဲာဝေ့ ဝေ့သိုဝ် နိုဝ်ဖေုဝ် သှေ်ယာ့သိုင့် အ်ုရ၀်.သာ့သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။
၂ရ။ ဟ်ုမ္နီဟ်ဍူ စ်ါလင်အ်ုသာသီ့ဝုင်းယုဂ်။ကဲထင်းဝေ့ လ်ုသုဂ်ခေါဟ်လ်ုဟှာ လာ.ဏင့်သီး အ်ုစူးဖိုင်ဆ်ုလုအ်ှဏင်.မိင်ဝး ဟ်ုလေ၀်ဝေ့ လ်ုဆုဍုဂ်အ်ုကုာဏ်ှအေးလှ်။ စ်ါလုအ်ုသာ မွဲာတုာပညာ့လ်ုဟှာယုဂ် လာ.ဏင့်သီး အေလု
၀းဍေလိက်လဲာအ်ုဖုံင်ဝး ဟ်ုလ၀်ထင်းလ၀်လင်ဝေ့ ဆ်ုအေးလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ကူ ဗ္နိက်ခါန်.ခါသီးလ်ုဖး မ်ုလေ၀်မ်ုထာင် ဆ်ုလုအ်ုယာင်ဏှ် ဟ်ုထီဟ်ုသိုဝ်အေလ်ုပါဝး ဟ်ုလေ၀်ဝေ့အေးလှ်။
၂၈။ ဟ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့် ဟှာဟှံင်ခါ့ မွဲာအ်ုဟှေဝ် သုင်းသာလ်ုမုက်ဝးခါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် မာဆ်ုဍယ်ဝါထံင်ဟှိုင်းဖိုင်ခါ့ မွဲာအ်ုဟှေဝ် လ၀်ဝုါ်ဝုါဆ်ုခုါင်မွဲာအ်ုဟှေဝ် လ်ုပါကာဆ်ုဝးမွဲာအ်ုဟှေဝ် တုာပညာ့သီးလ်ုဖး ဆု ယဲာမိင်ဏှ် ဍုဂ်ဏဲဖုဟ်ဝေ့ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၂၉။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် ဆ်ုခုါင်က်ုလုဂ်လ၀် လ်ုကုလုဂ်ဏှ် သှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။ က်ုလုဂ်အဲ လ်ုကုလုဂ်အဲဏှ် သှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။ က်ုလုဂ်သာဟှယ့်ထင်း လ်ုကုလုဂ်သာဟှယ့်ထင်းဏ်ှသီး သှေ်ယာ့ဝေ့ဆေ၀်.လှ်။ ခိင့်ဖါအင်းဏင်ယောဝ်.လင်အ်ုသာသီး ဝေ့ဏ်ှသိုဝ် ဟ်ုလုဟှာဏှ် မွဲာတုာပညာ့ ဟ်ုစါ်သှေ်ဝေ့လှ်။
၃၀။ အ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့် အ်ှဏင်.မိင်အေး မ်ုအင်းဝးသာလ်ုအုဟှေဝ် ၊ အ်ုဟှာင်.ခ၀့်အ်ှအေး မ်ုဏံင့်ဝးသာ ဍေဖုံဟှာင်.ဆံင်း ၊ အ်ုပညာ့ခ၀့်အ်ှအေး မ်ုမာလောဟ်ဖှေ်ဝးသာ ဍေဟ်ုဖုံဟှူ့ဟှာဆေ၀်.၊ ဟ်ုမ္နီဟ်သိုင့်မိင်ဏှ် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့
၃၁။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် ဖုံလ်ုကိုဝ်စာင်းဝး လာ.ဏင့်သီး လေ၀်စာင်းကဲိုဝေ့ကု်လှ်၊ ဟ်ုဖုံလ်ုအင်းစာဝး လာ.ဏင့်သီး
လ၀်ဆ်ုထုက်သှေ်လိုင်အေး။ ဟ်ုဖုံလ်ုအင်းအုဂ်ဝး လာ.ဏင့်သီး အ်ုဏင့်ဆာ.ခ၀့် အုဂ်ဃှီ့လင်အ်ုသာ ထုက်သှေ်ဏင်.ဆောဝ်လိုင်အေး။ ဆ်ုသိုင့်မိင်ဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါသီး အ်ုဏါင်း (လက္ခဏာ)လှ်။
၃၂။ ဟ်ုမ္နီဟ်လးအိုင်သီးလ်ုဖး မာဃှီ့အ်ုသာဆံင်းဝေ့လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်အ်ုပညာ့လ်ုအှ်ဝးသီးလ်ုဖး လ၀်ဟှေဝ်အ်ုသာ ထုက်သှေ်လိုင်အေး။ ဍ်ာနုံ.ထီ့လ်ုဃှဲိုဝးသီးလ်ုဖး ပယ်ပ၀်သာဍောဟ်မာ.လှ်။ ဆ်ုနိုင့် ဟ်ုဝါ်အ်ုနူ.ထီ့ လ်ုဏေ၀်.
၃၃။ ဆ်ုလုဍေဟ်သီးယိုဝ် ဆီ့ဏင်အ်ှဝေ့လ်ုပ္နာ.အှေ်ပုံခေါဟ်ဍာဟှံင် ၀းဍံင်ဝေ့ဍေ ဇာဒီသိုင့် လာ.ဏင့်သီး ကုာအေ ၀ုိုဟ်လ်ုဖိုင့်ခိုဝ်း မာဆ်ုဝးဏင်.မိင်အေးလှ်။ ဟှင်းကိုဝ်သာ့ဝေ့ပျေဝ်ပျေဝ်လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ် တုာပညာ့လ်ုမွဲာဝးသီးဍ၀် ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ လ၀်ဍံင်ခုါင်ဍံင် လာ.ဏင့်တုာပညာ့သီး တုာပညာ့သီး အေဟှယ့်အင်းစာလ်ုဖိုင့် လ၀်ဆ်ုဝးဏင်.မိင်လိုင်အေးလှ်။ အ်ုလူ.သ၀့်ထင်းသာ့ဝေ့ အု-အု-အ်ုလှ်။
၃၄။ ဆ်ုလုဍေဟ်သီးယိုဝ် ဆီ့ဏင်ဆံင်ဆ၀်.သှေ်ယုဂ် လာ.ဏင့်သီး ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဇာဒီသိုင့်သိုဝ်သှေ်အေးလှ်။ ဆ်ုလုထောဝ်သီးယိုဝ် ဟှင်းကိုဝ် အောဝ် အောဝ်သှေ်လာ.ဏင့် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဖူထင့်သိုဝ် သှေ်အေးလှ်။ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဆ်ုလုတုာပညာ့သီးလ်ုဖး လ်ုဟှာဍေ လ်ုဟှာဏှ် ၀းဍံင်လိုဝ်းသာဝေ့အေးလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်သှေ်ပညာ့ လ်ုပေ၀့်လ်ုခေ၀်.သီးလ်ုဖး ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် တုာပညာ့ဖါဍောဟ်သိုဝ်သှေ်အေးလှ်။
၃၅။ ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာသီးယိုဝ် စေ၀်ဓံင့်အ်ှအးယုဂ် လာ.ဏင့်သီး ယိုင်သှေ်ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ တုာပညာ့သီးယိုဝ် ၀း လ၀်ဝးခုါင် ဆ်ုအေအး လာ.ဏင့်သီး လ၀်လင်ဝေ့ဆု လုက်သှေ်ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ ဆ်ုလုမေံသးသီးယိုဝ် ဆ်ုဟှေဝ်ဆ်ုဝး (ရူပါရုံ) ဏှ် ယောဝ်.ဖိုင်ဝေ့ ၀ုယ်သှေ်ဏင်ဆောဝ်အေး။ ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ထီ့မာ့ဆ္မ်ါဖိုင် ဃှဲိုထင်း လ်ုသှေ်ဝး ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၃၆။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် အ်ုခိင်.ဃှီ့အ်ုဟှင်ဟှေဝ် အ်ှလာ.ဏင့် ဍေစေ၀်တုဂ် ဓံင့်တုဂ် မွဲာလာ.ဏင့် ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာအ်ုဖေါဟ် ခွါ့သီး အုဥာဏ်ပညာ့အေလ်ုအှ်ဝးစ်ါဝိုဝ် ဟ်ုယောဝ်.ဃှီ့အေးလှ်။ မွဲာဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဖ၀့်တ်ုကိုဝ် သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ အ်ုဖ၀့်ဟှေဝ် လာ.ဏင့်သီး အ်ုရ၀်.နိုင့်မိုင့်အ်ှသှေ် ဏင်ဆောဝ်အေးလှ်။
၃၇။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် မွဲာလာ.ဏင့် ဟ်ုမ္နီဟ်လင်ဖိုဟ် ဟ်ုမ္နီဟ်ယှင်းလာ.ဏင့်သီး မူ.လ်ုဏီခိုဝ်း ကဲထင်းဝေ့ဟ်ုဍောဟ်ဟ်ုမူ.သှေ်လှ်။ မွဲာဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခါ် က်ုထူ့လာ.ဏင့်သီး မူ.လ်ုဏီ.ခိုဝ်း ကဲထင်းဝေ့ သယ်ဌီ့သင့်မင်သှေ်လှ်။ စင်ဝိုဝ်ဏှ် ဟ်ုခွါ့လ်ုဟှာဟှေဝ် လ်ုဟှာဟှေဝ် ဟ်ုအင်းကှ် ခုါင်ဆာ့ဝေ့ ဏင်ဆောဝ်အေးလှ်။
၃၈။ ဟ်ုထီဟ်ုဖုဲာ လ်ုဟှာဟှေဝ် လ်ုဟှာဟှေဝ် ဟ်ုဍုဂ်သှေ်ဝးသာ ဆ်ုအေဖုဲာဏှ် ဟ်ုမာလောဟ်ဖှေ်ဝေ့ ဆ်ုသှေ်ကိုဝ်မိင်ဍေဟှေဝ်အေး။ ဟ်ုမာလောဟ်ဖှေ် အ်ုဝုင်အေအးဏှ် ထံင်ဏာင်းဏေ၀်.ဝေ့ ကဲလိုင်အေးလှ်။ မွဲာဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဆ်ုခုါင်လ်ုသှေ်ဝး မီ့မင်.ဆ်ုသိုဝ်လှ်။ လ၀်ထာင်ဖှေ်ဝေ့ ဖုံဟှူ့ဟှာသှေ်ဏင်.မိင်အေးလှ်။
၃၉။ ဆ်ုတာင်ဖိုင်ဆာ.သီးလ်ုဖး ဝေ့သိုဝ် ဖိုင်မ်ုထေံဖါသိုဝ်ဏှ် ဍောဟ်ဝေ့မွဲာအေး။ ဖိုင်ဏှ် ဝေ့သိုဝ် မ်ုဟှေဝ်ထင်းသိုဝ်ဏှ် ဍောဟ်ဝေ့မွဲာဝိုဝ်လှ်။ အ္စာဆြာ့သီးလ်ုဖး ဝေ့သိုဝ် အ်ုထီအ်ုဖုဲာ မ်ုယှင်းဒဒုက်သိုဝ် ဍောဟ်ဝေ့မွဲာအေး ဝေ့မ်ုသှေ် ယာ့ဆု ဝေ့ဏးဆ်ုမုသှေ်ဏှ် ဍောဟ်ဝေ့မွဲာဝိုဝ်လှ်။
၄၀။ စမ္ပါဝင်ဖ၀့်ဏှ် ပ်ုအေ၀ံင်းထင်းဍေ ဖ၀့်တ်ုကောဝ်လးအေဟှံင် မ်ုနိုင့်မိုင့်ဝေ့သှေ်ဖ၀့် လ်ုမိင်လှ်။ (က်ုယဲာဖ၀့်ဏ်ှလှ်)မွဲာအေး နိုင့်မိုင့်ပျဝေ့ဍေ ဖ၀့်တ်ုကောဝ်လးဏ်ှဆေ၀်.လှ်။ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်လှ် ဟ်ုမ္နီဟ်လ်ုဍုံလုက်ဖိုင်သီးလ်ုဖး အေအ်ှပျဍေ တုာပညာ့ဏှ် ဟှေဝ်ဏေ၀်.အ်ုကဲကိုဝ်ဟှာဍေဆေ၀်.လှ်။
၁။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုဝးပ်ုထဲာဝေ့သာဍေ ဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင်ဏ်ှလှ်။ ဟ်ုဝးပါထီပါသိုဝ်ဝေ့ ဍေဟ်ုမ္နီဟ်ဟှေဝ်အွာတံင် လံင်ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဟှေဝ်ဆ်ုအွာ ဆ်ုတ၀်ဆ်ုလံင်သီး အ်ုဓ၀်.ဏှ် ပ်ုအေသှေ်ယာ့ဆေ၀်.စ်ါဝိုဝ် ဟှေဝ်ဏေ၀်.ဟု ပြေဏေ၀်.ဟု ကဲဝေ့လှ်။ ကါင်းကံင်းစီ့စးဏေ၀်.ဟု ကဲသှေ်ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၂။ ဍေဟ်ုမ္နီဟ် ကါင်းကံင်းစီ့စးဏှ် ပ်ုပါထီပါသိုဝ်ဝေ့အေး ။ ပ်ုလံင်ပျဝေ့ဟှေဝ်အေး။ ပ်ုဝးပါထီပါသိုဝ်ဝေ့ ဍေဟ်ုမ္နီဟ် တ၀်လံင်ဟှေဝ်အွာဏ်ှလှ်။ ကိုဝ်ဏီဟှးဟှဝ် ပ္တဲုလာ.ဆ်ုဝုံးသီ့လာဏှ် ပ်ုဝးဆံင့်မံင်း ပ်ုဝးဏင်းထင်းဝေ့ ဆ်ုကဲထင်းသှေ် ဆ်ုဟှာဟှံင်သှေ် ဓ၀်.သင်္ခါရဏှ် ကိုဝ်ဏီဟှးဟှဝ်ဍေလှ်။
၃။ ဆ်ုလုကူးသးမိင့်သီးလ်ုဖး အ်ုဖင့်ခေါဟ်၀၀်စှ် ဟ်ုယောဝ်.ဟှေဝ် လာ.ဏင့်သီး အ်ုသာဖိုင်ခ၀့် ဆ်ုဖေါဟ်ဃှာ.အ
ှ်ဝေ့ ဃှဲိုထာ.လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ် ကါင်းကံင်းစီ့စးသီးလ်ုဖး မွဲာဝေ့ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ အ်ုဖင့်ခေါဟ်ဟှေဝ်အွာ လာ.ဏင့်သီး အ်ုသာဖိုင်ခ၀့် ကါင်းကံင်းစီ့စးဍးဝေ့လှ်။
၄။ ဆ်ုလုနွဲာသးမိင့်သီးလ်ုဖး အ်ုဖါ်ခေါဟ် အ်ုဆူးအှ် ဟ်ုယောဝ်.လ်ုဃှီ့ဝး လာ.ဏင့်သီး အ်ုသာဖိုင်ခ၀့် ဆိုင့်နိုင့်မိုင့်
ဝေ့လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင်သီး ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ အ်ုဖင့်ခေါဟ်လးအိုင်လာ.ဏင့်သီး အ်ုသာဖိုင်ခ၀့်ဟှေဝ်အွာဍး ဝေ့လှ်။
၅။ ဆ်ုလုဆံင်လံင့်ပ္ကေ၀် (စုန့်ဗ္ကေ၀်) သီးယိုဝ် အေဃှာင့်ထာလာ.ဏင့်သီး အ်ုရ၀်.နိုင့်မိုင့်ဏှ် ခွိက်ယှိုဝ်ဝေ့ဏင်.ဆေါဝ်အေးလှ်။ က်ုဆင့်ထီ.သီးလ်ုဖး လေ၀်ထံင်လာ.ဏင့် လ်ုဆုဍုဂ်ဆ်ုအုကုာသီး သာမဲသာဖုါင်ဆ်ုသှေ်အေးလှ်။ ဆီ့ဖေါဟ်သီးယိုဝ် ဟ်ုဟှိက်လာ.ဏင့်ဍေခဲုထာသီး အ်ုရ၀်.ဆိုင့်ဏှ် လင်မာ.သှေ်အေးလှ်။ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဆ်ုလုတုာပညာ့သီးလ်ုဖး ယှင်းဒဒုက်လာ.ဏင့်သီး ဆ်ုတ၀်ဆ်ုလံင် အ်ုဓ၀်.ဏှ် ခွိက်ယှိုဝ်ဝေ့ ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၆။ ဆ်ုလုဇာဒီသိုင့်သီးယိုဝ် အ်ှဝီ.လင်ဍောဝ် လာ.ဏင့်သီး သိင်းလး ၀းလးဏှ် အင်းဝေ့ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ အေဃွှဲာ လာ.ဏင့်သီး က်ုဆင့်ယးဏှ် အင်းဝေ့ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၇။ ဟ်ုမ္နီဟ် အ်ုဆိုဒ်ဟှေဝ် ယောဝ်.ခွါ.အ်ုဆိုဒ်သီးလ်ုဖး အ်ုဏင့်ဆာ. ယှင်းဒဒုက်လာ.ဏင့်သီး ဆ်ုလုဟှေဝ်၀းဏှ် မာဝေ့ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၈။ ဆ်ုလုဆံင်လံင့်ပ္ကေ၀်သီးယိုဝ် ယှူးခိုင်းဍောဟ်မာ.လှ်။ ဆ်ုယှူးခိုင်းဏာင်း ဆံင်လံင့်သီးယိုဝ် မွဲာဝေ့လာလှ်။ ဆ်ုယှူးခိုင်းဏာင်းလာသီးဍ၀် မွဲာဝေ့ ဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင်သီး အ်ုဆုခုါင်ဏ်ှလှ်။
၉။ မူမေံဏှ် အေထင်းဝေ့ လ်ုမူ.နုက်ခ၀့်သီး သှေ်ဝေ့လှ်။ လာင့်တ်ုမိုဝ်သိန္နရာ (မြင့်မိုရ်တောင်)ဏှ် အေခူလင်သီး သှေ်ဝေ့ဍ်ာလှ်။ တ်ုက၀်ဖ၀့်ဏှ် အေဖါထင်းဝေ့ လ်ုလာင့်ခေါဟ်လံင်ခေါဟ်သီး သှေ်ဝေ့ဍ်ာလှ်။ မှေ်လ်ုနာရတ်ဖိုင်သီး ယှူးခိုင်းလင်သှေ်ဝေ့ဍ်ာလှ်။ လာ.ဏင့် ဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင်ဟှေဝ်အွာသီး အ်ုဆုခုါင်ဏှ် ၀ုါ်ဝုါအင်းလယ်သာသှေ်ဝေ့ ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၁၀။ ဆ်ုခေါဝ်.ကုာဏှ် ဆ်ုလုသိင်းလာယှူးသီးလ်ုဖး ယှူးခိုင်းဍောဟ်မာ.လှ်။ ဆ်ုယှူးဏာင်းသိင်းလာယှူးဏှ် မွဲာဝေ့ မောဝ်.ဖါ.၀ုဂ်ထိင်.သီး အ်ုလာယှူးလှ်။ ဆ်ုယှူးဏာင်း မောဝ်.ဖါ.၀ုဂ်ထိင်.သီး အ်ုလာယှူးဏှ် မွဲာဝေ့ အ္စာဆြာ့သီး အ်ုလာယှူးလှ်။ ဆ်ုယှူးဏာင်း အ္စာဆြာ့သီး အ်ုလာယှူးဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာအ်ုလာယှူးလှ်။ ဆ်ုယှူးဏာင်း ဟု
၀ုံးဟ်ုဃွှာ အ်ုလာယှူးဏှ် မွဲာဝေ့ ကျာ်က်ုဆာ.ကုံင်တွဝ့်လင်ဖှေ် သုဂ်ဂမုင်.အ်ုဓ၀်.ဏ်ှလှ်။
၁၁။ ဆ်ုလုဏေ၀့်မောဝ်.သီးယိုဝ် ၀းသာဝေ့ဖ၀့်အ်ုနိုင့်မိုင့်ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင်သီးယိုဝ် ၀းသာဝေ့ ဆ်ုအင်းအုဂ်(ဂုဏ်) ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုလုဍူလာ့မောဝ်.ယေ၀့်သီးယိုဝ် ၀းသာဝေ့ ဆ်ုအူးဆ်ုအံင်ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုမ္နီဟ်ကာင်းကံင်းစီ့စးသီးလ်ုဖး ၀းသာဝေ့ ဆ်ုသာဟှယ့်ထင်းဏ်ှကု်လှ်။
၁၂။ ဆ်ုလုဟ်ုမ္နီဟ် အ်ုမောဝ်.လ်ုဟှေဝ်၀းသီးလ်ုဖး ခုါင်ထင်းခုါင်လင် ခါမွးယုမျာ.ဍးဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုမ္နီဟ် အ်ုဖါ.လ်ုဟှေဝ်၀းသီးလ်ုဖး စာင်းထင်းစာင်းလင် အ်ုအှ်အ်ုဆံင့်အ်ုဒ္ဂေတ်ပွါ ဟှာဟှံင်ဝေ့ဍးလှ်။ အ်ုမောဝ်.အ်ုဖါ.လ်ုဟှေဝ်၀း ဟ်ုလုဟှာဏှ် ခုါင်ထင်းခုါင်လင် ဒ္ဂေတ်ပွါ ဟှာဟှံင်လုက်ဆိင့်လှ်။
၁၃။ ဆ်ုလုဟ်ုမ္နီဟ် အ်ုမောဝ်.ဟှေဝ်သီးလ်ုဖး ခါုင်ထင်းခုါင်လင်မုက်ဍးဝေ့လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်အ်ုဖါ.ဟှေဝ်အွာသီးလ်ုဖး အ်ုအှ်အ်ုဆံင့်အ်ုဒ္ဂေတ်ပွါ ဟှေဝ်ဍးဝေ့လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်အ်ုမောဝ်.ဍေအ်ုဖါ.ဏီ့ဟှာ အေဟှေဝ်ဏှ် ခုါင်ထင်းခုါင်လင်ဒ္ဂေတ်ပွါ ဟှေဝ်အွာဍးဝေ့လုက်ဆိင့်လှ်။
၁၄။ ဆ်ုဟုထင်း ဆုှဍုဂ်ခါ့ဏှ် ဟ်ုဝးသာဟ်ုမ္နီဟ် လ်ုအုဍူဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဟုသာထင်းအာင်းလောတ်သာခါ့ဏှ် ဟု
၀းသာဝေ့ဟ်ုမ္နီဟ် လ်ုအုနိုဝ်အာင်းဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဟုအင်းဝး မေ၀်အဲုးသိုင့်ဆိုင့်ခါ့ဏှ် ဟ်ှဏင်းထင်းဝး ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့် လ်ုဟုသာထိင်.ဏ်ှလှ်။ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်လှ် ဆ်ုလုဟ်ုဍးခံင်ဝး ဆ်ုကးဆ်ုဟှယ် ဆ်ုနုင့်ဆ်ုဏာခါ့ဏှ် ဟ်ုဝးသာလ်ုဟုမ္နီဟ် တုာပညာ့အ်ှဏှ်လှ်။
၁၅။ ထဲုးလ်ုဍူဍေလ်ုဍူ အေဍးခံင်လောဟ်သာခါ့ဏှ် မင်လောတ်သာ အိင်ထင်းဝေ့အ်ုမဲလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ကာင်းကံင်း လ်ုဖး အေဍးခံင် ဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင်ခါ့ဏှ် မ်ုလ၀်ဟှာဟှံင် မ်ုအင်းက်ှဝးသာဝေ့လှ်။
၁၆။ ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာ လ်ုမိင်ဟှေဝ်လ်ုမိင်ဟှေဝ် ဟ်ုဏင့်ဆာ.ခ၀့် မာဝေ့အေဖဲုဟှေဝ်အေး။ ဖုံဃှာဃှံင်ခ၀့် ဟ်ုအင်းမိုင့်ဝေ့အေဖဲုဟှေဝ်အေး။ ဟ်ုမ္နီဟ် ဆ်ုသှေ်ယာ့လ်ုအှ်ဝး အုဥာဏ်ပညာ့ လ်ုအှ်ဝးသီးလ်ုဖး မာကုံင်ဆ်ုမာ မာဆ်ုမာဖဲု အု ခေါဟ်စံင် ကေခါင့်ခိုဝ်းခ၀့်ဏှ် ဏံင်ယာ.လင်ထာင်အ်ုသာ ထုက်သှေ်လိုင်အေးလှ်။
၁၇။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဆ်ုသုင်းထင်း ဆ်ုသာဟှာင့်ဏှ် ဟ်ုဝးထုဂ်ဝုဂ်ခွိက်ဝေ့အေဖဲုလှ်။ ဆ်ုခေါဝ်.သုင်းဝ်ှသာဏ်ှဍ၀် ဟ်ုအှ်ကှေ်ဝေ့ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုမ္နီဟ် စ်ါဂုဏ်စ်ါတာသှေ် အ်ုဆုခုါင်သီးလ်ုဖး ကျာ်က်ုဆာ.ကုံင်သီး အင်းအုဂ်ထိုင့်သာ့ဝေ့ ထုက်သှေ်ဏင်.ဆောဝ်လိုင်အေးလှ်။ ဆ်ုဝးဆာင့်ဆ်ုခုါင် ဆောဟ်ဆု စ်ါဆုသီး လ်ုဖးဏှ် ဟ်ုဝးထုဂ်သုင်းထုဂ်သာဝေ့အေဏေ၀်.လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုထုဂ်သုင်းထုဂ်သာဏေ၀်.သီးယိုဝ် မွဲာဝေ့အ်ုဟှေဝ်ထုက် အ်ုပြေထုက်ဏ်ှလှ်။
၁၈။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုဝးအ်ှလုဆ်ုနိုင့်အူးနိုင့်ဃှံင်ကုာ ဆ်ုကုထိက်ကုာသီးလ်ုဖး ယှင်းဒဒုက်ဍောဟ်ဝေ့လှ်။ ဆ်ုယှင်းဒဒုက်ဏာင်းဟ်ုဝးအှ် ဆ်ုနိုင့်အူးနိုင့်ဃှံင်ကုာဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုဝးအ်ှဍိင်ဍေ ဟ်ုမ္နီဟ် ဟ်ုလုဝးမေံဝးဏ်ှလှ်။ ဆ်ုယှင်းဒဒုက်ဏာင်း ဟ်ုဝးအ်ှဍိင်ဍေ ဟ်ုလုဝးမေံဝးသီးလ်ုဖး မွဲာဝေ့ဟ်ုဝးအ်ှဍိင်ဍေ ဟ်ုမ္နီဟ်လ်ုသှေ်ယာ့ဝး ဆ်ုဂုဏ် ဆ်ုတာဝးဏ်ှလှ်။
၁၉။ အေလ်ုဝး ဟ်ုအင်းသံင်းခါ့ဏှ် ဟ်ုဝးအင်းသံင်းဝေ့လှ်။ ဆ်ုမာဆု လ်ုဟှေဝ်၀း လ်ုဆိင့်ပြေ၀းဏှ် ဟ်ုအေဍးအိုဝ် ဟ်ုဝးအင်းလး ဟ်ုဝးအင်းယာ့ဝေ့လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ် အင်းသံင်းဆ်ုသှေ်သီးလ်ုဖး တုာပညာ့သီး ဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင်သီး အင်းအုဂ်ဝေ့ဍောဟ်မာ.လှ်။ လာ.ဏင့်သီး ဟ်ုမ္နီဟ် ကာင်းကံင်းစီ့စးသီးလ်ုဖး ဖီးမေံဍးဝေ့ ဆ်ုအင်းသံင်းလ၀်လင် ဆ်ုခုါင်ဏ်ှလှ်။
၂၀။ ဟ်ုမ္နီဟ် ဍောဟ်ဏာင်းဟ်ုသီးဏှ် ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာအိုဝ် ဟ်ုဝးဆဲပေ၀့်ဝေ့ဟ်ုသာလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ဍူဏာင်းဟု ကုံင် ဏာင်းဟ်ုသီးဏှ် ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာအိုဝ် ဟ်ုဝးထုဂ်ဖါခွိက်ဝေ့ ဝေ့မ်ုကာင်ဖါသာသိုဝ်လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်လင်ဖိုဟ်ဏာင်းဟု လင်ပေ၀့်ဏာင်းဟ်ုသီးဏှ် ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာအိုဝ် လ်ုပေ၀့်လ်ုပေ၀့် ဟ်ုဝးဖှေ်လင့်အင်း ဟ်ုဝးဖှေ်လင့်အ၀်ဝေ့လှ်။ ဟု မ္နီဟ်ဏေ၀့်ဟှံင်ထ၀့်ဟှံင် ဍေဟ်ုသီးဏှ် ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာအိုဝ် ဟ်ုဝးကုက်ဏေ၀်.ဝေ့ ဍေ၀ိရိယလှ်။
၂၁။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဆ်ုအုကင်ဏှ် မွဲာအ်ုကင်ဟ်ုစါ် သှေ်ဍ်ာအေးလှ်။ ဆု်လ်ုသင့်ဝုံးသင့်ဃာ့ အ်ုဆုဖ်ါဆုမာ (သံဃိက)သီးလ်ုဖး မွဲာဝေ့ဆ်ုအုကင်ဟ်ုစါ် သှေ်ဝေ့လှ်။ ဆ်ုအုကင်ဏှ် သီးဏေ၀်.ဟ်ုကဲဝေ့ဏင်.၀ုင်လှ်။ လာ.ဏင့် သီး သင့်ဝုံးသင့်ဃာ့သီး အ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့်(သံဃိက) အ်ုကင်ဏှ် သီ့ဏေ၀်.ဟ်ှကဲဝေ့ အးဝုင်အးကျးဝေ့ဍးလှ်။
၂၂။ ဆ်ုအုဖဲုအ်ုယှာ့သီးလ်ုဖး မွဲာဝေ့ က်ုသှေ်ဟှေဝ်အွာသီး အ်ုဂုဏ်တာဏှ် ဟ်ုဝးသှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုအ်ုထုဂ်ဆ်ုဃှိုင့် ကဲသီးလ်ုဖး ဆ်ုနိုင့်ယှာ.ဟှေဝ်အွာသီး အ်ုဂုဏ်တာဏှ် ဟ်ုဝးသှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုစါ် ဏေ၀်.အ်ုနူ.ထီ့သီးလ်ုဖး ဆ်ုနိုင့်မောဝ်.ဟှေဝ်အွာသီး အ်ုဂုဏ်တာဏှ် ဟ်ုဝးသှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုလ၀်ထာင် ဆ်ုကုံးဆ်ုမံင်းဝီးဝီးသဲု့သဲု့သီးလ်ုဖး ဟ်ုလ၀်ထာင်ဝေ့ ဍေတုာပညာ့သီး အ်ုဂုဏ်တာဏှ် ဟ်ုဝးသှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။
၂၃။ ဟ်ုမ္နီဟ် တ၀်လံင်သီး အ်ုဆုအ်ှဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာဏှ် အ်ှယှာလာ.ဏင်သီး မွဲာဝေ့ ဝေ့ထီ့က်ုမိုင့်သိုဝ် ဟ်ုအင်းဟ်ုအ၀် လုက်သှေ်ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ် ကာင်းကံင်းသီး အ်ုဆုအ်ှဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာအး လာ.ဏင့် သီး မွဲာဝေ့ ဝေ့ထီ့ဟှင့် လ်ုမာ့ဆ္မ်ါဖိုင်ဏ်ှသိုဝ် အ်ှအးလာ.ဏင့်သီး ဟ်ုအ၀်သှေ်ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၂၄။ ဆ်ုလုထီ့ခေုါဟ် ယှောဟ်ခေုါဟ်သီးလ်ုဖး အ၀်ထာင်ဝေ့ အ်ုသီးထီ့ဏှ် ဏင်ဆောဝ်အေးလှ်။ ဆ်ုလ်ုသိင်းသီးလု ဖးအင်းထာင်ဝေ့ အ်ုသီးအ်ုသး ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ မွဲာဟ်ုဃှာ.ဃှံင်အ်ုဟှင်.ထ္မာ.လှ်။ ဆ်ုလုဆ်ုဆိုင်သီးလ်ုဖး ဆိုင်လင်ဖှေ်ဝေ့ ထီ့အေအး လာ.ဏင့်သီး အ၀်ထာင်ဝေ့အ်ုထီ့ဏှ် ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။မွဲာဝေ့အ်ုဃှာ.ဃှံင်အ်ုဟှင်. ထ္မာ.လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင် အ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့်ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာသီးဏှ် ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ မွဲာဝေ့ ဟ်ုဃှာ.ဃှံင်အ်ုဟှင်. ထ္မာ.လှ်။
၂၅။ ဆ်ုလုဟှေဝ်၀းသီးဏှ် ဟ်ုမူ့လာ.ဏေ၀်.ဝေ့အေး။ ဆ်ုလုဟှေဝ်လ်ုဝး၀းဏှ် ဟ်ုကုံးဟ်ုမံင်းဝေ့အေး။ ဟ်ုဝးကုံးဟ်ုဝးမံင်းဝေ့ဍေ ဓ၀်.အ်ုဖိုင်သာဏ်ှလှ်။ ဆ်ုအုခါ့ လုက်ပုဝ်ဟှံင်(မောဃကာလ)ဏှ် ဟ်ုဝးသာဝေ့အေး ဟ်ုမာဝေ့အေးလှ်။
၂၆။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဏ်ုလုကုံးမံင်းဝးသီး ကဲထင်းဝေ့သှေ်လှ်။ ဏ်ုကုံးဏ်ုမံင်းယုဂ်သီး ဟှာဟှံင်ဝေ့သှေ်ဆေ၀်.လှ်။ ဆ်ုဝေ့ဏ်ှသိုဝ် မွဲာဝေ့ လောကဓမ် အ်ုဓ၀်.လှ်။ မူးမွဲာအ်ုဟှေဝ် ခွါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဆ်ုလု ဆ်ုအှ်ဆ်ုဆံင့်ဒြပ်ခ်ုသိုဝ်သီးယိုဝ် ဝေ့သိုဝ် ဏ်ုသာအ်ှသိုဝ် ဝေ့သိုဝ် ဏ်ုကုံးဏ်ုမံင်းထသိုဝ်ဏှ် ကဲထင်းသှေ်ကုင်အေးလှ်။
၂၇။ ဆ်ုလုဟှာဏှ် လံင်ပျဝေ့ ဟ်ုမ္နီဟ်ကာင်းကံင်းစီ့စးဏ်ှလှ်။ လ်ုဟုမ္နီဟ် တ၀်လံင်ဏှ် လံင်ပျဝေ့ဏင်.ဆောဝ်အေး။ ဟ်ုမ္နီဟ် ကာင်းကံင်းသီး အ်ုဆုခုါင်ဏှ် ဆံင့်ဏးဝေ့ မုက်မာ.လှ်။ ၀းဏေ၀်.အ်ုသာဍောဟ်မာ.လှ်။ ဟ်ုဏှ် အေမာဝေ့ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်လ်ှစါ်ဝိုဝ် မူ.လ်ုဏီခိုဝ်း မ်ုဟှာဟှံင်ဏေ၀်.ဝေ့ဍးအု ယ၀့်ကးက်ါလှ်။
၁။ ဆ်ုလုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါသီးဏှ် ဟ်ုအဲထ်ုလိုင့်ဝေ့ဟှေဝ်အေး။ ဟ်ုမာဍုဂ်သာဝေ့ဟှေဝ်အေး။ ဟ်ုတင်ထ လ်ုခေါဟ်ဃှဲုးခေါဟ်ဍံင်လံင် လာ.ဏင့်သီး ဟှေဝ်ဏေ၀်.ဟ်ုသီးဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုတင်ထ ဍ်ာနုင်.ထီ့လ်ုဃှဲိုဝး ပယ်ပ၀်သိုဝ်လှ်။
၂။ ဆ်ုလုဝူ.သီးယိုဝ် အ်ုသာအိုင်ဍောဟ်မာ.လှ်။ ဆ်ုအုသာ အိုင်ဏာင်းဝူ.ဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခါ် ဟ်ုမ္နီဟ်ကာင်းကံင်းဏ်ှလှ်။ ၀ူ.ဏှ် အ်ုသာအိုင်လာ.ဏင့်သီး အ်ုကင်ဏှ် ဟ်ုဝေင်ဍေသီး ဍေဖါ.၀ုး(ဗလး)သှေ်ဍ်ာဝေ့လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါသီးလ်ုဖး ဍေသီးဍေဖါ.ဏင်မိင်သီး ဟ်ုဝေင်ဝုးသှေ်လ်ိုင်အေးလှ်။
၃။ ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါလုဟှာဏှ် ယ်ုယိုဝ်မွဲာ ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါလုဟှာလှ်။ အေသှေ်ယာ့လင်သာဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.စ်ါဝိုဝ် မွဲာလာ.ဏင့် ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါသီး ကဲထင်းတုာပညာ့သှေ်ဍ်ာဝေ့လှ်။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် မွဲာဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခါ် လာ.ဏင့်သီး ပါ လင်အ်ုသာ မွဲာဟ်ုမ္နီဟ်ဖါန် တုာပညာ့အ်ှလ၀့်စ်ါဝိုဝ် ဟ်ုလုဟှာဏှ် မွဲာဝေ့မ္နီဟ်ပုဂ္ဂိုလ် အ်ုအိုင်ခ်ါထုက်လ်ုဟှာလှ်။
၄။ ဟ်ုမ္နီဟ်ခ်ါစီ့စးလ်ုဟှာဏှ် မာလာ.ဏင့် ဆ်ုလုဟှေဝ်ဆ်ုလုဝး၀းသီး အ်ုခါ့အေလ်ုထံင်ဍ်ာဝး ဆ်ုဍယ်ဝါဟှယ့်ခုက
်ဝ်ါအု ကဲဍ်ာအေးလှ်။ အ်ုဆုဖ်ါဆုမာဏှ် ပါလင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဏေ၀့်စင်သိုဝ်ဍ်ာလှ်။ အ်ုခါ့ထံင်ခိုဝ်းလ်ုဖိုင့် ဆ်ုဍယ်
၀ါအေဟှယ့်ခုက်ဝ်ါဖ၀်.စ်ါဝိုဝ် မ်ုဝးဍးဝေ့ ဆ်ုယှင်းဒဒုက်လှ်။
၅။ ဟ်ုမ္နီဟ်ခ်ါစီ့စးသီးလ်ုဖး အ်ုဟှာင်.အေဍောဟ်ထင်းဟှေဝ်အေး။ မာနိုင်မာဖဲုဝေ့ဆ်ုလှ်။ အင်းဟှူးမာဟှံင်ဝေ့ဖုံဆ်ုလှ်။ အ်ုပညာ့ယှာဆ်ုသှေ်ယာ့ လ်ုအှ်ဝး ဟ်ုမ္နီဟ်ခ်ါစီ့စးသီးဏှ် အေသီ့ခိုဝ်းလ်ုဖိုင့် မ်ုဝးလင်ဝးဝေ့ လ်ုနာရတ်အဍာ အိုဝ်လှ်။
၆။ ဆ်ုမာဟှာဟှံင် လ်ုဟှိင်းဖိုင်ဃှင့်ဖိုင်ဏှ် မွဲာဝေ့ယူ.လှ်။ ဆ်ုမာဟှာဟှံင် မိင်လးကုာဏှ် မွဲာဝေ့ဆ်ုအုဂ်လှ်။ ဆ်ုမာဟှာဟှံင်ထောဟ်ဏှ် မွဲာဝေ့ ကုာလှ်။ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဆ်ုမာဟှာဟှံင်မ္နီဟ်သီးလ်ုဖး မွဲာဝေ့ ပုဏားလှ်။
၇။ မီ့ဝေ့လ်ုဏေ၀်.၀း ဟ်ုလုဟှာဏှ် ကေမူ.ဏာယိုဝ်ယိက်မာ.လှ်။ ဆ်ုပွါ်သာသှေ် ဟ်ုလုဟှာဏှ် လ်ုယူဇနာယိုဝ်
ယာင်မာ.လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင်သီး အ်ုဓ၀်.ဏှ် လ်ုသှေ်ယာ့ဝေ့ ဟ်ုလုဟှာဏှ် သံင်သာ့ဖိုင်သာယိုဝ် ထ၀့်မာ.ဆေ
၈။ ဟ်ုမ္နီဟ်ခ်ါကာင်းကံင်း လ်ုဟှာဏှ် ဖုံမာဆု လ်ုဟှေဝလု်ဝး ဏေ၀့်ဟှံင်ဍေဍိင်းသးလ်ုဖုံးဏှ် ဍးဝေ့ဍောဟ်မာ.လှ်။ အ်ုဏင့်ဆာ. မာဆ်ုလုဟှေဝ်၀း ဏေ၀့်ဟှံင်ဍေဍင်လ်ုဖုံး လာ.ဏင့် ဍးလင်ဝေ့ ဏင်ဆောဝ်အေးလှ်။
၈။ ဟ်ုမ္နီဟ်တုာပညာ့သီးလ်ုဖး အ်ုဏင့်ဆာ. မာဆ်ုလုဟှေဝ်၀းဏှ် ဖှေ်လင့်ဝေ့ ဖုံသှေ်ယာ့ ဏင်ဆောဝ်အေးလှ်။ ဖုံ ဟှူ့ဟှာမာဆ်ုလုဟှေဝ်၀းဏှ် ၀းလံင်အင်းစာဝေ့လှ်။ ပ္မာ့ဝေ့သိုဝ်ခုါ် အ်ှကှေ်သူးအ်ုစူးအ်ုခင်း အ်ုခေါဟ်ဃှဲုးသိုဝ် ဆေ၀်.လှ်။ အ်ုဏင့်ဆာ.လ်ုဟှေဝ်၀းခ၀့် ကာဝ်ါဝေ့။ ဖုံလ်ုဟှေဝ်၀းခ၀့် ၀းသှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။
၉။ ဟ်ုမ္နီဟ် တုာပညာ့သီးလ်ုဖး ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါသီး အေအင်းအုဂ်ထိုင်သာ့ဟ်ုဏှ် ၀းဍံင်မ၀့်မှ် ဖှေ်လင့်ဒဏ်သိုဝ်လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်တုာပညာ့သီးလ်ုဖး ဟ်ုမ္နီဟ်တုာပညာ့သီး အေအင်းအုဂ်ထိုင့်သာ့မ မွဲာဆ်ုအင်းအုဂ်ထိုင့်သာ့လှ်။
၁၀။ ဟ်ုမ္နီဟ်ဏာ့ဟှာ.ဆ်ုဍောဟ်သီးဏှ် ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာအိုဝ် ဟ်ုဝးဖှေ်လင့်ဝီ.ဟ်ုဆုလ်ုပေ၀့်လ်ုခေ၀်.လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ် အ်ုသာဍောဟ်သီးလ်ုဖးဏှ် ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာအိုဝ် ဟ်ုဝးဆဲပေ၀့်ဝေ့ဟ်ုသာလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါသီးလ်ုဖး ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာအိုဝ် ဟ်ုဝးလံင်ပျဝီ.ဝေ့ အ်ုသာလှ်။ တုာပညာ့သီးလ်ုဖး ဟ်ုလ၀်ဆ်ုတ၀်ဆ်ုယာ.အေဟှံင်ဏှ် ဟ်ုဝးမာဏေ၀်.ဝေ့ ဆ်ုဏယ်အင်း လ်ုဟုဖင့်ခေါဟ်ဏ်ှလှ်။
၁။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် အေတာင်ဍောဟ်တင်းပ်ုအိုဝ် မွဲာဝေ့လာ.ဏင့် ဟ်ုဃှာဃှံင်သီး မွဲာဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုဝုဂ်ထိင်.သိုဝ်လှ်။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် အေမာယှင်းမာဏာဟ်ုအိုဝ် မွဲာလာ.ဏင့်ဟ်ုဝုဂ်ထိင်.သီး မွဲာဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုဃှာဃှံင်သိုဝ်လှ်။ ပ္မာ့မာသာ ဝေ့သှေ်လယ့်စ်ါဝိုဝ် ဆ်ုလုဆ်ုစုဂ်ဆ်ုဆာ့သီးလ်ုဖး အေအ်ှလာ.ဏင့်လ်ုဟုလံင်သီး မာဟှေဝ်ဟ်ုမွဲာအေးလှ်။ ဆ်ုလုသီးထုင်းသီးဝံင်သီးလ်ုဖး အေအ်ှလာ.ဏင့်လ်ုမိင်လးကုာသီး မာဟှေဝ်ဏေ၀်.ဝေ့ဟ်ုကဲလှ်။
၂။ လ်ုဟုလင်ခါင့်ခ၀့် ခုါင်ဝီးခုါင်လာဟု။ လ်ုဟုမေံယာ့ခ၀့် လ၀်ဟှေဝ်လ၀်အွာဟ်ုသှေ် မ္နီဟ်သီးလ်ုဖး ဟ်ုသောဟ်ဟု သင့်ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဏှ် ဟ်ုမာဝုဂ်ထိင်.သာဝေ့ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ ပ္မာ့မာသာဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဏေ၀့်စင်ကျီကျာဍိင်သာ ဍေစူးထုဂသိုဝ်လှ်။ ဟ်ုအ၀်ဝေ့ဏင်.ဆောဝ်အေး။ ဟ်ုဝးဟှာဃှေဝ်ဝေ့ အေယာင်လ်ုခ၀့်လှ်။
၃။ ဟ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာ အေဟှာဟှံင်အေလင်ယှာဏှ် ဟ်ုထီဟ်ုသိုဝ် ဟ်ုဖေါဟ်ဟ်ုမာ့ ဟ်ုဝုဂ်ဟ်ုထိင်.သီးမ မ်ုခွိက်ယှိုဝ်ထ၀်.ဟ်ုလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ဆ်ုအှ်ဆ်ုဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာ အေအ်ှဏှ် ဆ်ုလေ၀်မာဝုဂ်မာထိင်.သာဝေ့အးမာ.လှ်။ စင်ဝိုဝ်ဏှ် ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့်လှ်။ မွဲာဝေ့ ဟ်ုဝုဂ်ဟ်ုထိင်.လှ်။
၄။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုဃှံင်ဟ်ုယှာ.ဟှေဝ်လ်ုဟှေဝ် ဟ်ုအင်းမိုင့်ယောဝ်. အေဟှံင်ခိုဝ်း ဟ်ုသှေ်ယာ့ဝးဝေ့လှ်။ ဟ်ုဝုဂ် ထိင်.မူးခွါ့ဟှေဝ်လ်ုဟှေဝ် ဟ်ုလင်ဝးဆ်ုနုံ့ဆ်ုဏာခိုဝ်း ဟ်ုသှေ်ယာ့ဝးဝေ့လှ်။ ဟ်ုသောဟ်သင့်ထီသိုဝ်ဟှေဝ်လ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာ အေလင်ယှာ ဟှာဟှံင်ခိုဝ်း ဟ်ုသှေ်ယာ့ဝးဝေ့လှ်။ ဟ်ုဖေါဟ်ဟ်ုမာ့ဟှေဝ်လ်ုဟှေဝ် ဟု ဆ်ုအှ်ဆ်ုဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာ အေလုက်ထုက်ခွိက်ခိုဝ်း ဟ်ုသှေ်ယာ့ဝးဝေ့လှ်။
၅။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် အေတာင်ဍောဟ်ထင်းဟ်ုစါ်ဝိုဝ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုမူ.ဟ်ုခွါ့ ဟ်ုသောဟ်သင့်လှ်။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် အေအင်းလူ.လင်ဏေ၀်.ဟ်ုစါ်ဝိုဝ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုမောဝ်.ဟ်ုဖါ.လှ်။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် အေမာယှူးခိုင်းလင်ဟ်ုသာစ်ါဝိုဝ် မွဲာ ဝေ့ ဟ်ုမိက်(ဟ်ုတျင်.)လှ်။
၆။ ဍေဟ်ုမ္နီဟ် ဖီးမေံဟ်ုဏှ် ဟ်ုမာမုက်ဝေ့ဟ်ုသာအေး။ ဍေဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့် လ်ုဟှေဝ်၀းဏ်ှသီး ဟ်ုမာမုက်ဝေ့ ဟ်ုသာအေး။ ၀းဝုင်ဝုင်ဏှ် မွဲာလာ.ဏင့် ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့်သီး အေသာဟှယ့်ထင်းဟ်ုဏှ် ဆာမွဲာအ်ုကျံင်အှ် လ၀် ကုင်ဝေ့သှေ်လှ်။
၇။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် သာထင်းလိုဝ်းသာ ဍေအ်ုသောဟ်အ်ုသင့် လ်ုဝုင်ဟှံင် ဟ်ုဏှ်မ်ုအှ်ထာင်ဝးသာဝေ့ ဝေ့သိုဝ် လ်ုအုဝီ.သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဝေ့သိုဝ် က်ုသှေ်အဿထိုရ် ဖါထင်းဟှံင် အ်ုမောဝ်.၀းသီ့သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။
၈။ ဟ်ုဆုကုံးဆ်ုမံင်း အေလ်ုထံင် အေလ်ုဟှဍ်ာဝး ဟ်ုယင်.သူ့သ္နာ ထံင်လာ.ဏင့်သီး ဟ်ုဝးဖူးထဝေ့ လ်ုဟုယှူ့ထာ် ခေါဟ်ဍာလှ်။ ဟ်ုဆုကုံးဆ်ုမံင်း အေထံင် အေဟှခိုဝ်း ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုစုဂ်ထေံဖါခွိက်ဖိုင်ဟှင်းခေါဟ် ဍေလုံ.သိုဝ်ဏှ် ဟု စုဂ်လင်ခွိက်သှေ်ဝေ့လှ်။
၉။ ဟ်ုဍီးမာ.အ်ှထင်.။ မှေ်အ်ှထင်. ။ ဆ်ုဆာ့အ်ှထင်.သီးလ်ုဖး ဍိင်ယိက်ဍိင်မ်ုဍောဟ်ထင်း အးထင်းခ၀့်ထ်ုမာ.လှ်။ စင်ဝိုဝ် ဆ်ုသိုင့်မိင်ဏှ် ဟ်ုအှ်ကှေ်ထင်.ဝေ့ ဏင်ဆောဝ်အေးလှ်။
၁၀။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် အ်ုမေံဃှီ့ ဝေ့သိုဝ် တ်ုက၀်ဖ၀့်သိုဝ် အ်ုဆုခုါင်ယှူး ဝေ့သိုဝ် ဆံင်လံင့်ပ္ကေ၀်သိုဝ် လာ.ဏင့်သီး အု သာကာင်းကံင်း ဝေ့သိုဝ် ခွယ့်သိုဝ်လ်ှစါ်ဝိုဝ် ဟ်ုမ္နီဟ် ဝေ့ဏ်ှသိုဝ် ဟ်ုမာဝုဂ်ဝေ့ ဏင်ဆောဝ်အေးလှ်။
၁၁။ ဟ်ုက်ုဆာ. ဟ်ုဆြာ့အ်ုသာကုံင်ဏှ် ဟ်ုမာဝုဂ်ဝေ့ဟှေဝ်အေး။ ဟ်ုကုဆာ. ဟ်ုဆြာ့ အ်ုသာဆေ၀်အေ၀်ဏ်ှသီးခ၀့်
ဟ်ုမာဝုဂ်ဝေ့ဟှေဝ်အေး။ ဟ်ုကုဆာ. ဟ်ုဆြာ့ မာဟှာဟှံင်ဟ်ုဏှ်ခ၀့် ဟ်ုမာဝုဂ်ဝေ့ဟှေဝ်အေး။ ဟ်ုကုဆာ.ဟ်ုဆြာ့ မာဍုင်းမာလောတ်ဟ်ုကဲဏ်ှခ၀့်သီး ဟ်ုမာဝုဂ်ဝေ့ဟှေဝ်အေးလှ်။
၁၂။ ဆ်ုဟုနုံအ်ှဏှ် ဟ်ုဝးဟှာဃှေဝ်ဝေ့ အ်ုဖုာယဲာဆီ့။ ဆ်ုလုက်ုသှေ်သီးဏှ် ဟ်ုဝးဟှာဃှဝ်ဝေ့ အ်ုဖုာလ်ုယာ။ ဆ်ုလုက်ုဆင့် အ်ုမဲအ်ှသီးလ်ုဖး ဟ်ုဝးဟှာဃှေဝ်ဝေ့ အ်ုဖုာလ်ုထံင့်။ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုမ္နီဟ်လ်ုဟှေဝ်၀း သီးလ်ုဖး ဟ်ုဝးဟှာဃှေဝ် လေ၀်ဟှာအ်ှခွိက် လ်ုဍုံတွာန့် အ်ုဟှူ့ဟှာခ၀့်လှ်။
၁၃။ လ်ုဍုံတွာန့်အိုင်မွဲာအဟှေဝ် သောဟ်သင့်အိုင်မွဲာအ်ုဟှေဝ် မူးခွါ့အိုင်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ထီသိုဝ်အိုင်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဖေါဟ်ဟ်ုမာ့အိုင်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဃှံင်.ယှာ.အိုင်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဆ်ုအိုင်ဃှူ့မိင်ဏှ် ဟ်ုဝးဟှာဃှေဝ် ခွိက်ယှိုဝ် ဟှာ အ်ှခွိက် လ်ုအုယာင်လ်ုခ၀့်လှ်။
၁၄။ ဆ်ုလုဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့်သီးလ်ုဖး ဟ်ုဝးစုဂ်ဝးဆာ့ခါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဝးအ်ှဝီ.လင်ဍောဝ်ခါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဆုအှ် ဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာ ဟှာဟှံင်ခါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုလင်ဝး လ်ုယင်.သူ့သ္နာအ်ုစူးဖိုင်ခါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဝးလေ၀်လု ဟ်ုဍောဟ်ဟ်ုမူ.အှ် ဟ်ုဝးအ်ုမုဂ်ခါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဝးလေ၀်ထုင်.သီ့လင်သာ လ်ုသွးခေါဟ်ခါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် အေရုင်.ဆိုင် အေယောဝ်.ခွါ.ဆိုင်ဟ်ုဆေ၀်.စ်ါဝိုဝ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့်သီး လ်ုအုပြေထုက်လှ်။
၁၅။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် လ၀်ဆ်ုအေမုက် ခုါင်ဆ်ုအေသာ့ဏှ် အ်ုထီအ်ုသိုဝ်အ်ှအးဝေ့လှ်။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် လ၀်ဆ်ုလုမုက် ခုါင်ဆ်ုခးမွးအိုဝ် ဟ်ုထီဟ်ုသိုဝ် အ်ှဝေ့ယှာလှ်။ ဟ်ုဝးယောဝ်.ဍံင်ဝေ့ မူ.မေံ ဍေလာဏ်ှလှ်။
၁။ ဆ်ုလုသင့်၀၀်သီးလ်ုဖး အ်ုလူ.ဏှ် မွဲာဝေ့ အ်ုရုပ်သ်ာလှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုမူးသီးလ်ုဖး အ်ုဖေါဟ်အ်ုဝါဏှ် မွဲာဝေ့ အ်ုရုပ် သ်ာလှ်။ ဆ်ုလ်ုဟ်ုမ္နီဟ် လးအိုင်သီးယိုဝ် အ်ုဆုသှေ်ဆ်ုဝးပညာ့ဏှ် မွဲာဝေ့ အ်ုရုပ်သ်ာလှ်။ ဆ်ုလုဂ္မီ့အ်ာသာ်သီးယိုဝ် အ်ုဆုထုဂ်သုင်းထုဂ်သာဏှ် မွဲာဝေ့ အ်ုရုပ်သ်ာလှ်။
၂။ ဆ်ုလုဟ်ုမူးသီးယိုဝ် အ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့်ဏှ် မွဲာဝေ့ အ်ုရုပ်သ်ာလှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုခွါ့သီးယိုဝ် အ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့်ဏှ် မွဲာဝေ့ အ်ုပညာ့ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးဏ်ှလှ်။ ဆ်ုလုဂ္မီ့သံဃာ့သီးယိုဝ် အ်ုသီ့လာ သမာဓိဏှ် မွဲာဝေ့ အ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့်လှ်။ ဆ်ုလုဟု
၀ုံးဟ်ုဃွှာသီးယိုဝ် အ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့်ဏှ် မွဲာဝေ့ သှေ်ဖေါဟ် သုဂ်ဖေါဟ်ဏ်ှလှ်။
၃။ ဆ်ုလုဂ္မီ့အ်ာသာ်သီးယိုဝ် အေဃွှဲာဏှ် ဟ်ုယောဝ်.ဃှီ့ယံင်ဝဲါလှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုခွါ့သီးယိုဝ် အ်ုပညာ့ဆ်ုသှေ်အေအ်ှဏှ် ဟ်ုယောဝ်.ဃှီ့ယံင်ဝဲါလှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုမူးသီးယိုဝ် အ်ုဖေါဟ်အ်ုဝါအေအ်ှဏှ် ဟ်ုယောဝ်.ဃှီ့ယံင်ဝဲါလှ်။
၄။ ဆ်ုလုဏာ.ဍိင်ဆာ. အ်ုထုယ၀်.ထုက်သီးလ်ုဖး အေလင်ဖါဍေဏာ.ဍိင် ဏင်ယဲာသင့်ဏှ် ဟှာဟှံင်ဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုခါခီုးဆာ.အ်ုထုယ၀်.ထုက်သီးလ်ုဖး အေလင်ဖါဍေခီုး ဏင်နဲို့သင့်ဏှ် ဟှာဟှံင်ဝေ့လှ်။ အေမွဲာလာ.ဏင့် ဟ်ုမာ့ဟှေဝ်သီး အေလင်ဖါဍေအ်ုဝါ လာဏင်ဝိင်းဏှ် ဟှာဟှံင်သှေ်ဆေ၀်.လှ်။ အေမွဲာလာ.ဏင့် ဟ်ုထီဖုဲာဟှေဝ်သီး အေလင်ဖါဍေ အ္စာဆြာ့ ဏင်.ဆီ့ယဲာသင့်ဏှ် ဟှာဟှံင်ဝေ့လှ်။
၅။ ဆ်ုလုပ္နာ.သီး ဆ်ုဝင်နုင်သီးယိုဝ် ဆ်ုမုက်ဝးအ်ုသီး လ်ုဖိက်ပါပိုင်ကုာဏ်ှလှ်။ ဆ်ုလုထောဟ်ဟင်္သာသီးယိုဝ် အ်ုဆုမုက်ဝးအ်ုသီး လ်ုထီ့ကုာဏ်ှလှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုမူးသီးယိုဝ် ဆ်ုမုက်ဝးအ်ုသီး ဍေဟ်ုထီ.ဟ်ုခွါ့ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုလုဂ္မီ့အ်ာသာ် သီးယိုဝ် ဆ်ုမုက်ဝးအ်ုသီး ဍေ ဓ၀်.သီ့လာဏ်ှလှ်။
၆။ ဆ်ုလုမေ၀်သီးယိုဝ် ဟ်ုအင်းဟှံင် ဟ်ုဆးအေ၀ုယ်ဏ်ှမ ဟ်ုအင်းအုဂ်သာ့ဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုဖေါဟ်ဟ်ုမာ့သီးယိုဝ် အ်ုယုက်အ်ုထာ အေထိုင့်ဟှံင်ဏ်ှမ ဟ်ုအင်းအုဂ်သာ့ဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုသှေ်ဖေါဟ်သုဂ်ဖေါဟ်သီးယိုဝ် ဍု၈်ဆ်ုအေနိုင် ဟှံင်ဏ်ှမ ဟ်ုအင်းအုဂ်သာ့ဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုဝူး လ်ုဃှီးဖိုင် ဃှုဂ်ဖိုင်သီးလ်ုဖး အေထံင်လ်ုပါဖိုင်ဖင့်ဖိုင်ဟှံင်ဏ်ှမ ဟ်ုအင်းအုဂ်သာ့ဝေ့လှ်။
၇။ ဟ်ုမူးလင်ဖါဍေအ်ုဝါ ဏီ့ဆင့် သိုင့်ဆင့် မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဂ္မီ့သင့်သီး စာင်းဟှာအ်ှဘာ.ဏီ့ဖုံး သိုင့်ဖုံးမွဲာအ်ုဟှေဝ် ထောဟ်ဟှာဖေုဝ်လ်ုယောတ်ဖိုင် ဏီ့ဝုင်သိုင့်ဝုင်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ၀ုါ်ဝုါမာယာဆ်ုသှေ်အးမာလှ်။
၈။ ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါသီးယိုဝ် ဝေ့သိုဝ် ဏးဆ်ုမုသှေ်ထင်းသိုဝ် ဟ်ုဝးဍောဟ်ဟ်ုဝးထင်.ဝေ့လှ်။ ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့်အေ လ်ုဟှေဝ်၀း ဝေ့မ်ုဟှေဝ်ထင်းသိုဝ် ဟ်ုဝးဍုးခုါင်ဍုင်းဝေ့လှ်။ ဟ်ုဖေါဟ်ဟ်ုမာ့လ်ုဟှေဝ်၀း ဝေ့သိုဝ်မ်ုဟှေဝ်ထင်းသိုဝ် ဖ်ုအောဝ်လင်ဆု ဏင်.မိင်လ်ုဃှေဝ်။ ဆ်ုအင်းအ်ုဆးဆံင်းသီးယိုဝ် လ်ုဟှေဝ်၀းဝေ့မ်ုဟှေဝ်ထင်းသိုဝ်ဏှ် ဟ်ုဍုဂ်အင်း ဝေ့ဆ်ုအးအးအေးလှ်။
၉။ ကေမူ.ဏာသီးယိုဝ် လာအေလ်ုဖါန်ဝးဃှီ့အေး။ ဆ်ုလုမာ့ဆ္မ်ါသီးယိုဝ် ဒီလ်ုပ၀်အေလ်ုအှ်ဝး ဃှီ့အေး။ ဆ်ုလုထီ့ကုာသီးယိုဝ် ထောဟ်ဟင်္သာအေလ်ုအှ်ဝး ဃှီ့အေး။ ဆ်ုလုဟ်ုမူးသီးယိုဝ် မွဲာလာ.ဏင့် ဟ်ုမူးသာကီဝံသသီး အ်ုဝါအေလ်ုအှ်ဝး ဃှီ့အေးလှ်။
၁၀။ ဆ်ုမာအးထင်း ဆ်ုအှ်ဆ်ုဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာသီးယိုဝ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုခွါ့လှ်။ ၀းယောဝ်.၀းခွါ.ဆု(ဟ်ုခွါ့အင်းဃှူ့ဟှယ့်ထာင်ဏေ၀်.)ဏှ် မွဲာဟ်ုမူး (ဟ်ုဖေါဟ်ဟ်ုမာ့) ဏ်ှလှ်။ ဟ်ုခွါ့သီးယိုဝ် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ထာဆာဆ်ုဏှ်သိုဝ်လှ်။ ဟ်ုမူးဏ်ှဍ၀် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် လူးဆာဆ်ုဏှ်လှ်။
၁၁။ ဆာမွဲာခေုါဟ်သီးယိုဝ် ကာင်းကံင်းဝေ့ကိုဝ်၀ံင်ဍေလှ်။ ဆာမွဲာမိင်လးသီးယိုဝ် ၀းကဲထင်းဝေ့သိင်းမူ.ထ္မာ.လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုမူးသီးယိုဝ် အေဏေ၀်.အ်ုလင် လ်ုဆုက်ုဍူလာဏှ် မာဆ်ုဍယ်ဝါ ၀ုင်းဝေ့ကိုဝ်မိင်ဍေလှ်။
၁၂။ ဟ်ုမူးလ်ုဟှာဏှ် အာင်းလောတ်ခုါင်ဆိုင့်ဆု ကဲဝေ့လှ်။ အ်ုသုင်းခေံ သာခေံဆု ကဲဝေ့လှ်။ ဍးဆ်ုအိုဝ်၀းသာဆု အိုဝ် ဍးဆ်ုအီ ၀းသာဆ်ုအီလှ်။ အင်းခွိက်အ်ုဝါ မေ၀်ခေါဟ်ထီ့ခေါဟ်ဟှံင် စာင်းကဲုိလ်ုဖုံဟှိင်း စံင်စံင်လှ်။ အ်ုတိုင် ဟ်ုမူး ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဏှ် ဟ်ုပါဖေါဟ်ပါမာ့ဝေ့ ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ ဟ်ုဝးခွိက်ယှိုဝ်ခွိက်ဝေ့လှ်။
၁၃။ ဟ်ုမူးလ်ုဟှာဏှ် ဆ်ုအင်းဆ်ုအ၀်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဆ်ုကံင်ဆ်ုသိုဝ်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ယောဝ်.ခွါ့အင်းတာင်ဟ်ုသှေ်ဝေ့ ဝေ့ သိုဝ် ဟ်ုမောဝ်.သိုဝ်လှ်။ ဆ်ုဝးကာဝ်ါသာအ်ုလင်.ဏှ် ဆ်ုကးသာ (ဟိရိသြတ္တပ္ပ)အ်ှသှေ် ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုဖူ.မူးသိုဝ်လှ်။ မာက်ုလုံ့ကာင်ကါခါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် လေ၀်ထာင်အ်ုဝါမေံယာ့ခါ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် အ်ှကှေ်လင်သာ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုဃှံင်.မူးသိုဝ် လှ်။ အေထံင်ဝးဆ်ုနုင့်ဆ်ုဏာ ဆ်ုကးဆ်ုဟှယ်ခါ့ လ၀်ဖှေ်ဟု ဆ်ုကုံးဆ်ုမံင်းသှေ်ဝေ့လှ်။ ထာင်မီ့ဍေအ်ုဝါ အ်ုလင်မီ့ ဏှ် အ်ုဏင့်ဆာ. အ်ှဟှေဝ်အွာဆိင့်ပြင် က်ုယိုင့်ထင်းအ်ုသာ သှေ်ဝေ့လှ်။ အ်ုတိုင်ဂကူဟှေဝ် ဟ်ုမူးဝေ့ဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုမူးလ်ုအုပြေထုက်လှ်။ တုာပညာ့သီး လ၀်ဆောဝ်ဝေ့ ဟ်ုမူးဝေ့ဏှ် ကာလာအေသီ့ခိုဝ်းသီးဍ၀် ထာင်ထင်းဝေ့ လ်ုဍုံသွဝ့်သီးကဲဝေ့လှ်။
၁၄။ ဟ်ုမူးလ်ုဟှာဏှ် အ်ုယးဝင်ဝေ့သိုဝ် ဓံင့်သိုဝ်လှ်။ အ်ုမေံခီု့သိုင့် ဝေ့သိုဝ် ထ်ုရဲာသိုဝ် ၊ အ်ုသာဏာ့အင် အ်ုခါင့်ပး လဲာ အ်ုယင်.ဍိင်ဆာင် အ်ုကီးထါ် ဝေ့သိုဝ် က်ုဆင့်မုံင်သိုဝ် အ်ုခေါဟ်သူ့ထ၀့်ဟှေဝ် အ်ုမဲသံင့်လင်သာသ္မ၀့်ဟှေဝ် အ်ုဍီလင်အုံး အ်ုဒ္ဂေတ်ပ်ုဝါဟှေဝ် အ်ုတိုင် ဟ်ုမူးဝေ့ဏှ် မွဲာလာ.ဏင့်အ်ုဆိုဒ် လ်ုဟှေဝ်၀းသီး ဟ်ုဆာမိက်တျင်. ဟ်ုအှ်ဃှုက်ဝေ့ဟှေဝ်လှ်။
၁၅။ ဆ်ုလုလာသီးယိုဝ် လာဏင့်ဏှ် မွဲာအ်ုပြေထုက်လှ်။ ၀းဆာင့်လ်ုဟုမာ့သီးယိုဝ် ဟ်ုမူးခိင်.ဃှီ့ဟှင်ဟှေဝ် အ်ုဒ္ဂေတ်ပ်ုဝါဟှေဝ်ဏှ် မွဲာအ်ုပြေထုက်လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုဖေါဟ်သီးယိုဝ် ဖေါဟ်အ်ုဝဲါယှာ.ဏှ် မွဲာအ်ုပြေထုက်လှ်။ ဆ်ုလု ဒိုဟ်(အရပ်မျက်နှာ)သီးယိုဝ် ဒိုဟ်လ်ုခင်းထ်ါလးဏှ် မွဲာအ်ုပြေထုက်လှ်။
၁၆။ ဆ်ုလုဟ်ုမူးသီးယိုဝ် အေကဲထင်းဝးသာ ဟ်ုခွါ့ကိုဝ်ကျးဍေအိုဝ် သုဂ်အင်းသုဂ်အ၀်လာ. အ်ုဝါဏှ် ဝေ့သိုဝ်ဟု အိင်မူး သုဂ်အင်းသုဂ်အ၀် သ္မိင့်အိင်ဏ်ှသိုဝ်လှ်။
၁၇။ ဆ်ုလုဟ်ုခွါ့သီးလ်ုဖး အေကဲထင်းဝးသာ ဟ်ုခွါ့ကိုဝ်ကျးဍေသိုဝ် သာလောဟ်ဍူးပွယ်လာ. ဖုံဖေါဟ်ဖုံမာ့ဏှ် ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုသီ့ယာခင်းဟှံင် ဟ်ုသာလောဟ်ဖိက်ပါပိုင် မ်ုစီ့စးဝး ဟ်ုခင်းဏ်ှသိုဝ်လှ်။
၁၈။ ဟ်ုသာယှာ.ကေ၀်လ်ုဟှာ အေမာဖေါဟ်မာမာ့ ဍေဖေါဟ်သးမူး ဍောဟ်ထင်းသင့်ဏှ် ဝေ့အ်ုမာ့အ်ုသာအ်ှသိုဝ် မာဖှေ်ဝေ့ကဲအေးလှ်။ အ်ုမာ့ဖေါဟ်သးခ၀့် အ်ုသာဏယ်အင်းဏယ်အ၀်အ်ုကဲအေးလှ်။ အေမာသာဝေ့ဏှ် မ်ုကဲထင်းဝေ့ ဆ်ုဟှာဟှံင်လှ်။
၁။ ဆ်ုလုဟ်ုဝုံးသီးယိုဝ် လ်ုဏာဏှ် ၀းမီ့ဝေ့လ်ုယုက် (လ်ုယာမ်) လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်တုာပညာ့သီးလ်ုဖး လ်ုဏာဏှ် ၀းမီ့ဝေ့ ဏီ့ယုက်လှ်။ ဟ်ုမ္နှဟ်အ်ှဍေဖေါဟ်မာ့ဏ်ှသီးဍ၀် လ်ုဏာဏှ် ၀းမီ့ဝေ့ သိုင့်ယုက်လှ်။ ဆ်ုလုသ်ုနာ.ပါ့သီးယိုဝ် လ်ုဏာဏှ် ၀းမီ့ဝေ့လီ.ယုက်လှ်။
၂။ တွာန့်လ်ုဖုံးဏ်ှဖုံဆ်ုအှ်ဆ်ုဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာအှ် သယ်ဌီ့သင့်မ်ုငယ့်မွဲာအ်ုဟှေဝ် တုာပညာ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် ထီ့ခေုါဟ်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာ ပိုင်ထီ့ပိုင်ခါန်.မွဲာအ်ုဟှေဝ် အ္စာသ၀့်သီးဆြာ့မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဆ်ုယဲာမိင်ဏှ် အေလု အ်ှဏင်.မိင်ဝးစ်ါဝိုဝ် လ်ုဏီလ်ုသင့်သီး ဟ်ုအှ်ဝေ့အေးလှ်။
၃။ တွာန့်လ်ုဖုံးဏှ် ဆ်ုသာထိင်.ဆ်ုအဲကဲု တုာပည့ာခ၀့်အ်ှအေး။ ဆ်ုသာထိင်.ဆ်ုအဲကဲု ထီသိုဝ်ခ၀့်အ်ှအေး။ မ်ုမာလောဟ်ဖှေ် ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးခ၀့်အ်ှအေး။ တွာန့်ဝေ့ဏှ် လ်ုဏဲီလ်ုသင့်သီး ဟိုအ်ှဝေ့အေးလှ်။
၄။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟှိင်းလ်ုဖုံးဏှ် ဖေါဟ်ဍီဖေါဟ်သး အေလ်ုအှ်ဝး ယူ.ယိင်ဝေ့လှ်။ ဍုံလ်ုဖုံးဏှ် ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာ အေလ်ုအှ်ဝး ယူ.ယိင်ဝေ့လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်အ်ုပညာ့လ်ုအှ်ဝးသီး အ်ုနိုဝ်ဖိုင်ဏှ် ယူ.ယိင်ဝေ့လှ်။ ဆ်ုစွးဏာင်းဏှ် မွဲာဝေ့ ဟု မ္နီဟ်ယှင်းဖေါဟ်သီးဏ်ှလှ်။ အ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာလ်ုအှ်ဏင်.၀း အ်ုခေါဟ်စံင်ဏှ် ယူ.ယိင်ဃှံင်.ဝေ့လှ်။
၅။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုဝးသာဆ်ုအှ်ဆ်ုဆံင့်အ်ှသီးယိုဝ် ဟ်ုဝးကူဝေ့ဖ်ုဏိက်လှ်။ ဟ်ုအေသှေ်ဝးသာ ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးဏှ် အိုဝ် ဟ်ုဝးလေ၀်အ်ှဝေ့ လ်ုဆုသှေ်ဆ်ုဝးဆာ.အ်ှဏှ်လှ်။ ဟ်ုအေ၀းသာ ဟ်ုဖေါဟ်ဍ်ာအိုဝ် ဟ်ုဝးမာဝေ့ ဟ်ုမာ့ လ်ုဟု မူးအ်ုသာဝင်းဏ်ှလှ်။ ဟ်ုအေကဲဝးသာ မူးမတ်သီးယိုဝ် ဟ်ုဝးလံင်ပျဝေ့ ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာသီး အ်ုသာဏ်ှလှ်။
၆။ ဂ္မီ့သင့်သီးလ်ုဖး ထုဂ်သာဍူးဆံင့်ဆု လ်ုဏေ၀်.၀း ဟှာဟှံင်ဝေ့လှ်။ ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာသီး ထုဂ်သာအေအ်ှအိုဝ် (ရောင့်ရဲလွယ်) ဟှာဟှံင်ဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုအီကယ် မယ်ဃွှယ်သီးလ်ုဖး ကးသာအေအ်ှအိုဝ် ဟှာဟှံင်ဝေ့လှ်။ ဟ်ုမူးပြေ ဟ်ုမူးဟှေဝ်အွာသီးလ်ုဖး ကးသာအေလ်ုသှေ်ဝးအိုဝ် ဟှာဟှံင်ဝေ့လှ်။
၇။ ဆ်ုလုထောဟ်သီးယိုဝ် အ်ုဟှာင်.မွဲာဝေ့ မုဂ်ခေါဟ်ဆ်ုဖိုဝ်ဖင့်ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုလုယးသီးယိုဝ် အ်ုဟှာင်.မွဲာဝေ့ ထီ့ဏ်ှလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ် သာမဲဆ်ုသှေ်သီးဏှ် အ်ုဟှာင်.မွဲာဝေ့ ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာထီ့ခေါဟ်ခါန်.ခေါဟ်ဏ်ှလှ်။ ဖေါဟ်သးသီး အ်ုဟှာင်. မွဲာဝေ့ဆ်ုဟှင်းဏ်ှလှ်။
၈။ ဆ်ုထုဂ်သုင်းထုဂ်သာဏေ၀်.လ်ုမိင် ဆ်ုအုသုင်းအ်ုသာဖဲုယှာ့လ်ုမိင် ဆ်ုလုလ္လ၀ိရိယအှ် လ်ုမိင် ဆ်ုခိင့်ဖါအင်းဏင် ဆ်ုသှေ်လ်ုမိင် ဆ်ုယင့်သုင်းယင့်သာ ဆ်ုသှေ်လ်ုမိင် ဆ်ုဆံင့်မံင်းလင်ခါင့်သှေ်လ်ုမိင် ဆ်ုဃှူ့မိင်ဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုဍောဟ်ဟ်ုယှာ.(နာယက)သီးအ်ုဂုဏ်လှ်။
၉။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာသီးလ်ုဖး လ၀်ဆ်ုလုထီးလှ်။ ဂ္မီ့သင့်သီးလ်ုဖး လ၀်ဆ်ုလုဝုင်လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ဟှေဝ်ပြေ တ၀်လံင်သီးလ်ုဖး လ၀်ဆ်ုလုဝုင်လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ယှာ.လ်ုဖုံလ်ုအုဝီ.သီးလ်ုဖး အ်ုဒ္ဂေတ်ပွါ အ်ုသုင်းအ်ုသာအ်ှဝေ့ ဝေ့ဏှ် သိုဝ်လှ်။
၁၀။ ဟ်ုမ္နီဟ် အ်ှဍေဖေါဟ်မာ့ ဍေဟှိင်း ဍေဃှင့် ကျုင်းက်ုထူ့ ဟ်ုလုဟှာဏှ် ဟှေဝ်အေး။ ဂ္မီ့သင့်သီးယိုဝ် အ်ုသီ့လာ ပ်ုဒါန်.အေလ်ုအှ်ဝး ဟှေဝ်အေး။ ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာသီးလ်ုဖး ဆ်ုဆ္မောဝ်အင်းစာဆု အေလ်ုအှ်ဝး ဟှေဝ်အေး။ ဟ်ုတုာပညာ့သီးယိုဝ် သုင်းထင်းသာဟှာင့်ဆ်ုအေသှေ် ဟှေဝ်အေးလှ်။
၁၁။ ဆ်ုလုတွာန့်လ်ုဖုံးဖိုင်ဏှ် တွာန့်ဖေါဟ်သီးလ်ုဖး စ်ါလင်အ်ုသီးသာ မွဲာတွာန့်ခေါဟ်ထ္မာ.လှ်။ စ်ါလင်အ်ုသီးသာ မွဲာတုာပညာ့ထ္မာ.လှ်။ စ်ါလုအ်ုသီးသာ မွဲာအ်ုဟှေဝ် အ်ုပြေထ္မာလှ်။ တွာန့်ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဏှ် မာလာ.ဏင့်ဆ်ုလုမိင်မိင် သီး ကဲထင်းဝေ့ဆ်ုသှေ်အေး ဟှာဟှံင်ဝေ့ ဖဲုလှ်။
၁၂။ ဆ်ုလုဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာ အ်ုခေါဟ်အ်ုမေ၀်.သီးလ်ုဖး ဆ်ုဆာအ်ုခံင့်ဏေ၀်.လ်ုဏေ၀်. ဆ်ုဆးအင်းဆးအ၀် ယိုင်လ်ုယိုင်ဏှ် ၀းသှေ်ယာ့ဝေ့လှ်။ အ်ုထီအ်ုဖုဲာ အ်ုဃှံင်.အ်ုယှာ.သီး မာဆ်ုမာ လ်ုမာဆ်ုမာဏှ် လ်ုသှေ်ယာ့ဝး ဝေ့သိုဝ် မ်ုသှေ်ယာ့သိုဝ် ၀းယောဝ်.ခွါ.ဝေ့လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်လ်ုမုဝးဆင်းလင် ဍိုဒ်လင်ဏှ် ၀းဆင်းလင် ဍိုဒ်လင်ဝေ့လှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ် လ်ုမုဝးအင်းခံင့်ထ်ုဝါသီးဏှ် ၀းအင်းခံင့်ထ်ုဝါထင်းဝေ့လှ်။
၁၃။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် မူ.မေံဏှ် ဟ်ုဝးအင်းလူ့လင်ဝေ့ဟ်ုသာ လ်ုဟုခုံ့ဆင့်ခေါဟ်ခ၀့်ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုခိုင်းခါ့ဏှ် ဟ်ုဝးဆု ဆုဂ်ဝေ့မှေ် လ်ုဟုသာဏာ့ လ်ုခ၀့်လှ်။ ဟ်ုကုဆာ. ဟ်ုဆုဆြာ့သီးယိုဝ် ဟ်ုဝှးဍံင်ထိုဝ် ထောဝ်ထိင်.ဝေ့ ဟ်ုသာ ထိုင့် ဟှာသာ့လှ်။ ဟ်ုမုဝးထာင်ဏင်.ကျးဍ၀် အ်ုဟှင်.ဏ်ှအိုဝ် ဟ်ုဝးထောဝ်ထိင်.ဝေ့ ဟ်ုသာ ဍေဆ်ုဝုံးဆ်ုဝါ (သုစရိတ်) ဏ်ှလှ်။
၁၄။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် မှေ်လ်ုမိင် ထီ့လ်ုမိင် ဟ်ုမူးလ်ုမိင် ဟ်ုမ္နီဟ်အိုင်ခ်ါဏှ်လ်ုမိင် ၀ူ.လ်ုမိင် ဟ်ုဃွှာလ်ုမိင် ဆ်ုဃှူ့မိင် ဟ်ုလေ၀်မာဍုဂ်ဝေ့ဟ်ုသာ မာဝုဂ်မာထိင်.ဝေ့ဟ်ုသာအေးလှ်။ မာသီ့ဝေ့ဟ်ုသှေ်ယ၀့်ဝေ့လှ်။
၁၅။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် မာဏေ၀်.၀းမာ့ ဍေဟ်ုမူးဒ္ဂေတ်ပွါလ်ုဟှေဝ်၀း လ်ုမိင် အင်းမိုင့်ဝးအ်ုထီအ်ုဖုဲာ အ်ုဃှံင်.အ်ုယှာ. ဍေဟ်ုမ္နီဟ်အ်ုသာအိုင်ခ်ါလုမိင် လေ၀်အ်ှဝးဟှိင်း လ်ုဝူ.အ်ုကင်ဍောဟ်အ်ှလုမိင် ဆ်ုသိုင့်မိင်ဏှ် သီာဏေ၀်.ဟ်ုသှေ် ယ၀့်ဝေ့လှ်။ သံသယ အ်ှဝးဏင်မိင်လ်ုဃှေဝ်လှ်။
၁၆။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုမာလောဟ်ဖှေ်အ်ုပညာ့ လ်ုဟုဖုဲာအိုင်ခ်ါကုထူ့ဏ်ှလုဟှာ ဏေ၀်.၀းမာ့ ဍေဟ်ုမူ.အိုင်ခ်ါကုထူ့ဏ်ှလုဟှာ လေ၀်အ်ှဍိင်ဝးဍေ ဟ်ုမ္နီဟ် အ်ုသာကာင်းကံင်းဏ်ှလုဟှာ ဍေဟ်ုသိုင့်ဟှာဏှ် အ်ှဍိင်ဝးစါ် ၀ိုဝ် မွဲာလာ.ဏင့် တုာပညာ့သီးဟှာဟှံင်လင်ဖိုဟ်ဝေ့ဖဲုလှ်။
၁၇။ ဖေါဟ်လီမာဆု လ်ုဟှေဝ်၀းဏှ် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ်မောဝ်.ဖါ.မာဆလ်ုဟှေဝ်၀းသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ထီဖုဲာမာဆ်ုလု ဟှေဝ်၀းဏှ် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် အ္စာဆြာ့မာဆ်ုလုဟှေဝ်၀းဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာ မာဆ်ုလုဟှေဝ်၀းဏှ် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ပိင်ဒိုဟ် ပုရောဟိတ် မာဆ်ုလုဟှေဝ်၀းသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဟ်ုဍုံဌာန့်ဖေါဟ်သီး မာဆ်ုလုဟှေဝ်၀းဏှ် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုဃွှာမာဆ်ုလုဟှေဝ်၀းသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။
၁၈။ ဟ်ုမ္နီဟ်အ်ုသာဍောဟ် အ်ုသဲုးဍောဟ်လ်ုဟှာဏှ် ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာ ဟ်ုဝးအ်ှကှေ်ဝေ့ ဟ်ုသုင်းဟ်ုသာ ဖ၀်.ယ၀့်ဟှေဝ်အွာဏ်ှလှ်။ ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာ ဟ်ုမ္နီဟ် အ်ုသုင်းအ်ုသာ လ်ုတ၀်လ်ုယာ.၀းလ်ုဟှာဏှ် ဟ်ုဝးအ်ှကှေ်ဝေ့ ဟ်ုသုင်း ဟ်ုသာ အေတ၀်အေယာ.လှ်။ ဟ်ုအေနိုင်ဝးသာ ဟ်ုမ္နီဟ် အ်ုသာဆေ၀်အေ၀်လ်ုဟှာဏှ် ဟ်ုဝးအ်ှကှေ်ဝေ့ ဟ်ုသာ ဍေဟ်ုသာဖုဝ့်(ဖှေ်အင်းဖှေ်အ၀်ဆ်ုယ၀့်)ဏ်ှလှ်။
၁၉။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုလုဟှာဏှ် အ်ုသာအိုင် အ်ုသာကုံင် လာ.ဏင့်သီး ဏ်ုအေဖှေ်အင်းဖှေ်အ၀်ဆု အေဟှံင် အိုဝ် အ်ုသုင်းအ်ုသာ လင်ဖုက်လင်ဝယ်ဝေ့လှ်။ ဟ်ုဖှေ်အင်းဖှေ်အ၀်ဆ်ုသီးလ်ုဖး ဟှေဝ်ဏေ၀်.ဟု ကိုဝ်မိင်ဍေလှ်။ ဖှေ်အင်းဖှေ်အ၀်ဆု မွဲာအ်ုဟှေဝ် လ၀်ဆ်ုခုါင်ဆ်ုမုက်လာ မွဲာအ်ုဟှေဝ် အ်ုဏင့်ဆာ.ခ၀့် အ်ှဝးဖုံဖင့်ခေါဟ်ကဲလှ်။ဖုံ ဃှာဃှံင်ခ၀့် သီ့ကီုဟု ကဲဝေ့လှ်။
၂၀။ ဍုံလုက်ဖိုဝ်ယိုဝ် ဆ်ုလုဟ်ုဖှေ်လင့်အင်း ဖှေ်လင့်အ၀်ဆ်ုသီးလ်ုဖး ၀းဍံင် ဝေ့သိုဝ် သီး ဟ်ုမ္နီဟ်အဲကဲုဟ်ုဏှ်လှ်။ ဆ်ုလုဟ်ုဆေ၀်အေ၀်သီးယိုဝ် ၀းဍံင် ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုပ္ကုံဏေ၀်. သီး ဆ်ုဖီးမေ့ဟ်ုဏှ်သိုဝ်လှ်။ ဆ်ုဖှေ်အင်းဖှေ်အ၀်ဆ်ုသှေ်ယိုဝ် မွဲာဝေ့ဍး သီး ထီအး သိုဝ်အး ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဆေ၀်အေ၀်သီးယိုဝ် မွဲာဝေ့ သီး အ်ှလင်ထင်.လ်ုဟှာလ
၂၁။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုမ္နီဟ် ယှင်းဖေါဟ်နုင့်ဏာ သီးလ်ုဖး လ်ုလိုင့်(အသုံးမကျ) ၀းလာ.ဏင့်သီး အေဃှူ့အေဃှင်ဏှ် နိုင်ဆ်ုကဲ ကိုဝ်မိင်ဍေလှ်။ ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဏင်းဝံင်သီး ဏ်ုဖံင်ဏေ၀်.ဖီုဟှံင်ဏှ် စိုင်ထုင်း က်ုဆင့် ကဲဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။
၂၂။ ဟ်ုဃွှာလ်ုခေါဟ်ဏှ် အ်ုထီအ်ုဖုဲာအ်ုသီးအ်ုသုဂ်သီးလ်ုဖး အ်ှအေဍုဂ်ပါင်လာ.ဏင့်သီး လေ၀်ဍုဂ်ဆု အေလ်ုနိုင်ဝးစ်ါဝိုဝ် ကဲထင်းဝေ့ ဆ်ုမေံမဲာကးသာဍောဟ်ဝေ့လှ်။ ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုဃှူ.လင်မှေ် လ်ုလီလ်ုအ်ှဝးကုာ မှေ်ဆးလုက်ဏ်ှဆေ၀်.လှ်။ ခယ်ထင်းမင်.သာ လင်ဖိက်ဝေ့လှ်။
၂၃။ ဆ်ုလုဟ်ုယှင်းဖေါဟ်သီးလ်ုဖး မာဍံင်ဝေ့ ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာဏ်ှအေးလှ်။ အ်ုလင်မီ့လင်ဍာ မွဲာအ်ုဟှေဝ် အ်ုဆုအင်းဆ်ုအ၀်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဆောဝ်ဖ၀့်ဟှူးလင် ဆံင်လံင့်မွဲာအ်ုဟှေဝ် အ်ုကံင်အ်ုသိုဝ် မွဲာအ်ုဟှေဝ် အ်ုကုယိုင့်ကု ယ၀့် မွဲာအ်ုဟှေဝ် ထံင်အ်ုလုက်ဆိင့်ကိုဝ်ဟှာဍေဏှ် ဟ်ုမာဍံင်ဝေ့ ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာဏ်ှအေးလှ်။
၂၄။ ဆ်ုလုဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာသီးဏှ် မွဲာဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့်မွဲာအေး ။ မွဲာဟ်ုထီဟ်ုသိုဝ်မွဲာအေး။ ဆ်ုလုဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာဏှ် ဟ်ုဝးအ်ှကှေ်ဝေ့ ဟ်ုသာ ဝေ့သိုဝ်ဟ်ုကုဆာ.သိုဝ်ဏ်ှလှ်။
၂၅။ ဆ်ုလုဟ်ုလေ၀် (ခစား)ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာအ်ှဏှ် အ်ုလင်အေယာင်ထ်ုလိုင့်ခ၀့် ဟ်ုအှ်ဝေ့အေး။ အ်ုလင်.အေ
၀ုဂ်ထ်ုလိုင့်ခ၀့် ဟ်ုအှ်ဝေ့အေး။ လ်ုလီထ်ါဏှ်ခ၀့်ဍ၀် ဟ်ုအှ်ဝေ့အေး။ လ်ုအုမေံယာ့တ၀်တ၀ဏှ်ခ၀့် ဟ်ုအှ်ဝေ့အေး။ လု အ်ုလင်ဖိုဟ်ထ်ုလိုင့်ဏ်ှခ၀့် ဟ်ုအှ်ဝေ့အေး။ လ်ုအုလင်ထ၀့်ထ်ုလိုင့်ဏ်ှခ၀့် ဟ်ုအှ်ဝေ့အေး။ ဆ်ုလုဟ်ုလေ၀် ခါစာ ဟု ၀ုံးဟ်ုဃွှာသီးလ်ုဖး ဆ်ုဃှူ့မိင်ဏှ် ဟ်ုဝးသှေ်ယာ့ ဟ်ုဝးဏးသှေ်ဝေ့လှ်း
၂၆။ ဟ်ုလုဟှာအ်ုဂုဏ်အှ် ဝေ့သိုဝ် ကျာ်က်ုဆာ.ကုံင် လာ.ဏင့်သီး အ်ုဆုဍံင်ထိုဝ်သာ ဍေဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာ အေလ်ုအှ်ဝး ဟှေဝ်အေး။ ဆ်ုလုမ္နိက်သီးယိုဝ် အ်ုလူ.အ်ုဃှဲိုဍောဟ်ဟှေဝ် လာ.ဏင့်သီး အ်ုဆုဍံင်ထိုဝ်သာ ဍေဓံင့်အေလ်ုအှ်ဝး ဟှေဝ်အေးလှ်။
၁။ ဆ်ုလုဂ္မီ့သင့်သီး အေအ်ှဍေဟ်ုမူးဟ်ုမိုင်ဏှ် ထံင်ခ၀့်လယ့် အ်ုသီ့လာမ်ုခိုင့် ဟ်ုမ္နီဟ်အင်း ဆ်ုဖါ်ဆ်ုယးဆံင်းလ်ုဟှာ ဏှ် ထံင်ခ၀့်လယ့် ဆ်ုယင့်သာမ်ုအှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်အ၀်သ်ာအ၀်မေ၀်ဆံင်းလ်ုဟှာဏှ် ထံင်ခ၀့်လယ့် အ်ုဆုခုါင်မ်ုတ၀် ။ ဟု လ်ုဟှာဏှ် ဆ်ုကျုင်းက်ုထူ့အေဍောဟ် ထံင်ခ၀့်လယ့် ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးမ်ုအှ်။ ဟ်ုလုဟှာဏှ် ဆ်ုသာထင်း အေဍောဟ် ထံင်ခ၀့်လယ့် အ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာမ်ုဏေ၀်.။
၂။ ဟ်ုမ္နီဟ် အ၀်သ်ာအ၀်မေ၀်ဆံင်းလ်ုမိင် စာင်းကုင်ထ္မင်. လ်ုအုခါ့လ်ုအှ်ဝးလ်ုမိင် ဟ်ုမ္နီဟ် ဆ်ုပါမုက်ပါလာဆံင်းလု မိင် ဟ်ုမ္နီဟ် ဍောဟ်ဖယ်လောဟ်ကဲုိဆံင်းလ်ုမိင် ဟ်ုမ္နီဟ် ကျုင်းက်ုထူ့ဆံင်းလ်ုမိင် ဟ်ုမ္နီဟ် အ်ှဍိင်ဍေ ထီသိုဝ်လ်ုဟှေဝ်၀းလ်ုမိင် အ်ုတိုင်မ္နီဟ်သီးလ်ုဖး အ်ုဆုဖ်ါဆုမာ မ်ုဟှာဟှံင်ဖဲုဝေ့လှ်။
၃။ ကေမူ.ဆာ့ဏှ် ဟ်ုလုယောဝ်.၀း ဟ်ုလ၀်ဝေ့ဆု ဏင်.မိင်အေး။ ကေမူ.ဏာဏှ် ဟ်ုအင်းစာအေလ်ုဟှံင်ဝး ဟ်ုလ၀်ဝေ့ဆ်ုဏင်.မိင်အေး။ ပ္မာ့မွဲာဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုလုမျး လေ၀်စာင်းမိင်လး သာမဲဆု ယောဝ်.ထာင်မေံယာ့ လင်ခါင့်သိုဝ်ဏ်ှလှ်။
၄။ “ဗျာသ”ဆြာ့လ၀်ဝေ့ ဟ်ုမ္နီဟ်ယှင်းဖေါဟ်လ်ုဟှာ ဟ်ုမ္နီဟ်စုဂ်ဆာ့လ်ုဟှာ ဟ်ုမ္နီဟ် အိုင်ခ်ါလုဟှာ ဟ်ုမ္နီဟ်အ်ုဍီးအု မာ.အးလ်ုဟှာ ဟ်ုမ္နီဟ်ဝး ခါစာ ဟ်ုဍောဟ်ဟ်ုမူ. ဟ်ုဝုံးဟ်ုဃွှာလ်ုဟှာ ဆ်ုယဲာဟှာဏှ် အ်ုသာအေမိုင့် လာ.ဏင့်သီး ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုမ္နီဟ်သီ့သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။
၅။ ဆ်ုလုတုာပညာ့သီးလ်ုဖး ယင်.သူ့သ္နာ အေလ်ုထံင်ဍ်ာဝးခါ့ဏှ် အေဍးစိုဝ်၀ယ်ဝေ့ ဟှာဃှေဝ်ခွိက်ဝေ့ လ်ုအုယာင်လှ်။ ယင်.သူ့သ္နာ အေဟှယ့်ထံင်အိုဝ်ဍ၀် ဆ်ုသာမဲဏှ် အ်ှကှေ်ဝေ့လ်ုအုသာဖိုင် ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၆။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုမီ့ဆံင်းလ်ုဟှာ ဟ်ုသာဖိုင် သာဏင်းဆ်ုဆံင်းလ်ုဟှာ ဟ်ုယောဝ်.လင်ဍးဝေ့အ်ုဟှင်.လ
၀့်လ်ုဟှာ ဟ်ုဆုစုဂ်ဆ်ုဆာ့ဍောဟ်လ်ုဟှာ ဟ်ုကျုင်းက်ုထူ့ဆံင်းလ်ုဟှာ ဟ်ုဆုဏာ့ဟှာဆံင်းလ်ုဟှာ ဟ်ုမ္နီဟ်ခွိက်ယှိုဝ် ဆ်ုမာအ်ုလီ အင်းဃှူ့ဆ်ုမာအ်ုသင့်ကဲလ်ုဟှာ ဆ်ုနဲို့ဟှာဏှ် ဟ်ုခိုဝ်လင်လ်ုလိက်ဖိုင်လဲာဖိုင် (ကျမ်းဂန်) ဖိုင် သှေ်ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၇။ လာဘ်လာဘဟှေး လ်ုဖုံယှင်းဒဒုက်အ်ှဏှ်လေ၀်အ်ှလာ. လ်ုဖုံဆ်ုအှ်ဆ်ုယိုင်အ်ှဏှ် လာဘ်အ်ှအးယုဂ် ဏ်ုလ၀်ဝေ့ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ် ဏေ၀်.အေးလှ်။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် “ကံ”ဏ်ှမွဲာအ်ုထါ်လှ်။ ပ္မာ့မာသာဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုလ၀်ဆု ဟှေး ဆု် ဆိုင် လ်ုမာ့ဆ္မ်ါဖိုင်ဏှ် ထီ့ဃှဲိုယုဂ် ဆိုင်လာ.လ်ုဃှေဝ်။ ဆ်ုသာ့လာ.လ်ုခံင်သူ့ခေါဟ်ှဍာဏ်ှလှ်။
၈။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဏ်ုမာဆ်ုလုမိင်မိင်လာ.ဏင့် ဏ်ုမာဖှေ်ဖုံအေဟှံင် ဖုံယောဝ်.ခွါ.ထာင်ဏှ် အ်ှဏင်.ဟှာအေး လှ်။ စင်ဝိုဝ်ဏှ် ဏ်ုမာဆ်ုလုမိင်မိင်ဟှေဝ် ဏ်ုဝးမာဍေ ဆ်ုအှ်ကှေ်ထ၀်.ဏ်ှလှ်။
၉။ ဆ်ုလုက်ါယယ်သီးယိုဝ် မွဲာအ်ုသူ့ထုက်လှ်။ ဆ်ုဃှဲု့ဏာင်းက်ါယယ်ဏှ် မွဲာဝေ့ဟ်ုဒ္ဂေတ် ပွါ လ်ုဟှေဝ်၀းလ်ုဟှာဏှ် လှ်။ ဆ်ုဃှဲု့ဏာင်းအ်ုဍာ်ဏှ် မွဲာဝေ့ဟ်ုမ္နီဟ် လ်ုဆံင့်ဏးဝး မောဝ်.ဖါ.အ်ုဆုခုါင်ဝးဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဃှဲု့ဏာင်းအ်ုဍာ်ဏှ် မွဲာဝေ့ မ္နီဟ်စာင်းဟှာဃှေဝ် ကျာ်က်ုဆာ.ကုံင် အ်ုသာသ္နာ့ဏ်ှလှ်။
၁၀။ ဆ်ုလုခေါဟ်မောတ်လုံ. (ကျောက်ထီး) သီးယိုဝ် မွဲာအ်ုဃှိုင့်ထုက်လှ်။ ဆ်ုဃှိုင့်ဏာင်း ခေါဟ်မောတ်လုံ.ဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုအိင် အ်ုဆုခုါင်ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဃှိုင့်ဏာင်း ဟ်ုအိင်အ်ုဆုခုါင်ဏှ် မွဲာဝေ့ မောဝ်.ဖါ.အ်ုဆုခုါင်ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုဃှိုင့်ဏာင်း မောဝ်.ဖါအ်ုဆုခုါင်ဏှ် မွဲာဝေ့ ကျာ်က်ုဆာ.ကုံင် အ်ုဆုခုါင်လှ်။
၁၁။ ဆ်ုလုဟ်ုစူးထွဲဏှ် မွဲာဝေ့ဟ်ုဏင့်က်ုဆာ. အ်ုဃှံင်အ်ုယှာ.လှ်။ ဟ်ုစူးထွဲလ်ုခ၀့် စူးဍေ၀်ဏ်ှဍ၀် မွဲာဝေ့ ဟ်ုဏာ. ဟ်ုဏာ့ ဟ်ုမေ့သးသီး အ်ုဃှံင်.အ်ုယှာ.ဏ်ှလှ်။ ဟ်ုစူးစှေ်ဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုခင်းသီး အ်ုဃှံင်.အ်ုယှာ.လှ်။
၁၂။ ဆ်ုလုဖူလးသီးယိုဝ် လ်ုအုကုာဏှ် မွဲာဝေ့ ဟ်ုအိင်ကုဝေရ အ်ှခိုဝ်ဝေ့ဏ်ှလှ်။ အ်ုယီမီ.မံင်ဏှ် မွဲာဝေ့ “လ်ုကု” (ဘီလူး) အ်ှခိုဝ်ဝေ့ဏ်ှလှ်။ အ်ုလးခီ့ဏှ် မွဲာဝေ့ ကဠကဏီ ဟ်ုအိင်မိစ္ဆာ အ်ှခိုဝ်ဝေ့ဏ်ှလှ်။ စင်ဝိုဝ်ဏှ် ဏ်ုအေ အင်းဖူလးဏှ် ဏ်ုဝးကိင်းထေံခွိက် အ်ုမီ.မံင် ဍေအ်ုလးခီ့ဏ်ှလှ်။ ထံင်ဏှ် လ်ုဖိုင့်ခိုဝ်း ဏ်ုကျာ်သြီ့ထင်းထ၀့်ဝေ့ဍးလှ်။
၁၃။ ဆ်ုလုဟ်ုကေ၀်လိက်လုံ.ပးဏှ် ဟ်ုဗြုမ်.သီးအ်ှခိုဝ်ဝေ့လှ်။ ဆ်ုလုရုက်လး လိက်ထူ့လိက်အုဂ်သီးဏှ် ဟ်ုအိင် ဗိဿဏူး အ်ှခိုဝ်ဝေ့လှ်။ စင်ဝိုဝ် ဟ်ုမာလောဟ်ပညာ့ ဖေါဟ်သီးလ်ုဖး အေ၀းသာ ဟ်ုအိင်သီးအ်ှခိုဝ် ယောဝ်.ခွါ.လင်ဏှ် ဟ်ုဝးပူဇ၀်.လိက်လုံ.ပး လိက်ရုက်လး လိက်ထူ့လိက်အုဂ်ဏ်ှလှ်။
၁၄။ ဆ်ုလုဆ်ုနိုင့်သီးယိုဝ် မွဲာဝေ့ အင်းဝူးလင် ဟ်ုမ္နီဟ် တာင်ဍောဟ်ထင်းဟ်ုမ္နီဟ်လှ်။ စင်ဝိုဝ်ဏှ် ဟ်ုဝးပါကဲဝေ့ ဆု နိုင့်ဏှ် ဟ်ုဝးယောဝ်.ခွါ.ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် မောဝ်.ဖါ.သီးသိုဝ်လှ်။
၁၅။ ဟ်ုမ္နီဟ် အင်းဆ်ုနိုင့်ယးသီးဏှ် ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် အင်းထာင်အ်ုမောဝ်.ဖါ.အ်ုယးသိုဝ်လှ်။ ဆ်ုနိုင့်အေသီ့အိုဝ် ဟ်ုဝးထောဟ်လင်ယွာခွိက် ဟ်ုဝး၀ူးလင်ခွိက် လင့်က်ုထး ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုနိုင့်သီး အေယှာ.ထင်းအိုဝ် ဟ်ုဝးယောဝ်.ခွါ. ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုယောဝ်.ခွါ.မောဝ်.ဖါ.ဏ်ှသိုဝ်လှ်။
၁၆။ ဟ်ုမာလောဟ်ပညာ့ လ်ုမိင်မိင်လာ. ဟ်ုအေမာလောဟ်လင် လ်ုမူ.ဗြဲပ္တ်ါလုဏီဏှ် သှေ်ကဲလုက်ခုါလှ်။ ဟ်ုအေ မာလောဟ်လင် မူ.အ်ုတုက် ဍေမူ.အ်ုသုဂ်ဏှ် သှေ်ကဲဝးဍာလှ်။ ဟ်ုအေမာလောဟ်လင် လ်ုမူ.အ်ုစန် ဍေမူ.ဗုဒ္ဒ၀ါ. ဏှ် ဟ်ုသှေ်ပညာ့အေးလှ်။ ဟ်ုအေမာလောဟ်လင် လ်ုမူ.သ်ာသ၀့်လ်ုဏီဏှ် ဟ်ုသီ့ကုင်သှေ်ဝေ့လှ်။
၁၇။ လာယောတ်ထင်းဃှိုတ်သင့် လာလင်ထာင်ဃှိုတ်သင့်ဏှ် ဟ်ုအေမာလောဟ်ပညာ့ ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုမာသီ့ အ္စာဆြာ့သိုဝ်လှ်။ လာယောတ်ထင်း (၁၄)သင့် လာလင်ထာင် (၁၄)သင့် ဏှ် ဟ်ုအေမာလောဟ် ပညာ့ ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုမာသီ့ ဟ်ုဖုဲာဟ်ုဝုံးလှ်။ လာယောတ် (၁၀)သင့် လာလင် (၁၀)သင့်ဏှ် ဟ်ုအေမာလောဟ် ပညာ့ ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုမာသီ့ပညာ့ဏ်ှလှ်။ လာဃှဲိုလ်ုဏီဏှ် ဟ်ုအေမာလောဟ် ပညာ့ ၀းဍံင်ဝေ့ ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုမာသီ့ထာင် ဟ်ုမောဝ်.ဟ်ုဖါသိုဝ်လှ်။
၁၈။ ဟ်ုမာလောဟ်ပညာ့ လ်ုဟှာဟှာသီး လာယောတ်ထင်း (၇)သင့် လာလင်ထာင်(နဲို့)သင့် ဏှ် ဟ်ုအင်းဝေ့ ဖု ၀်သးအေး လာယောတ် လာလင်ခဲိုသင့်ဏှ် ဟ်ုအင်းဝေ့ လုင်.သးလုင်.လးအေးလှ်။ လာယောတ် လာလင် (၁၂) သင့်ဏှ် ပြင်ပိင်းသး (ကင်းပိန်းသီး) ဏှ် ဟ်ုအင်းဝေ့အေး ။ လာယောတ် လာလင် (၃)သင့်ဏှ် ဟ်ုအင်းဝေ့သိုင့် ဆ်ုဖါ်ဆ်ုယးအေးလှ်။
၁၉။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုမူးဟ်ုခွါ့ ဟ်ုဆိုဒ်ဟ်ုဆး အ်ုဟှင်.ဏှ် ဟ်ုခွိက်ယှိုဝ်၀းဝေ့ ဟ်ုလုဟှာကဲလှ်။ ဟ်ုဍုံတွာန့် အ်ုဟှင်.ဏှ် ဟ်ုခွိက်ယှိုဝ်၀း ဟ်ုမူးဟ်ုခွါပသီးကဲလှ်။ ဇနပုဒ်လ်ုဖုံးအ်ုဟှင်.ဏှ် ဟ်ုခွိက်ယှိုဝ် ဟ်ုဍုံဟ်ုတွာန့်သီး ကဲဝေ့လှ်။ ဟ်ုဏင့်ဆာ.ဝေ့ဏှ် မ်ုဖံင်ဖေုဝ်ခွိက်သံင်သာ့အ်ုဟှင်.လှ်။ ဟှင်းခေါဟ် ထံင်အ်ုလုက်ယိုဝ်သီး ဟိုခွိက်ယှိုဝ်ဝေ့ ကဲဆေ၀်.လှ်။
၂၀။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဇာဒီသိုင့်လ်ုမိင် ဟ်ုမ္နီဟ်တ၀်လံင်ဟှေဝ်အွာလ်ုမိင် က်ုဆင့်ထီ.လ်ုမိင် ဆ်ုသိုင့်မိင်ဏှ် အ်ုသီးဝေ့ အ်ုလင်အ်ုကုယ် အေလ်ုဟှေဝ်လိုင်ဝး လ်ုလင်. အ်ုသီးဝေ့ အ်ှလိုင်ဝးဏှ် အ်ှဝေ့လိုင်အေး ။ ခွိက်ယှိုဝ်ဝေ့ကဲလှ်။ ကုာလ်ုမိင် ဟ်ုမ္နီဟ် ကာင်းကံင်းလ်ုမိင် ထ်ုရဲာဆ်ုဃှဝ်လ်ုမိင် ဆ်ုသိုင့်မိင်ဏှ် အ်ုသီးဝေ့ အ်ုလင်အ်ုကုယ်ဏှ် လ်ုလင်. အ်ှဝေ့လိုင်ဝး လာ.ဏင့်သီး ခွိက်ယှိုဝ်ဝေ့ကဲဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၂၁။ ဆ်ုအုလင်.လ်ုစံင်းဏှ် ဆ်ုသာထိင်. ဍေဟ်ုခ၀့်အ်ှအေး။ ဆ်ုအဲဆ်ုကဲုဟ်ုခ၀့်အ်ှအေး။ ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့် ထီသိုဝ် ခ၀့်အ်ှအေး။ ဆ်ုမာလောဟ်ဟု ပညာ့အ်ှအေးစ်ါဝိုဝ် ဆ်ုအုလင်ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဏှ် ဟ်ုအှ်ဝေ့အေးလှ်။
၂၂။ ဆ်ုလုတုာပညာ့သီးလ်ုဖး အေခါ့ထင်းအ်ုခင်း လ်ုခ၀့်ဏှ် ဝေ့သိူဝ် အင်းဃှူ့ဏေ၀်. အ်ုလင်သင့်သိုဝ်လှ်။ ဆီ့ထုင်းထဝေ့ လ်ုခ၀့်ဏ်ှဍ၀် ဝေ့သိုဝ် ခွိက်ယှိုဝ်ဝေ့ အ်ုလင်လီ လ်ုကဲဝးသိုဝ်လှ်။ ဟ်ုလင်.အ်ုသင့်ဏှ် ဟ်ုအင်းဃှူ့အေ လ်ုဏေ၀်.ဍ်ာဝး ဟ်ုလင်လီဏှ် ဟ်ုခွိက်ယှိုဝ်ဝေ့အေးလှ်။
၂၃။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယိုဝ် ဟ်ုကူဗ်ုဏိက်ခါန်.ခါ (ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး) အ်ုခါ့ဏ်ှလုမိင် ဟ်ုအင်းဃှူ့ပညာ့အ်ုခါ့ဏှ် လ်ုမိင် ဟ်ုလေ၀်ကဲ ဖုံဃှံင်.အ်ုခါ့လ်ုမိင် ဟ်ုမီ့ဃှုက် ဍေဖေါဟ်မာ့အ်ုခါ့လ်ုမိင် ဆ်ုအုခါ့ လီ.မိင်ဏှ် ဟ်ုဝးအ်ှကှေ်ဝေ့ ဆ်ုကးသာ လ်ုလင်ခါင့် လ်ုခ၀့်ဏ်ှလှ်။
၂၄။ ဟ်ုမူးသီးလ်ုဖး ဆ်ုအင်းဆ်ုအ၀်ဏှ် အင်းဝေ့ကဲဏာင်းဝေ့ဟ်ုခွါ့ ဏီ့က်ုဍာ (ဏီ့စာ)(၂-ဆ) လှ်။ မာလောဟ်ပညာ့ဏှ် သီးကဲဏာင်း ဟ်ုခွါ့ လီ.က်ုဍာ လီ.စာ (၄-ဆ)လှ်။ အ်ုဝိရိယ အ်ှဏာင်းဟ်ုခွါ့ ဃှူ့က်ုဍာ ဃှူ့စာ (၆-ဆ) လှ်။ အ်ုသီး ကာမဂုဏ်ဏ်ှဍ၀် အးဏာင်းဟ်ုခွါ့ ဃှိုတ်က်ုဍာ ဃှိုတ်စာ (၈-ဆ)လှ်။
၂၅။ ဆ်ုလုဆီ့ဖေါဟ်သီးယိုဝ် လ်ုခ၀့် လ်ုအုခီ့ဏှ် ထံင်လု အ်ုခင်းထ်ါအိုဝ် လ်ုဖေါဟ်ဟှံင် လ်ုဖေါဟ် ဍိင်ယိက်ဍိင်ဆိုင့်ထင်းဝေ့လှ်။ ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့် အ်ုသာတ၀်လံင်သီးလ်ုဖး ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဝေ့သိုဝ် ဆီ့ဖေါဟ်ဆိုင့်လင် လ်ုအုခီ့ဟှံင် ဟှးထင်းဝေ့ လ်ုအုထ်ါဏှ်သိုဝ်ဆေ၀်.လှ်။ ဍိင်ယိက်ဍိင်ဟှေဝ်တင်းဝေ့လှ်။ ဟ်ုသောဟ်ဟ်ုသင့် ကာင်းကံင်းသီးလ်ုဖး ၀းဍံင်ဝေ့ ဆီ့ဖေါဟ်ဆိုင့်လ်ုအုခင်းထ်ါဟှံင် ဟှးထင်းဝေ့ အ်ုခီ့သိုဝ်လှ်။ ဍိင် ယိက်ဍိင်အ်ုဆိုင့်ဝုါလင်ဝေ့လှ်။
၁။ ဆိက်ဆာ. ကေုာဝ်ဆာ. အေဍုဂ်ပါင်ဆေ၀်.။
၂။ ဂ္မီ့သင့် ဍုဂ်ပါင်ဍေသီ့လာပ်ုဒါန်. အေအ်ှဆေ၀်.။
၃။ ဆ်ုကုဗ်ုဏိက်ခါန်.ခါ အ်ှအေအးဆေ၀်.။
၄။ တုာပညာ့မူးမတ်အေအ်ှဆေ၀်. စ်ါဝိုဝ် ထီ့ခါန်.ဍုံဌာန့်ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်လ်ုဖုံးဏှ် ဍောဟ်ယှာ.စီကုာထင်းကဲဝေ့လှ်။
၂၇။ တုာပညာ့လ်ုဟှာဏှ် အေသှေ်လာ.ဏင့်ပညာ့ ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးအေအးသီး ထောတ်လဲအ်ုနိုဝ် ဆောတ်ဖးအ်ုနိုဝ် အေလ်ုကဲဝး အ်ုပညာ့ဏှ် လင်မာ.ဝေ့ဖဲုလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ် ကျုင်းက်ုထူ့လ်ုဟှာဏှ် အေလ်ုအင်းတာင် လ်ုယောဝ်.ဟှေဝ်၀း ဏှ် ဟှာဟှံင်ဝေ့ဖဲုလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်လ်ုဟှာဏှ် အ်ုရုက်သ်ါအှ် အ်ုခိင်.ဃှီ့အ်ုဟှင်ဟှေဝ် လာ.ဏင့်သီး အေကျုင်းက်ုထူ့ဆေ၀်.စ်ါဝိုဝ် စီ့စးလးအိုင်လင်ဝေ့လှ်။ ဂ္မီ့သင့်သီး အေသာဏင်းက္မ၀့်ဓ၀်. အေသာဏင်းမျေင်.လင်အ်ုသာ ဍေသီ့လာဆေ၀်.စ်ါဝိုဝ် ဟှာဟှံင်ဝေ့ဖဲုလှ်။
၂၈။ ဍုံလုက်ဖိုင်ယုိုဝ် ဟ်ုမ္နီဟ်ကျုင်းက်ုထူ့သီး အ်ုဆုဖ်ါဆုမာဏှ် ၀းထာင်ကဲဝေ့ ဟိုမ္နီဟ်(ဃှာ)သီး အ်ုဆုဖ်ါဆုမာလှ်။ ဟ်ုမ္နီဟ်ကျုင်းက်ုထူ့သီးလ်ုဖး မာဆ်ုလုမိင်မိင် မွဲာအ်ုဟှေဝ် “မွဲာဆ်ုဝုံး”အ်ုဝီ.လ်ုကျးအိုဝ်လှ်။ လ၀်လင်အ်ုသီးသာ ဝေ့ဏ်ှသိုဝ်လှ်။
၂၉။ တုာပညာ့သီးလ်ုဖး ဆ်ုခုါင်ဝေ့ဏ်ှသိုဝ် လ၀်ဝေ့ဏင်.ဆောဝ်အေး။ ဆ်ုမာလ်ုမိင်ဟှေဝ် လ်ုမိင်ဟှေဝ် အ်ှကှေ်လင်ဝေ့အ်ုသာ ဍေ၀ိရိယာ (ဆ်ုဃှာ) ဏ်ှလှ်။ ဆ်ုမာလ်ုမိင်ဏှ် ဏ်ုမာအေလ်ုကဲထင်းဝး လာ.ဏင့်သီး ဝေ့သိုဝ် ဟ်ုသာအ်ှသိုဝ် ကဲထင်းလ်ုသှေ်ဝးဍာလှ်။ ဆ်ုဍယ်ဝါအ်ှသှေ်ဝေ့ ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။
၃၀။ ဆ်ုဝိုဝ်ဏာင်းယိုဝ် ဟ်ုမူးဍေဟ်ုခွါ့သီးလ်ုဖး ဟ်ုဆိုဒ်ဖိုဟ်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဆိုဒ်ထ၀့်မွဲာအ်ုဟှေဝ် ဆ်ုလုသှေ်ပညာ့ဝးသီးမွဲာအ်ုဟှေဝ် အ်ုဟှာင်.အ်ုဝျာ လ်ုအှ်ဝးသီးမွဲာအ်ုဟှေဝ် မွဲာမ္နီဟ်လးအိုင်သီးမွဲာအ်ုဟှေဝ် ဆ်ုဖုယိက်ဏှ် ဖံင်သှေ်ဝေ့ ဏင်.ဆောဝ်အေးလှ်။ လာယဏင့်သီး ကာလာဝိုဝ်ဏာင်းယိုဝ် မွဲာဝေ့ ကာလာဆုဂ်လှ်။ စင်ဝိုဝ်ဏှ် ဟ်ုလုဟှာဟှေဝ် လ်ုဟှေဝ် ဟ်ုဆုအ်ှဆုဆံင့် အေအးဆေ၀်. ဟ်ုဆုအ်ှဆုယိုင် အေမွဲာဆေ၀်.ဏှ် မွဲာအ်ုဟှေဝ်ထုက် အ်ုမေံသးအ်ုလဲာထုကလှ်။ ဟ်ုစေ၀်ဟ်ုဓံင့် ဟ်ုဆုအှ် ဆ်ုဆံင့်ဏှ် မွဲာဝေ့ ပဓာန မူ့လာ အ်ုခင်းထ်ါလှ်။ ထံင်ဏာင်းဏေ၀်.သာ့ ကိုဝ်ဟှာဍေ။ ဟှံင်ယုဂ် ၁၉၊၁၀၊၂၀၀၈--မူ.အ်ုတုက်
ရှေးဟောင်း ကရင်စာပေဖေါ်ထုတ်ရေး ဗဟိုကော်မတီရဲ့ ကိုယ်စား နတ်တော်လဆန်း(၁)ရက် (၁၀၊၁၂၊၆၉)နေ့ညက ဓမ္မဗိမာန်စာတန်းဖတ်ပွဲမှာ ဖတ်ကြားပါတယ်။ ဆရာတော် ဦးဝဇီရဗုဒ္ဓိဟာ မန္တလေး လောကုတ္တရာစာပေလောကမှာထင်းရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ အဘိဓမ္မာဆိုင်ရာ ယမိုက်အရကောက်၊ ပဌာန်းအရကောက်ကျမ်းများကို ပြုစုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ညစာဝါ တစ်ချိန်ဖျက်ပြီး ဒီစာတမ်းကို လာဖတ်ရာမှာ အသံသြဇာ အင်မတန် ကောင်းပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဆရာတော် သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကွ ပရိတ်သတ်များကို ကရင်စာဆို တဦးဖြစ်တဲ့ လာဘက၀ိလို့ ခေါ်တဲ့ ဖူ့ နဲာစ်ုဖိုဒ် အတ္ထုပ္ပတ္တိကို မပြောခင် ကရင်စာပေအကြောင်းကို နိဒါန်း အဖြစ်နဲ့ နည်းနည်းရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေ။
ရှေးဟောင်းကရင်စာပေတွေထဲမှာ ရေးသားထားတဲ့ ပေရေးကရင်စာဆိုတာ မြန်မာရော မွန်ရော အခုရေးသားအသုံးပြုနေကြတဲ့ ပလ္လ၀အက္ခရာနဲ့ ရေးတဲ့ အရေးအသားမျိုးပဲဖြစ်တယ်။
အထက်ကျော်ကာရီက သထုံနဲ့မုတ္တမဟာ သင်္ဘောဆိပ်မြို့များဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဒေသမှာ မွန်များ နှင့်ကရင်များဟာ ဒွေးရောရှက်တင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ အိန္ဒိယကကုန်သည်တွေဟာ (၇)ရာစုနှစ် မတိုင်မီက တည်းက သထုံနဲ့မုတ္တမကို အကူးအသန်းရှိကြပြီး အဲဒီအချိန်လောက်တုန်းကဘဲ အိန္ဒိယကုန်သည်များ ယူဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့ ပလ္လ၀အက္ခရာ အရေးအသားကို မွန်နှင့်ကရင်က မိမိတို့ရဲ့ အသံထွက်အတိုင်း ပေါ် လွင်အောင်ရေးသားနိုင်တဲ့ စာရေးနည်းကို ရရှိကြတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။
ပလ္လ၀အက္ခရာဆိုတာက အိန္ဒိယပြည်ရဲ့ ရှေးအကျဆုံး ဗြဟ္မီအက္ခရာကို ဒေသအလိုက်မူကွဲတွေ ပွားယူကြတဲ့အခါမှာ ဂုတ္တမင်းဆက်ရောက်တော့ ဂုတ္တအက္ခရာ၊ ကဒမ်ဗမင်းဆက်ရောက်တော့ ကဒမ္ပအက္ခရာ၊ ပလ္လ၀မင်းဆက်ရောက်တော့ ပလ္လ၀အက္ခရာရယ်လို့ မူလဗြဟ္မီအက္ခရာက ရေးပုံသားပုံပြောင်းပြောင်းပြီး ဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အက္ခရာပါပဲ။
အခုဗမာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ အက္ခရာရဲ့ အရင်းအမြစ်ဟာ ပလ္လ၀အက္ခရာပဲပေါ့။ ဒီအက္ခရာဟာ အိန္ဒိယကုန်သည်များကတဆင့် မြန်မာပြည်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အက္ခရာသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အထောက်အထားတွေ ရှာဖွေကြည့်တော့ ရခိုင်ဘက်မှာဂုတ္တအက္ခရာနဲ့သက္ကဋကျောက်စာတွေ ၊ဟန်လင်းဘက်မှာ ဂုတ္တအက္ခရာနဲ့ ပျူကျောက် စာတွေကိုတွေ့ရလို့ ဗမာပြည်ထဲကို ဂုတ္တအက္ခရာဝင်ရောက်လာတာဟာလဲ ခရစ်နှစ် (၄၀၀)ထက်မစော (၆၀၀)ထက်နောက်မကျလို့ သုတေသီများက ယူဆထားကြတယ်။ ပြီးတော့ သရေခေတ္တရာက ပျူတွေက ကဒမ္ပအက္ခရာကိုသုံးပြီး သုထုံနဲ့မုတ္တမဘက်က မွန်များကတော့ ပလ္လ၀အက္ခရာနဲ့ ခရစ်နှစ် (၇၀၀) လောက်မှ စတင်အသုံးပြုတယ်လို့ ယူဆရတာကြောင့် ဒီအချိန်က မွန်နဲ့အတူနေတဲ့ ကရင်များကလည်း အဲဒီ ခေတ်လောက်ကဘဲ ကရင်စာကို ပလ္လ၀အက္ခရာနဲ့ ကရင်အသံထွက်အတိုင်းပွားပြီး သုံးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။ ကျောက်စာမှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ရင်
၁။ အနိရုဒ္ဓါ (အနော်ရထာ)ဟာ ခရစ်နှစ် ၁၀၄၇-၇၇ မှာ ဘုရင်မှတ်တမ်းကို သက္ကဋပါဠိရေးတဲ့ စာနဲ့ရေးမှတ် တယ်။
၂။ ကျန်စစ်သား (ထီးလှိုင်ရှင်)ဟာ ခရစ်သက္ကရာစ် ၁၀၄၄- ၁၁၁၃ မှာ မွန်ဘာသာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
၃။ အလောင်းစည်သူ (၁) ဟာ ခရစ်နှစ် ၁၁၁၃- ၆၃ မှာ ပါဠိနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
၄။ ရာဇကုမာရ် (ကျန်စစ်သားရဲ့သား) ဟာ ခရစ်နှစ် ၁၁၁၃-မှာပါဠိ၊ မွန်၊ ပျူ၊ မြန်မာ ၄ မျိုးပါတဲ့ မြစေတီကျောက် စာကို ရေးထိုးပါတယ်။
၅။ နရပတိစည်သူဟာ ခရစ်သက္ကရာစ် ၁၁၇၄-၁၂၁၉ မှာ မြန်မာဘာသာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
အဲဒီအထောက်အထားအရ ပလ္လ၀အက္ခရာကို မွန်နဲ့တပြိုင်ထဲ ။ဒါမှမဟုတ် မရှေးမနှောင်း အသုံး ပြုခဲ့တဲ့ ကရင်စာဟာ ခရစ်နှစ် (၇၀၀) လောက်မှာဘဲ စာပေအရေးအသားအတတ်ပညာကို တတ်ပြီးလို့ ခန့်မှန်း ရပါတယ်။ ဒီခန့်မှန်းချက်အတိုင်းဆိုယင် ရှေးဟောင်းကရင်စာပေဟာ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀) ပင်ကျော်ပြီလို့ ဆိုသင့် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မွန်စာနဲ့ကရင်စာဟာ နွယ်နေပါတယ်။ ရှမ်းစာဟောင်းနဲ့ ပအိုဝ်စာဟာလဲ မြန်မာစာ၊ ကရင်စာ၊ မွန်စာနဲ့ဂွင်းဆက်များဖြစ်ပါတယ်။ မူလဗြဟ္မီအက္ခရာရဲ့သြဇာဟာ သီဟိုဠ်၊မြန်မာ၊ ယိုးဒယား(ထိုင်း) လော၊ကမ္ဘောဒီးယားအထိ ပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။
မွန်တွေက ပလ္လ၀အက္ခရာကို အသုံးပြုပြီးကောင်းကောင်းကြီး စာပေရေးသားတဲ့ အတတ်ပညာကို တတ်ချိန်မှာ အတူနေကြတဲ့ ကရင်များလဲ မိမိတို့ဘာသာစကားအသံထွက်နဲ့ အဲဒီအက္ခရာကိုဘဲ အသုံးပြုပြီး စာ ပေရေးသားနည်းအတတ်ပညာကို တတ်မြောက်ပြီးဖြစ်ပေတယ်။ မွန်နဲ့ ကရင်တို့ရဲ့စာပေပညာတတ်ကျွမ်းချိန် ဟာ ခရစ်နှစ် (၇၀၀)ရာစုလောက်မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာက (၁၁) ရာစုလောက်ကျမှ ဒီအက္ခရာနဲ့ပဲ မြန်မာစာကို ကောင်းကောင်းကြီး ရေးသားအသုံးပြုလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လေ့လာရသလောက်ဆိုယင် ရှေးက ရေးသားထားခဲ့တဲ့ ကရင်စာပေတွေအားလုံးဟာ ကရင်ကဗျာ လင်္ကာနဲ့ချည်း ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ စကားပြေနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ကျမ်းရယ် ပေရယ်လို့ တစောင်တဖွဲ့မှ မတွေ့ရသေးပါ၊
ရှေးကျတဲ့ ကရင်စာပေအရေးအသားကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ မွန်ဝေါဟာရအတော်များများသုံးနှုန်း ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းပေစာတွေကျတော့ ကြိုကြားကြိုကြားဆိုသလို မြန်မာဝေါဟာရများထည့် သွင်းအသုံးပြုလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သဘောကတော့ ရှေ့က မွန်ခေတ် မွန်စာ တွင်ကျယ်တဲ့ အချိန်မှာ မွန် ဝေါဟာရတွေကိုယူပြီး သုံးသလောက်သုံးကြတယ်။ မြန်မာစာဂုဏ် မြင့်မားလာတဲ့အခါမှာ မြန်မာဝေါဟာရတွေကို သုံးလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါဘဲ။ ပါဠိဝေါဟာရတွေ ပါဠိပျက်တွေ သက္ကဋဝေါဟာရတွေကိုလဲ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးပြုထားပါတယ်။
ကရင်စာပေမှာ ဗျည်း (၃၆)လုံးနဲ့ သရ (၁၄)လုံးရှိပါတယ်။ ဗျည်းကတော့ က-ခ-ဂ-ဃ-င အစရှိတဲ့ အခု သုံးစွဲနေကြတဲ့ မြန်မာဗျည်း (၃၃)လုံးအပြင် (.၀။ဟှ။ဃှ)ဆိုတဲ့ ဗျည်သုံးလုံးပိုပါတယ်။
သရကတော့ ဗမာလက်ရှိ မြန်မာသင်ပုန်းကြီး သရထက်(၂)လုံးပိုပါတယ်။
ဗျည်းနဲ့သရကို လေ့လာပြန်တော့ ကရင်စာကိုရေးတဲ့အခါ မူလကရင်တို့ရဲ့အသံထွက်ကို တိကျမှန်ကန်စေဘို့ ဗျည်း (၃) လုံးနဲ့ သရ (၂) လုံးကို ထူးထူးခြားခြားထည့်သွင်းထားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ ဗျည်းကို (၃၆)လုံးအထိ၊ သရကို (၁၄) လုံးအထိ ယူငင်သုံးထားတာကို လိုအပ်တာထက် ပိုယူထားတယ်လို့မထင်မှတ်သင့်ပါဘူး။ ရှေးကရေးသားထားခဲ့ ကြတဲ့ပေစာတွေမှာ အဲဒီ (၃၆)လုံးဗျည်းကိုပဲ သူ့နေရာနဲ့သူ၊ သူ့ဌာန်သူ့ကရိုဏ်းနဲ့သူအံကိုက်အောင် သုံးနိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးကို သက်ရောက်နိုင်တဲ့ စကားလုံးပေါ်ထွက်လာနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ပေစာတွေထဲက အက္ခရာနဲ့ ရေးသားဟန်တွေ သုံးနှုံးတဲ့ ဝေါဟာရတွေ ရေးသားတဲ့အကြောင်းအ ရာတွေကို မွန်ပေစာ မြန်မာပေစာတွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ ရှေးကရင်စာပေရဲ့ အရေးအသားဟာ မွန်ပေ ဗမာပေ နည်းတူ တခေတ်နဲ့ တခေတ် ရေးပုံသားပုံမတူကြဘူးဆိုတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ ရေးဟန်ပြောင်းလဲသလိုအက္ခရာပြောင်းလဲလာတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ အထက်ကဆိုခဲ့သလို ကရင်စာဆိုတော်ကြီးများ ဂုဏ်ပြုပွဲကို ကျင်းပရာမှာ ငါးကြိမ်ရှိပြီး -ဂုဏ်ပြုပွဲများမှာ - ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့စာဆိုများဟာ ဘယ်သူတွေလဲ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတာကို သိလိုကြပါလိမ့်မယ်။ ထပ်မံဖေါ်ပြပါရစေ။
ပထမအကြိမ် - ၁၉၆၇-ခုနှစ်မှာ စုပေါင်းပြီး ကော့ဒါန်းမယ်ရွာ ဆရာတော် ဦးစန္ဒာဝရ ကို ဂုဏ်ပြုခဲ့တာက တစ်ကြိမ်။
ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ - ၁၉၆၈-ခုနှစ် ဖားအံမြို့ ကမော့ကစင်ရွာသစ်ကျောင်းကြီးမှာ ရှေးဟောင်း ကရင်စာပေကော်မတီက စုပေါင်းပြီး စာဆိုဆရာတော်ကြီး ဖူ့ကျိုင်စာသန့်- ခေါ် ဖူ့ကျိုင်စိန္တာက၀ိ -ကိုဂုဏ်ပြုပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာက တစ်ကြိမ်။
တတိယအကြိမ်ကတော့ - ၁၉၆၉-ခုနှစ် ကမော့ကစင် ကော့ပရံဆရာတော်ကျောင်းမှာ လာဘက၀ိ-ခေါ်ဖူ့နဲစဗို ဂုဏ်ပြုပွဲကို ရှေးဟောင်း ကရင်စာပေကော်မတီကဘဲ ဦးဆောင်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တာ တစ်ကြိမ်။ (အဲဒီ-၁၉၆၉-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၀)ရက်- ၁၃၃၁-ခုနတ်တော်လဆန်း (၁)ရက် နေ့ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းက ကျင်းပတဲ့ စာဆိုတော်နေ့မှာ -ဖူ့နဲစဗိုရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာတမ်းကို ရှေးဟောင်းကရင်စာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဖေါ်ထုတ်ရေး ကော်မတီကိုယ်စား မန္တလေးမြို့ တောင်ပြင် ထီးလင်းတိုက်စာချဆရာတော် ဦးဝဇီရဗုဒ္ဓိ-က တက်ရောက်တင်သွင်းဖတ်ကြားခွင့်ရခဲ့လို့-အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ခဲ့ရပါတယ်။
စတုတ္ထအကြိမ် စာဆိုပွဲကျင်းပခဲ့တာကတော့ -၁၉၇၀-ခုနှစ် နတ်တော်လကွယ်နေ့ ဖါးအံအောက်ရေတံခွန်ပရဟိတကျောင်းတိုက်မှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဘဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (ရှေးဟောင်းကရင်စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဖေါ်ထုတ်ရေး ကော်မတီက အထူးဖိတ်ကြားဖို့-အဲဒီ ကရင်စာဆိုဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပရာမှာ- ငွေကုန်လူပန်းခံပြီး မိမိတို့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ရိုင်းပင်ကူညီဘို့ဆိုတဲ့ တာဝန်တရပ်ကို ထမ်းဆောင်ပြီး မန္တလေးမြို့ အထက်ဗမာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်း ဥက္ကဌလူထု ဦးလှနှင့်ဇနီးစာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာတို့ တက်ရောက်အားပေးပြီး စာပေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဖေါ်ထုတ်ရေး ကော်မတီက ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့တာဟာ လေးကြိမ် (၄-နှစ်) အထိ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ပါပြီး။ ယခုနှစ် ပဥအကြိမ်မြောက် ကရင်စာဆိုဂုဏ်ပြုပွဲကို ကျင်းပဘို့ အခွင့်ကြုံခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ၁၃၃၃ ခု နတ်တော်လဆုတ် ၃-ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ ဖါးအံအပိုင်- ကမော့ကစင် ကော့ပရံကျောင်းဝင်းအတွင်း ရှေးဟောင်း ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖေါ်ထုတ်ရေး ဗဟိုကော်မတီမှ ကျင်းပသော (ငါးကြိမ်မြောက်) တိုင်းရင်းသား ကရင်စာဆိုတော် ဂုဏ်ပြုပွဲတွင် ဖတ်ကြားသော ဆရာတော်ဖူ့ကျိုင်စာဖေါ့ - ခေါ် ဖူ့ကျိုင်စန္ဒာဝရမှတ်တမ်းနှင့် ကရင်ယဉ်ကျေးမှု ဒုံးအက- စာတမ်းကို ဗဟိုကော်မတီမှ ခွင့်ပြုသည့်အလျှောက် ကြီးမှူးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ကရင်စာဆိုရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အမြောက်အများဘဲရှိခဲ့တယ်။ ဖူ့ကျိုင်စိန္တာက၀ိ - ဖူ့ကျိုင်မိုက်ခါ -ခေါ် -ဖူ့ကျိုင်ပညာ၊ ဖူ့ကျိုင်လာဘက၀ိ-ခေါ် ဖူ့နဲစဗို၊ ဖူ့ယောင့်တာပိုင်-ဖူ့သုံလျ၊ ဖူ့ကျိုင်စာဖေါ့-ခေါ် ဖူ့ကျိုင်စန္ဒာဝရ၊ ဖူ့နဲဒုံး၊ ဖူ့နဲဒီးအွာ စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ လူသိများထင်ရှားလှပါသည်။
အခု ရှေးပေရေး ကရင်စာပေနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ပေစာတချို့ကို ဖော်ပြသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၁။ ကပ္ပဗိန္ဒုကျမ်း ဖူ့တာမိုက် (ဦးနန္ဒမာလာ) ၁၁၆၉
၂။ ရာမလက္ခဏာဇာတ် ဦးစိန္တာက၀ိ ၁၂၃၂
၃။ ပါရမီခန်း ။ ၁၂၃၅
၄။ ကာဠုဒါယီလျှောက်ခန်း ။ ၁၂၃၇
၅။ မဒ္ဒီဆုတောင်းခန်း ။ ၁၂၃၉
၆။ သံသရာနှောင်ကြိုး (တြီးသံင်သာ) ။ ၁၂၄၀
၇။ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းဝတ်ထု ။ ၁၂၄၀
၈။ သင်္ဂဟကျမ်း ။ ၁၂၄၁
၉။ မူလာမူလီ ။ ၁၂၄၂
၁၀။ တဖန် ပဋိသန္ဓေနေခြင်း (သန်ဓိကလေင်) ။ ၁၂၄၃
၁၁။ နေမိဇာတ် ။ ၁၂၄၄
၁၂။ ရာဟုလာအမွေတောင်းခန်း ။ ၁၂၄၅
၁၃။ ၀ဏကုမ္မာ ။ ၁၂၄၆
၁၄။ စန္ဒကုမ္မာ ။ ၁၂၅၀
၁၅။ တေမိဇာတ် ဦးစိန္တာက၀ိ (ထပ်ကူး) ၁၂၆၉
၁၆။ ယသော်ဓရာ ကန်တော့ခန်း ။ သက္ကရာဇ်မသိ
၁၇။ ၀ိဓူရဇာတ် ဦးစန္ဒာဝရ ။
၁၈။ နာရဒဇာတ် ။ ။
၁၉။ ဝေသန္တရာဇာတ် ။ ၁၂၆၄
၂၀။ ဘူရိဒဇာတ် ။ ။
၂၁။ မဟောသဓာဇာတ် ။ သက္ကရာဇ်မသိ
၂၂။ သုဝဏ်ဏသျှံ ။ ။
၂၃။ ဒုံဆီဃှူ့ ။ ။
၂၄။ မိုက်ဒုံကေထော့ပုံပြင် (လူထုတိုက် ကရင်ပုံပြင် တတိယတွဲတွင်ကြည့်)
၂၅။ မဋ္ဌကဏ္ဍလီ ဦးသီဟတေဇ သက္ကရာဇ်မသိ
၂၆။ ယတြာကိန်း (ရေးသူမသိ) ။
၂၇။ သုဓန ။ ။
၂၈။ ပဒကုသလ ။ ။
၂၉။ တောက်ခဲ့ပုံပြင်(မွန်မှပြန်တယ်)ဦးသီဟတေဇ ၁၂၇၇
၃၀။ ဆာရ၀န်ပုံပြင် ဦးစန္ဒာဝရ သက္ကရာဇ်မသိ
၃၁။ ၀ိသာခါ ဦးဇာဂရ ။
၃၂။ ကထိန်အမေးအဖြေ ဦးသုခ ။
၃၃။ သာသနာ့ရောင်ခြည် ။ ။
၃၄။ နန္ဒကုမ္မာ ဦးစန္ဒာဝရ ။
၃၅။ အရိယာတရား (ရေးသူမသိ) ။
၃၆။ မြလာဝုံးသာဝုံးသူရိယာ ဦးစန္ဒာဝရ(လူထုတိုက်ထုတ် ကရင်ပုံပြင် ဒုတိယတွဲကိုကြည့်
၃၇။ နန်းသောက်ပီး (ရေးသူမသိ)လူထုတိုက်ထုတ် ကရင်ပုံပြင် ပထမအုပ်မှာကြည့်
၃၈။ သိဒ္ဓတ္ထ (မူလရေးသူမသိ)၁၂၁၃ ခုနှစ်တွင်ရေးသည် မူရင်းသိဒ္ဓတ္ထမှာ လင်္ကာမပြေပြစ်သဖြစ်ဦးသီဟတေဇက ပြင်ဆင်ရေးတယ်လို့နိဒါန်းမှာဆိုထားတယ်။
၃၉။ နန်းရွှေကျင်ပုံပြင် မလောက်ဆရာတော် (လူထုတိုက်ထုတ် ကရင်ပုံပြင် ပဉ္စမတွဲမှာကြည့်)
၄၀။ ထေရီအပါဒါန် ဦးသီလာစာရ
၄၁။ အီတာလီဇာတ် မောင်ယောင့် သက္ကရာဇ်မသိ
၄၂။ ခနာ့ထောမူလာမူလီ ။ ။
၄၃။ မဟာပရိနိဗ္ပာန္နသုတ် ဖူ့နဲစဗို ။
၄၄။ ခန္ဓာပူရ ။ ၁၂၆၉
၄၅။ ဖူ့လျောင်ဟယ့် ။ ၁၂၇၆
၄၆။ နန်းမောင်ဖလယ်ဝေါ် မောင်ယောင့် (လူထုတိုက်ထုတ် ကရင်ပုံပြင် တတိယတွဲမှာကြည့်)
၄၇။ ဇနကဇာတ် နဲစံပွား ၁၂၇၉
၄၈။ ဇိနတ္ထ မန်းနဲအောင်ပွင့် ၁၂၈၆
၄၉။ သူရိယကုမ္မာ စန္ဒကုမ္မာ နဲရွှေဝေါ် ၁၂၉၇
၅၀။ နီးဆယ်နီးကွယ်(ရာမလက်ခဏအဆက်)ဦးခန္တီ သက္ကရာဇ်မသိ
၅၁။ ခရုမင်းသား (ရေးသူမသိ) လူထုတိုက်ထုတ် ကရင်ပုံပြင် စတုတ္ထတွဲမှာကြည့်။
၅၂။ ဆုံးမစာပေါင်းချုပ် (ရေးသူမသိ) သက်ကရာဇ်မသိ
၅၃။ ကပ္ပအဆုံးအဖြတ် မန်းနဲအောင်ပွင့် ၁၂၈၄
၅၄။ ကုမာရကဿပဇာတ် ဦးသီလာစာရ ၁၂၉၆
၅၅။ ပိဏ္ဍောလဇာတ် ဆဒ္ဒန်ဂူဆရာတော် ၁၂၈၉
၅၆။ ဒဂုံပိုင် ကိုရင်ပန်းသာ ၁၂၃၃
၅၇။ သိဒ္ဒတ္ထမူသစ် ဦးသီဟတေဇ ၁၂၆၉
၅၈။ ကျောင်းထိုင်အင်္ဂါ ဦးစိန္တာက၀ိရေး (ပေကူး နဲစဗို) ၁၂၄၀
၅၉။ ဓမ္မစင်္ကြာ ဦးဇာဂရ ပုံနှိပ်မူ
၆၀။ မင်္ဂလသုတ် ။ ။
၆၁။ ရှင်မဟာကဿပ ဦးဥတ္တမ လက်ရေးမူ ၁၃၂၄
၆၂။ ဥပတိဿသ ကောလိတ ။ ။ ၁၃၂၅
၆၃။ သောဏနန္ဒ ။ ။ ၁၃၂၃
၆၄။ မဟာကဏှနှင့် သင်္ဂါယနာ ။ ။ ၁၃၂၆
၆၅။ သုတသောမ ။ ။ ၁၃၂၆
၆၆။ ခေမာထေရီ ။ ။ ၁၃၂၁
၆၇။ အနာထပိဏ် ။ ။ ၁၃၂၀
၆၈။ ဥတ္တရာ ။ ။ ၁၃၂၀
၆၉။ အာဠာဝက ။ ။ ၁၃၂၁
၇၀။ သိဝိမင်းကြီး ။ ။ ၁၃၂၂
၇၁။မဏိကက္ခ ။ ။ ၁၃၂၇
၇၂။ ဂရဟဒိန္န ။ ။ ၁၃၂၀
၇၃။ ယပ်လှဲတရားစာ ။ ။ ၁၃၂၈
၇၄။ လောကနီတိ (စကားပြေ) ပုံနှိပ်မူ ၁၃၂၇
၇၅။ ကရင်ရာဇ၀င် ။ လက်ရေးမူ ၁၃၂၇
၇၆။ ကရင်ပုံပြင် (၅)တွဲ ။ ။ ၁၃၂၆
၇၇။ မဟာဓန ။ ။ ၁၃၁၂
၇၈။ တိဿရဟန်းလူထွက် ။ ။ ၁၃၂၂
၇၉။ သုမဏသာမဏေ ။ ။ ၁၃၂၃
၈၀။ သူရိယကုမ္မာ စန္ဒကုမ္မာ။ ။ ၁၃၂၄
၈၁။ သစ္စကပရဗိုဇ် ။ ။ ၁၃၂၇
၈၂။ ကာက၀လ္လိယ ။ ။ ၁၃၂၃
၈၃။ သုတ်သီလက္ခခန္ဓ (စကားပြေ) ပုံနှိပ်ဆဲ ၁၃၂၉
၈၄။ သုတ်မဟာဝါ ။ ။ ၁၃၃၀
၈၅။ သုတ်ပါထေယျ ။ ။ ၁၃၃၁
၈၆။ ဗုဒ္ဓသြ၀ါဒ (၃)ျတွဲ ဦးစန်ဒန လက်ရေးမူ ၁၃၂၇
၈၇။ ကရင်အမျိုးသား သမိုင်း ဦးဥတ္တမ ။ ၁၃၂၈
၈၈။ ၀ိနည်းငယ် လေးစောင် ဦးဇာဂရ ။ သက္ကရာဇ်မသိ
၈၉။ လောကနီတီ (လင်္ကာ) ။ ။ ။
၉၀။ ကရင်ရာဇ၀င် ။ ။ ။
၉၁။ ပိပ္ပလိဘဒ္ဒကာပိလာနီ ။ ။ ။
၉၂။ ဓူဝေစေတီ ။ ။ ။
၉၃။ ဥတေန ။ ။ ။
၉၄။ ဒေ၀ဒတ်နှင့်အဇာတသတ် ။ ။ ။
၉၅။ အင်္ဂုလိမာလ ။ ။ ။
၉၆။ တေလပတ္တ ။ ။ ။
၉၇။ အနာထပိဏ် ။ ။ ။
၉၈။ ဥပကဆာဝါ ။ ။ ။
၉၉။ ကောသလအိပ်မက် ။ ။ ။
၁၀၀။ မစ္ဆရိယသူကြွယ် ။ ။ ။
၁၀၁။ ပိုးကရင် မြန်မာ အဘိဓာန် ဦးစန္ဒနနှင့် ဦးဥတ္တမ လက်ရေးမူ
၁၀၂။ ဂါထာတစ်ထောင် (ဝေဿန္တရာဇာတ်) ဦးပညာ ၊သက္ကရာဇ်မသိ ပေမူ
က-ဍောဟ်။ ခ-ခွင် ဂ- ဖေါဟ်။ ဃ- ဖါဍောဟ်။ င။
စ- ၀င်ဍင်။ ဆ- ၀ါင်ဝံင်။ ဇ-ထေံဖါ။ ဈ- မေ၀်.ထ၀့်။ ည ။
ဋ - ထ၀့်ခင်း။ ဌ - ခါခါ်။ ဍ - ဏ်ါသါ်။ (----) ထီ့စူး။ ဏ - ဖါဍောဟ်။
တ - အူးပုဂ်။ ထ - ခ္မိက်။ ဒ - ကာင်းကံင်း။ ဓ - ခုက်လင်။ န - ဖေါဟ်။
ပ - အင်ထင့်။ ဖ - ဖေါဟ်ကါင်။ ဗ - လင်သါ်။ ဘ - ကုဂ်ဆုဂ်။ မ - ။
ယ - အင်ထင့်။ ရ - ထ၀့်ခင်း။ လ - ။ ၀ - ။ သ - ။
ဟ - ။ ဠ - ဖါဍောဟ်။ အ - ။
၀ - ။ ဟှ - ။ ဃှ - ။
တချို့ဗျည်းတွေ စာလုံးဆင့်တွေ ရိုက်ထည့်လို့ မရတာရှိပါတယ်။ ပြင်ဖတ်ပြီး စိတ်ရှည် နားလည်ပေးပါရန်။
သရ (၁၄) လုံးနှင့်အတူ စာလုံးပေါင်းပါ ထည့်ပေးထားပါသည်။
အ - အ ကေလေါင်ဒေ အ - အ ။ အာ= အ ကေ၀်လင် ဒေ အာ - အာ ။
အိ - အ ကေထေါင်း ဒေ အိ - အိ ။ အီ - အ ကေထေါင်း ဒေ အီ - အီ ။
အု - အ ကေလောင် ဒေ အု - အု ။ အူ -အ ကေလောင် ဒေ အူ - အူ ။
အေ -အေ ကေဒိန် ဒေ အ - အေ ။ အဲ -အ ကေထောင်းလောင်ခိုင့် ဒေ အဲ - အဲ ။
အို - အ ကေဒိန် ဒေ အို - အို ။ အော - အော ကေဒိန် ဒေ အ - အော ။
အ - ကေထောင်းမေးယာ့ ဒေ အော် - အဲ (နောက်ပစ်အစား ရှေ့ပစ် ရေးရမည်)(ရှေ့ပစ်ရိုက်ထည့်ရန် မရှိပါ)
အု -အ ကေဒိန် ဒေ အု - အု ။ အံ -အ ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် အံ ။ အး - အ ဆေဖလုံးမေးယာ့ဏီ့ဖလုံး အား ။
ဆ်ုမာလေဟ်(၁) ဆမာလွတ် (၁)
-ု - -ါ-ါ့ -း
ကု က ကါ ကါ့ ကး
ကု = က ကေဒိန် ဒေ -ု ကု။
က = က ကေလောင် ဒေ - က။
ကါ = က ကေလောင် ဒေ -ါ- ကါ။
ကါ့ = က ကေလောင် ဒေ -ါကါ ဆေ ဖလုံး ဖေါင့်လား ကါ့ ။
ကါ. = က ကေလောင် ဒေ -ါကါ ဆေဖလုံး မေံယာ့ လဖလုံး ကါ. ။
ကး = က ဆေဖလုံး မေးယာ့ ဏီ့ဖလုံး ကား
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁)
ထာထး ။ ယ်ုဖါ.ဏမာဏါသး ။
ဟှာဟှာ.ထာထး ။ မာသာ့ဆာဆာ. ။
၀းမာတာတာ ။ ဏါရာသးအး ။
ခါ့ဝးက်ုညာ ။ တာသးအး ။
ပ်ုမာဆ်ုမာအး ။ ဏ်ုမုမာဟှး ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၂) ဆမာလွတ် (၂)
-ိ -ီ -ီ့ -ီ. -ီး
ကိ ကီ ကီ့ ကီ. ကီး
ကိ = က ကေထောင်းဒေ -ိ ကီ ။
ကီ = က ကေထောင်းဒေ -ီ ကီ ။
ကီ့ = က ကေထောင်းဒေ -ီ ကီ ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကီ့ ။
ကီ. = ကကေထောင်း ဒေ -ီ ကီ ဆေဖလုံးမေံယာ့ လဖလုံး ကီ. ။
ကီး = ကကေထောင်း ဒေ -ီ ကီ ဆေဖလုံးမေံယာ့ ဏီ့ဖလုံး ကီး ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၂) လိုက်ပေါ်လွတ် (၂)
၀းယာ.ထီ့ ။ ဍးဝီ၀ီ ။ ကိလဆာ့ ။ လီ.ဏီ.လီ.ဏာ ။ ကီးအးစီ့စး ။
ယးလီးအး ။ ဏီ.ကါကါ ။ ထီသးအး ။ ဆ်ုဃှာ.ဍီးအး ။ ထီထီ့ဆာဆာ ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၃) ဆမာလွတ် (၃)
-ု -ူ -ူ့ -ူ. -ူး
ကု ကူ ကူ့ ကူ. ကူး
ကု = က ကေလောင်ဒေ -ု ကု ။
ကူ = က ကေလောင်ဒေ -ူ ကူ ။
ကူ့= က ကေလောင်ဒေ -ူ ကူ ဆေဖလုံး ဖေါင့်လား ကူ့ ။
ကူ. = က ကေလောင်ဒေ -ူ ကူ ဆေဖလုံး မေံယာ့ လဖလုံး ကူ. ။
ကူး = က ကေလောင်ဒေ -ူ ကူ ဆေဖလုံး မေံယာ့ ဏီ့ဖလုံး ကူး ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၃) လိုက်ပေါ်လွတ် (၃)
လူးခူး ။ တ်ုလုကူ ။ စူးသးဆာ့ ။ ၀ီသူးဟှး ။ ဆာ့ယူ့ယာ. ။
ဆ်ုနူ.ထီ့ဍာမာ. ။ အ်ုလူ.အ်ုထာ့ ။ ထီ့ဍူးထီ့ဍာ ။ ဍူလာ့မာအးဆ်ုဆာ့ ။ ယးအူးယးခး ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၄) ဆမာလွတ် (၄)
ေ -ေ-့ေ-.ေ-း
ကေ ကေ့ ကေ. ကေး
ကေ = အေကေဒိန်ဒေ က ကေ ။
ကေ့ = အေကေဒိန်ဒေ က ကေ ဆေဖလုံး ဖေါင့်လား ကေ့ ။
ကေ. = အေကေဒိန်ဒေ က ကေ ဆေဖလုံး မေံယာ့ လဖလုံး ကေ. ။
ကေး = အေကေဒိန်ဒေ က ကေ ဆေဖလုံး မေံယာ့ ဏီ့ဖလုံး ကေး ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၄) လိုက်ပေါ်လွတ် (၄)
မာအေထီ့အေဆာ ။ ဟ်ုမာခါ.ဝေ့အေး ။ ဍေဏ်ုဍေယု ။
မာအေးလုကူဟှေး ။လူ့ထီ့အေအး ။ ၀းမာကေဟှး ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၅) ဆမာလွတ် (၅)
- က် - ယ် - ယ့် -ဲါ-ဲ
ကက် ကယ် ကယ့် ကဲါကဲ
ကက် = က က ခွေကိုင်း ကက် ။
ကယ် = က ယ ခွေကိုင်း ကယ် ။
ကယ့် = က ယ ခွေကိုင်း ကယ် ဆေဖလုံး ဖေါင့်လား ကယ့် ။
ကဲါ= က ကေ၀်လောင်ဒေ -ါ ခွေထောင်းလောင်ခိုင့်ဒေ -ဲ ကဲါ။
ကဲ = က ခွေထောင်းလောင်ခိုင့်ဒေ -ဲ ကဲ ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၅) လိုက်ပေါ်လွတ် (၅)
ထယ်လာ.ဃှယ်ဃှယ် ။ ဟှယ့်လာ.တာတာ ။ ၀းဍယ်စူး ။ လယ်ယ်ုဏာ. ။ ၀ူးစက်အူဟှး ။
နဲာက်ုညာ ။ ဘာ.ဍာလဲာတယ် ။ ၀းလဲဏ်ုဟှယ့်လ်ုကဲ ။ ယ်ုဍးဏ်ုဝဲါ။ ထူ.ဆ်ုဟှဲသး ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၆) ဆမာလွတ် (၆)
ေ -ါ( -ဲ ရှေ့ပစ်) - ၀် -ှ် (- ဟ်)
ကော ကဲ က၀် ကှ် (- ဟ်)
ကေါ = အောကေဒိန်ဒေ က ကေါ ။
ကဲ = က ခွေထောင်းမေးယာ့ဒေ အော် ကော်---။ (နောက်ပစ်မှ - ရှေ့ပစ်ပြင်ရေးရန်)
က၀် = က ၀ ခွေကိုင်း ကော် ။
ကှ် (ကဟ်) = က ဟ ခွေကိုင်း ကော ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၆) လိုက်ပေါ်လွတ် (၆)
ပ၀်.ဓ၀်.ဃှယ်ဃှယ် ။ အ၀်ဟှဝ်ထီ့ဏှ် ။ လ၀်အေထီ့အေဆာ ။ မ၀်သးအးဍ၀် ။ ဏ၀့်သးဏ၀့်ဖ၀့် ။
မီယ၀်ဖါ့ထီ. ။ ယူ.အ်ှအးတယ် ။ လ်ုဝးက်ုတ၀် ။ အ်ှဝှ်အ်ှယ၀့် ။ ဏ်ုဍေယ်ုဏှ် မ၀့်မှ် ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၇) ဆမာလွတ် (၇)
-ိက် -ါ်
ကိက် = က ကေထောင်းဒေ အိ က ခွေကိုင်း ကိုက် ။
ကါ် = က ကေလောင်ဒေ အာ ခွေကိုင်း ကိုင် ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၇) လိုက်ပေါ်လွတ် (၇)
ပ၀်.လိက်ဏှ် ။ ဏ်ုတါ်ဝီ.လ်ုယာ့ ။ ဏ်ုသီးအ်ှဏှ် က်ုထိက် ။ ဆ်ုခါ် ဆ်ုဏါ ။ ဟှယ့်အ်ှလုယ်ုဝီ့ထါ် ။
ဍ်ာလာ.ဖ၀့်ဏှ် ။ က်ါယယ်အ်ှအး ။ မာဆိက်ယိက်ဖ၀်. ။ ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာ ။ ၀ူ့ဆးသ်ါထူ့ ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၈) ဆမာလွတ် (၈)
ေ -ံကေ၀်ေ- ၀့်ေ- ၀်.ေ-ှ် (ေ - ဟ်)
ကေံ ကေ၀့် ကေ၀့် ကေ၀်. ကှေ် (ကေဟ်)
ကေံ = အေ ကေဒိန် ဒေ က ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် ကေး ။
ကေ၀် = အေ ကေဒိန် ဒေ က ၀ ခွေကိုင်း ကီ ။(ပုံမှန်)
ကေ၀့် = အေ ကေဒိန် ဒေ က ၀ ခွေကိုင်း ကီ ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကီ့ ။(သံအောက်)
ကေ၀်. = အေ ကေဒိန် ဒေ က ၀ ခွေကိုင်း ကီ ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကီ--- ။(သံရှည်)
ကှေ် (ကေဟ်) = အေ ကေဒိန် ဒေ က ဟ ခွေကိုင်း ကီး ။ (သံတက်)
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၈) လိုက်ပေါ်လွတ် (၈)
က်ုသှေ်ဖါ့ထီ.လ်ုဍူ ။ လေ၀်ဟှဝ်လေ၀်ဟှး ။ ဆ်ုဟှေဝ်ဆ်ုဝး ။ အ်ှယုမေံယာ့ ။ ဖေံထေံဝးဏှ် ။
ခေ၀့်လ်ုဍူ ။ အ်ုလူ.ပေ၀့် ။ ဆေ၀်.လာ.လ်ုဃှေဝ် ။ လေ၀်ဏေ၀်.လ်ုဃှေဝ် ။ အ်ှကှေ်ထ၀်.သာ့ ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၉) ဆမာလွတ် (၉)
-ါင် -ါင့် -ါင်. -ါင်း
ကါင် ကါင့် ကါင်. ကါင်း
ကါင် = က ကေလောင်ဒေ အာ င ခွေကိုင်း ကိုင် ။
ကါင့် = က ကေလောင်ဒေ အာ င ခွေကိုင်း ကိုင် ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကိုင့် ။
ကါင်. = က ကေလောင်ဒေ အာ င ခွေကိုင်း ကိုင် ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကိုင်---။
ကါင်း = က ကေလောင်ဒေ အာ င ခွေကိုင်း ကိုင် ဆေဖလုံးမေးယာ့ဏီ့ဖလုံး ကိုင်း ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၉) လိုက်ပေါ်လွတ် (၉)
ထါင်ဏေ၀်.ဏါင်ဏှ် ။ အ်ှလုဆ်ုဏါင် ။ မာဏါင်းထ၀ယ် ။ ၀းလေ၀်ဝးထါင် ။ ဃှေံအ်ုဏါဖါင်.။
ကါင်တယ်ယ်ုသာ ။ မေံသးကီးကါင် ။ ယ်ုဖီ့ခါင်.ဖှေ်ယ်ုစူး ။ ထီ့လးကါင်း ။ မေ၀်အါင်ဍေယးဃှာင့်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၀) ဆမာလွတ် (၁၀)
- င် - င့် - င်. - င်း
ကင် ကင့် ကင်. ကင်း
ကင် = က င ခွေကိုင်း ကောင် ။
ကင့် = က င ခွေကိုင်း ကောင် ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကောင့် ။
ကင်. = က င ခွေကိုင်း ကောင် ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကောင်---။
ကင်း = က င ခွေကိုင်း ကောင် ဆေဖလုံးမေးယာ့ဏီ့ဖလုံး ကောင်း ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၀) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၀)
၀းလေ၀်တင်ထီ့။ ယးဝင်ဍ်ာအှ်လ်ုထီ့ဏါင်။ ဃှင်သးဝင်းဏ်ှဆါင်း။ စူးဆါင်းအင်းကူးသး။ ယင်ဖါထ၀့်သး။
အ်ှဃှူ့အ်ှဃှင်။ ဏင်ဏင့်ဟှယ့်ထါင်။ အ်ုဆါင့်ဏ်ှအုသင့်။ အ်ှကှေ်ထ၀်.ဖှေ်အ်ုဟှင်.။ သာဏင်းလ်ုဃှေဝ်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၁) ဆမာလွတ် (၁၁)
-ံင် -ံင့် -ံင်. -ံင်း
ကံင် ကံင့် ကံင်. ကံင်း
ကံင် = က ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် င ခွေကိုင်း ကွန် ။
ကံင့် = က ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် င ခွေကိုင်း ကွန် ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကွန့် ။
ကံင်. = က ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် င ခွေကိုင်း ကွန် ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကွန်---။
ကံင်း = က ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် င ခွေကိုင်း ကွန် ဆေဖလုံးမေးယာ့ဏီ့ဖလုံး ကွန်း ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၁) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၁)
ဆေ၀်တံင်ဏေ၀်.ဖ၀့်။ ဆ်ုလုမံင်ထံင်။ ယးသ်ါအးလံင်း။ ယ်ုမုဝံင်ထံင်။ လေ၀်သာ့လံင်လံင်။
ကံင်ထ်ုဍံင်ဏှ်။ ဓံင့်ဍေထံင်.ဏ်ှလုဝးဍံင်။ အ်ုဍီးအ်ုဍံင်လ၀်အေထံင်။ အင်းခံင့်ထ်ုဝါ။ အင်းဖံင့်မေ၀်အါင်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၂) ဆမာလွတ် (၁၂)
-ိင် -ိင့် -ိင်. -ိင်း
ကိင် ကိင့် ကိင်. ကိင်း
ကိင် = က ကေထောင်းဒေ အိ င ခွေကိုင်း ကိန် ။
ကိင့် = က ကေထောင်းဒေ အိ င ခွေကိုင်း ကိန်
ကိင်. = က ကေထောင်းဒေ အိ င ခွေကိုင်း ကိန် ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကိန်--။
ကိင်း = က ကေထောင်းဒေ အိ င ခွေကိုင်း ကိန် ဆေဖလုံးမေးယာ့ဏီ့ဖလုံး ကိန်း။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၂) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၂)
အင်းဆါ့ဆ်ုဏှ်ခိင့်အေတ၀်။ ၀းသာအင်းကိင်။ ဆီ့ဏင်အိင်တိင်.။ ဆိင်းယါင်မာလှ်။ ဖ၀့်စိင်းစင်း၀၀်။
အ်ှဍိင်ဍေယ်ု။ ဟှိင်းဍံင်းသိင်းပး။ လိက်ဏိင်းမူ.လာ။ လ်ုဝိင်းလ်ုဝါ။ လာဏင့်လာလိင်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၃) ဆမာလွတ် (၁၃)
-ုံ -ုံ့ -ုံ. -ုံး
ကုံ ကုံ့ ကုံ. ကုံး
ကုံ = က ကေလောင်ဒေ အု ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် ကုံ ။
ကုံ့ = က ကေလောင်ဒေ အု ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် ကုံ ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကုံ့ ။
ကုံ.= က ကေလောင်ဒေ အု ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် ကုံ ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကုံ.--။
ကုံး = က ကေလောင်ဒေ အု ဆေဖလုံးဖေါင့်ခွတ် ကုံ ဆေဖလုံးမေးယာ့ဏီ့ဖလုံး ကုံး ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၃) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၃)
ဟှာ.ဖီ့တုင်တ်ုခံင်.ထီ့။ လုံ.သူ့ခင်းထ၀့်မာ.လှ်။ အ်ုထီ့နုံ.ဏ်ှပုံးတ်ုလုံး။ အ်ှကှေ်ဝေ့ဍးလ်ုဆုနုံး။
ဖီ့လီမူဏင်ဟှယ့်ဟှယ်ကုံ။ ဟှာ.ဖီ့မ်ုလေ၀်မာဝုံး။ ယ်ုဟှိင်းအ်ှလုဍုံဏါင်ဃှံင်။ ဏေ၀့်လ်ုဍုံအ်ှလုသိင်းဝုံး။
လ်ုဆိက်ဏါင်ခ၀့်ခေ၀့်ဝင်ခုံ။ ယ်ုဖါ.လေ၀်မာက်ုလုံ့။ ဖါ.မေ၀်ဝံင်းယ်ုဝဲါလေ၀်သုံ့။ တုံတုံ့ဏ်ှလ၀်ထါင်ပုံ။
မာန်စ၀်ဆင့်ဖါ့ မေ၀်လုံကုံ ၊
ဝှေံအင်းအ်ုဆး လ်ုဖေ၀့်ပုံ ၊
မာလင်ထီ့ဖါ. ၀ူ့ဆးဍင် ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၄) ဆမာလွတ် (၁၄)
-ုင် -ုင့် -ုင်. -ုင်း
ကုင် ကုင့် ကုင်. ကုင်း
ကုင် = က ကေလောင်ဒေ အု င ခွေကိုင်း ကုန် ။
ကုင့် = က ကေလောင်ဒေ အု င ခွေကိုင်း ကုန် ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကုန့် ။
ကုင်. = က ကေလောင်ဒေ အု င ခွေကိုင်း ကုန် ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကုန်--။
ကုင်း = က ကေလောင်ဒေ အု င ခွေကိုင်း ကုန် ဆေဖလုံးမေးယာ့ဏီ့ဖလုံး ကုန်း ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၄) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၄)
၀ံင်ထင်းဟှိင်းထုင်း။ ဖံင်းထအေဟှုင်.။ ဆုင်းအင်းဆူ့အာင်။ အ်ုလ်ုယုင်.အ်ှဆါ်အးလဲ။ တ်ုဗုင်.သ၀့်ယါင်။ ၀းလေ၀်ခုင်းဏင်း။ သုင်းအင်းသုင်းအ၀်။ လ၀်တုင်လ်ုဃှေဝ်။ ဟှဝ်၀ိင်းသီးဏ်ှယုင်.လာင်းဆံင်း။ ထီ့အုင်ထံင်လ်ုယုဃှင့်ထါ်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၅) ဆမာလွတ် (၁၅)
-ို -ိုင် -ိုင့် -ိုင်. -ိုင်း
ကို ကိုင် ကိုင့် ကိုင်. ကိုင်း
ကို = က ကေဒိန်ဒေ အို ကို ။
ကိုင် = က ကေဒိန်ဒေ အို င ခွေကိုင်း ကဟန် ။
ကိုင့် = က ကေဒိန်ဒေ အို င ခွေကိုင်း ကဟန် ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကဟန့် ။
ကိုင်. = က ကေဒိန်ဒေ အို င ခွေကိုင်း ကဟန် ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကဟန်--။
ကိုင်း = က ကေဒိန်ဒေ အို င ခွေကိုင်း ကဟန် ဆေဖလုံးမေးယာ့ဏီ့ဖလုံး ကဟန်း ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၅) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၅)
ဍုံဖိုင်စက်အူ။ က်ုဆင့်သိုင့်ဍူ။ ဆ်ုဟှယ့်ဆိုင်ဍေဟ်လင်။ ၀းဖံင်းကိုင်ဓ၀်.။ ဆ်ုနိုင့်နူ.ထီ့။ ဆိုင့်နိုင့်မိုင့်ဟှေဝ်။ သိင်းခိုင့်သိင်းပ်ုယီး။ ဆေ၀်လင်လုံ.တိုင်။ ၀းမာဆိုင်ယု။ ဖိုင်မေ၀်ဖိုင်သိုင့်။ အင်းယိုင်အ၀်ယိုင်။ အင်းဖံင့်အင်းသိုင့်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၆) ဆမာလွတ် (၁၆)
-ုက် -ုဂ်
ကုက် = က ကေလောင်ဒေ အု က ခွေကိုင်း ကောက် ။
ကုဂ် = က ကေလောင်ဒေ အု ဂ ခွေကိုင်း ကောင် ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၆) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၆)
ဖေံအင်းဃှီးဃှုဂ်။ ယင်.ဍိင်ကုဂ်ဆုဂ်။ စုဂ်ဆာ့အ်ှအေး။ ယုက်ထ၀့်လာ.ဆါ်။ လေ၀်ထုက်ဍေလာင်း။ ဓံင့်တုဂ်စေ၀်တုဂ်။ အင်းအုဂ်လ်ုလုက်။ မာဏေ၀်.ဖ၀်.လိက်အုဂ်။ ကုက်လာ.ထံင်အ်ုဟှံင်လုက်။ ဘာ.ဏ်ှအှ်ဝုဂ်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၇) ဆမာလွတ် (၁၇)
ေ-ါတ်ေ-ါဝ်ေ-ါဝ့်ေ-ါဝ်.ေ-ါဟ်
ကေါတ် ကေါဝ် ကေါဝ့် ကေါဝ်. ကေါဟ်
ကေါတ် = အော ကေဒိန်ဒေ က တ ခွေကိုင်း ကွတ် ။
ကေါဝ် = အော ကေဒိန်ဒေ က ၀ ခွေကိုင်း ကူ ။
ကေါဝ့် = အော ကေဒိန်ဒေ က ၀ ခွေကိုင်း ကူ့။
ကေါဝ်. = အော ကေဒိန်ဒေ က ၀ ခွေကိုင်း ကူ--။
ကေါဟ် = အော ကေဒိန်ဒေ က ၀ ခွေကိုင်း ကူး ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၇) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၇)
ကေါဝ်လင်စူ။ ယ်ုမောဝ်.ဍေယ်ုဖါ.။ ထောဟ်ယေါဝ်.ဟှင်းခေါဟ်။ ဆ်ုဆါ့ဆါ.အ်ုခေါဝ်.ဍောဟ်။ ဆ်ုနိုင့်သယ်ဟှယ့်ထါင်ဆောဝ့်။ အင်းကေါဟ်ဝယ်ဝံင်။ ဍောဟ်ထင်းမံင်ဖါဍောဟ်။ ဟ်ုဏှ်ကံင်ထ်ုဍံင်ထေါဝ်.။ ဍူသးမောဝ့်ဏ်ှဆာင်း။ နောတ်ဝှေံအ်ုဝံင်ဍောဟ်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၈) ဆမာလွတ် (၁၈)
-ိုတ် -ိုဝ် -ိုဝ့် -ိုဝ်. -ိုဝ်း
ကိုတ် ကိုဝ် ကိုဝ့် ကိုဝ်. ကိုဝ်း
ကိုတ် = က ကေဒိန်ဒေ အို တ ခွေကိုင်း ကွတ် ။
ကိုဝ် = က ကေဒိန်ဒေ အို ၀ ခွေကိုင်း ကို ။
ကိုဝ့် = က ကေဒိန်ဒေ အို ၀ ခွေကိုင်း ကို ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကို့ ။
ကိုဝ်. = က ကေဒိန်ဒေ အို ၀ ခွေကိုင်း ကို ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကို--။
ကိုဝ်း = က ကေဒိန်ဒေ အို ၀ ခွေကိုင်း ကို ဆေဖလုံးမေးယာ့ဏီ့ဖလုံး ကိုး ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၈) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၈)
လေ၀်လင်အ်ှခိုဝ်။ ဆ်ုနိုင့်ဃှိုတ်ဍူ။ ထေါဟ်ခါင့်ထေါဟ်ကိုဝ်။ ဍးစိုဝ်လ်ုအိုဝ်။ ဟှယ့်သာ့ကေဟှဝ်ခိုဝ်း။ ဖီ့ဆိုဝ်ဖူ့ဆိုဝ်။ ပ်ုထီပ်ုသိုဝ်။ မာဖေါဟ်လာ.ဃှူ့ခိုတ်။ စူးယာ့ခိုတ်ခ၀့်။ မ်ုလင်ဖ်ုလိုတ်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၁၉) ဆမာလွတ် (၁၉)
-ိုဒ် -ိုဒ်. -ိုဟ်
ကိုဒ် ကိုဒ်. ကိုဒ်း
ကိုဒ် = က ကေဒိန်ဒေ အို ဒ ခွေကိုင်း ကဟှူ ။
ကိုဒ်. = က ကေဒိန်ဒေ အို ဒ ခွေကိုင်း ကဟှူ ဆေဖလုံးမေးယာ့ လဖလုံး ကဟှူ--။
ကိုဟ် = က ကေဒိန်ဒေ အို ဟ ခွေကိုင်း ကဟှူး ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၁၉) လိုက်ပေါ်လွတ် (၁၉)
သိင်းဟှာခိုဒ်. လ်ုထုင်း။ ဟှင်ဖိုဟ်ဟှင်ထ၀့်။ ကိုဟ်တယ်ယ်ုသာ။ ဍိုဒ်လင်ဝးဍာ။ ဟ်ုဝးတိုဒ်ထင်း။ သ်ုကိုဟ်လ်ုဃှေဝ်။ ထ်ုလိုဒ်.တ်ုပုဂ်ဝေ့အေး။ ယ်ုဖေါဟ်ဍးဝိုဒ်။ ဏ်ုဟှင်ဏ်ှဖိုဟ်။ ဆီ့ထုင်းအေထိုဟ်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၂၀) ဆမာလွတ် (၂၀)
- + ယ = -ျ
က + ယ = ကျ
က ဒေ ယ = ကျ
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၂၀) လိုက်ပေါ်လွတ် (၂၀)
ဏ်ုဟှာင်.ဆံင်းဝျာဆံင်း။ မျံ့င်ဏေ၀်.ဏ်ုဖူ့စူးဏှ်။ လင်မီ့လ်ုကျင်။ လေ၀်ပျုက်ဆေ၀်.ဟှး။ ကျုင်းလာ.လ်ုဃှေဝ်။
၀ါကျာ် ၀ါဓ၀်.။ ဖယ့်မျက်ုတုံ။ ချုဂ်ထဏ်ှသာ။ ဏ်ုလင်ဖျာ့ဏေ၀်.ဍိင်းသောဟ်ဟှး။ စံင်ထင်းခ်ုဍာ်ဏ်ှအေကျာ။
ဆ်ုမာလောဟ် (၂၁) ဆမာလွတ် (၂၁)
- + ရ =ြ-
က + ရ = ကြ
က ဒေ ရ = ကြ
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၂၁) လိုက်ပေါ်လွတ် (၂၁)
သြုက်ဖါထ၀့်ဟှေဝ်မာ.လှ်။ ကောဝ်ကြင်ခေါဟ်ဍာ။ ကျာ်သြီ့ထင်းထ၀့်။ စိုင်ထက်ုဆင့်ဍေဖီုထြီ.သင့်။
၀င်းဆါင်းအ်ှလုမံင့်ဆြီ.ခါင့်။ ပါင်တြင့်ခိုင့်မာ.လှ်။ ဆ်ုနိုင့်ခြိုင့်ထိုတ်အေ.ခိုင့်။ ဖေါဟ်သးခုင်းအင်းခြိက်သွး။ လေ၀်ထေ၀်အင်းသြ၀့်ခေါဟ်။ ခြိာ.မဲဏ်ှခိုင့်မာ.လှ်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၂၂) ဆမာလွတ် (၂၂)
- + ၀ = -ွ
က + ၀ = ကွ
က ဒေ ၀ = ကွ
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၂၂) လိုက်ပေါ်လွတ် (၂၂)
ထ်ုမဏါင့်ကွာ။ ခွါစေ၀်ခွါဓံင့်။ ပွါ်သာစွတယ်။ ဆီ့ဏင်အ်ှပွါ် ။ ခွအင်းမေ၀်ခေါဟ်ဝင်။ ဖေါဟ်သးခွယ်လောဟ်။ လွာ့သာစီ့စး။ ကွါ်စီ့စးလ်ုဃှေဝ်။ အင်းထုင့်ဝူးမွာ။ ဃွှိက်သးအ်ှအး။
ဆ်ုမာလောဟ် (၂၃) ဆမာလွတ် (၂၃)
- + ဟ = -ှ
က + ဟ = ကှ
က ဒေ ဟ = ကှ
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၂၃) လိုက်ပေါ်လွတ် (၂၃)
လေ၀်ခွိက်အင်းယှ။ ယှသးဃှိုင့်ဟှး ။ ယှးမုဂ်ခေါဟ်ဍာ။ ယှူးမုက်ဝ်ှယ၀့်။ ထီ့ယှောဟ်လင်ယွာ။ ဏ်ှဆါင့်ဏ်ှမွဲာအ်ုသင့်။ ဆင့်မိင်အ်ှလိုဆ်ုယှိုတ်ဏါင်။ လ်ုထီ့နုံထ်ါယှာ့လ်ုထူ့။ မာယှံင်ဆ်ုမာ။ ဖီ့သာယှာ.ဖူ့သာယှာ.။
ဆ်ုမာလောဟ် (၂၄) ဆမာလွတ် (၂၄)
-ဲု -ဲု့ -ဲု. -ဲုး
ကဲု ကဲု့ ကဲု. ကဲုး
ကဲု = က ကေလောင်ဒေ အု ခွေထေါင်းလောင်ခိုင့်ဒေ အဲ က၀ီ။
ကဲု့ = က ကေလောင်ဒေ အု ခွေထေါင်းလောင်ခိုင့်ဒေ အဲ က၀ီ ဆေဖလုံးဖေါင့်လား က၀ီ့ ။
ကဲု. = က ကေလေါင်ဒေ အု ခွေထေါင်းလောင်ခိုင့်ဒေ အဲ က၀ီ ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး က၀ီ.--။
ကဲုး = က ကေလေါင်ဒေ အု ခွေထေါင်းလောင်ခိုင့်ဒေ အဲ က၀ီ ဆေဖလုံးမေးယာ့ ဏီ့ဖလုံး က၀ီး ။
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၂၄) လိုက်ပေါ်လွတ် (၂၄)
ခဲု့ထင်းခေါဟ်ဏှ်။ မိုတ်တ်ုခဲု.လး။ ဟ်ုမဲုဟှယ့်ထံင်။ ယဲုးနိုဝ်လ်ုဃှေဝ်။ အင်းဃှဲု.အင်းဏဲစဃွှာထီ.းသာကဲုသးမိင့်။ လာနဲုးလာဃှိုဝ်။ ရဲု.ဏေ၀်.လ်ုအုဟှေဝ်ဏှ်။ ထေါဟ်တာင်အ်ုသဲု့။ ဆ်ုခေါဝ်.ခါ့ဆ်ုခေါဝ်.အဲု။
ဆ်ုမာလောဟ် (၂၅) ဆမာလောဟ် (၂၅)
-ဲုိ-ဲုိ့ -ဲို. -ဲိုး
ကဲိုကဲုိ့ ကဲုိ. ကဲုိး
ကဲုိ= က ကေဒိန်ဒေ အို ခွေထေါင်းလောင်ခိုင့်ဒေ အဲ ကွေ ။
ကဲု့ိ = က ကေဒိန်ဒေ အို ခွေထေါင်းလောင်ခိုင့်ဒေ အဲ ကွေ ဆေဖလုံးဖေါင့်လား ကွေ့ ။
ကဲုိ. = က ကေဒိန်ဒေ အို ခွေထေါင်းလောင်ခိုင့်ဒေ အဲ ကွေ ဆေဖလုံးမေးယာ့လဖလုံး ကွေ့။
ကဲုိး = က ကေဒိန်ဒေ အို ခွေထေါင်းလောင်ခိုင့်ဒေ အဲ ကွေ ဆေဖလုံးမေးယာ့ ဏီ့ဖလုံး ကွေး ။
လ်ိက်ပ၀်.လောဟ် (၂၅) လိုက်ပေါ်လွတ် (၂၅)
အူးထင်းခဲုဏှ်။ ထဲုိ့ထင်းခင်းဖ၀်.ဖါ။ လောဟ်ကဲုိဝးဍာ။ လ်ုဏီယိုဝ်မွဲာလာဃှဲို။ ထုဂ်ခွိက်ဏ်ုခေါဝ်.သဲုိ့ဏှ်။ တ်ုပဲိုဖေါဟ်။ ဍုံလဲုိ့သ၀့်။ က်ုဍုဂ်စဲုိခါ့။ ထဲုိ့မေ၀်အ်ုဖ၀့်ဟှေဝ်။ ဍ်ာနုံ.ဖိုင်ထီ့ဃှဲို။
ဆ်ုမာလောဟ် (၂၆) ဆမာလွတ် (၂၆)
က + င = ကင
က + ဍ = ကဍ
က + မ = က္န
က + လ =ကု
က + န = က္န
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၂၆) လိုက်ပေါ်လွတ် (၂၆)
လ်ုက္မာ့ဏါင်ဍေဟ်ဟှင်းကိုဝ်။ သ်ုဍင်းဖုံ့သ်ုဍင်းခံင်။ ဖေံခီု့ပ်ုဝါင့်ဍေသိင်းပ်ုငါ့။ ခီု့က္နင့်အင်းကိုင်အေ၀း။ ခီု့ခ္မ်ါအင်းထီ့ဟှေဝ်မ။ ကျံင်.ဆြာ့ခ်ုငါင်.ယေါဝ်.ဘာ.။ ဏ်ှပ၀်.လိက်ဏ်ှပ၀်.အေကုာ။ မာလိက်အေခုဂ်ဏ်ှသိုဝ်။ ဝေ့မ်ုဖုံင့်ဟှလိက်လုက်ခုါ။ ကေုစိုဒ်မာလိက်ဏှ်။
ဆ်ုမာလောဟ် (၂၇) ဆမာလွတ် (၂၇)
ပ + တ = ပ္တ
ပ + က = ပ္က
ပ + စ = ပ္စ
အ + စ = အ္စ
လိက်ပ၀်.လောဟ် (၂၇) လိုက်ပေါ်လွတ် (၂၇)
ပ္တံင်တါင်ထင်းကျံင်.အ်ုသင့်။ ဖုံသာယှာ.ကိုဝ်ပ္ကုံဖေါဟ်သး။ အ္စာသံင်းလောဟ်ဖှေ်ဖေါဟ်သးလိက်။ ဆံင့်ထင်းပ္တ်ါလိက်အ်ုထါ်။
ဖံင်းပ္နာ.မိင်မ်ုလောဟ်ကဲုိဖေါဟ်သးကိုဝ်ဟှာဍေ။
အ်ှကုံထေါဝ်ခါင့် မွဲာဝှးဝှး ၊ ကိုဝ်ဟှာခါခိုက်ပျ။
စါင်းလင်ဝေ့ဖ၀်. ၊ ဍေမ်ုဖံင်း ။
သ၀့်မာ.တယ်ဝေ့ပီပူပါ ၊ကျုဂ်လေံဍေကိုဝ်ယှာ ။
ဖေါဟ်သးဟှင်ပေ၀့် ဟှာင်.လ်ုထိုင့် ၊ ကျုဂ်လေံပါကိုဝ်ဖိုင့် ။
ဖေါဟ်သးလုက်ဆိင့်ဝးတုင်.ကျာ ၊ ထီ့ဖါ.စုဂ်လင်သာ ။
နိုင်ဖ၀်.နိုင်ဖ၀်.ဍေဖ်ုအ၀် ၊ ကိုဝ်ပါင်သုဂ်ယှဝ်ယှဝ် ။
၁။ ဟှေးဖုံဖေါဟ် ဟှေးဖုံဖေါဟ် ။
ဟှင်ပေ၀့်ခါ့ ဟှင်ပေ၀့်ခါ့ ။
ကိုဝ်ဟှာဍေ မာလောဟ်ပညာ့ ။
၂း ဟှေးစ၀်ပါ် ဟှေးစ၀်ပါ် ။
အေသှေ်လိက် အေသှေ်လိက် ။
ဍောဟ်ယှာ.ထင်းထ၀့် မိင်ဖုဟ်ယိက် ။
၃။ ဟှေးဖုံသီး ဟှေးဖုံသီး ။
မာလေါဟ်ဏေ၀်.တယ် လိက်ဏင်.ထီး ။
စ်ှဏှ်သာ စ်ှဏုသာ ။
လ်ုသှေ်လိက် မေံဖုဟ်လုက်ခုါ ။
၄။ ဟှေးစ၀်ဝိုဒ် ဟှေး စ၀်ဝိုဒ် ။
မာလောဟ်ဏေ၀်.လိက် အဲဏ်ုဆိုဒ် ။
လိက်အေသှေ် လိက်အေသှေ် ။
လ်ုခါင့်လ်ုယာ့ ဖါန်ဝေ့မှေ် ။ ( ပါဍောဟ်ယုဂ်ယာန်းဝး လိက်အ္စာတုာပညာ့ကိုဝ်ဟှာကျာ်သြီ့ထင်းထ၀့်လာ.ဆါ်)(၂၂ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၀၈-မူ.ဗုဒ္ဒ၀ါ.)
၁။ ဆ်ုဟှေဝ်ဏ်ှအိုဝ် ၀းယာထလှ်။
၂။ ဆ်ုမာဟှေဝ်ဆ်ုမာအွာဏ်ှအိုဝ် ၀းဏဲပျာဖှေ်ဝေ့လှ်။
၃။ ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးပညာ့သယ်လ်ုဖးဏ်ှအိုဝ် ၀းဍုဂ်မာလောဟ်ဖှေ်ဝေ့လှ်။
၄။ မ်ုထိုက်ဗ္နိက်ခါန်.ခါအ်ုဟှင်. စေ၀်ယှးသယ်လ်ုဖး မ်ုဝးထုဂ်ထင်းဖှေ်ဝေ့လှ်။
၅။ ကြိုဒ်ဝးပ်ုဝါ ဍေဟ်ုမူး ဟ်ုခွါ့သယ်ဏှ် မ်ုဝးဆာမိက်ဖှေ်ဝေ့လှ်။
၂။ က်ုလုံ့ဆ်ုမာအ်ှသယ်လ်ုဖး ၀းမာဝိုဝ်မာဆိုင်ဖှေ်ဝေ့လှ်။
၃။ ၀းမွဲာတယ်ဖေါဟ်ဟှေဝ်ပြေ ခံင်အယ်လ်ုဖး မ်ုဝးတုင်.ဏေ၀်.ကဲဝေ့လှ်။
၄။ အေမာဝုံးအိုဝ် မ်ုဝးဖှေ်သုင့်အင်းဏင်ဝေ့ဆ်ုဝုံးဏ်ှလှ်။
၅။ ဆိုဒ်ဝံင်ဝေ့မ်ုဟှေဝ်သိုဝ် မ်ုဝးယောဝ်.ဟှေဝ်ရဲာသယ့်ဝေ့လှ်။
၁။ ၀းမာလောဟ်ဖှေ် ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးဏ်ှလှ်။
၂။ ဆ်ုကိုဝ်မိင်ဍေ ၀းလ၀်အင်းသံင်းဆ၀့်ပ၀်ဖှေ်ဝေ့လှ်။
၃။ ဆာမွဲာပညာ့အ်ှဏှ် ၀းမာလောဟ်ဖှေ်လုက်ဆိင့်လှ်။
၅။ ဝေ့မ်ုဏေ၀်.ထါင်ပညာ့အ်ုလျာ.သိုဝ် မ်ုဝးဖ်ုအောဝ်သုံ့ဖှေ်အ်ုလင်.ကုယ်ဏ်ှလှ်။
၂။ ဆြာ့အင်းသံင်းဆ်ုခုါင်လ်ုဖးဏှ် ၀းဆံင့်ဏးဝေ့ဍးလှ်။
၃။ ဆြာ့လေ၀်ဆ်ုအေဟှယ့်ထါင်ဏှ် မ်ုဝးအင်းဟှးဆိုင်ဝေ့လှ်။
၅။ ဆြာ့ဍုဂ်ဏဲလောဟ်ဆ်ုသှေ်ဆ်ုဝးလ်ုဖးဏှ် ၀းမာဏါင်းပ၀်.လောဟ်ဏေ၀်.ဝေ့လှ်။
၁။ ၀းလ၀်ဍေဏီအိင် ကိုဝ်ဏီဍေလှ်။
၂။ ဒြပ်ခ်ုသိုဝ်လုက်ဆိင့်လ်ုဖး ၀းဖှေ်ကုံဝေ့ဍးလှ်။
၄။ ဒြပ်ခ်ုသိုဝ်စေ၀်ဓံင့်လ်ုဖး ၀းက်ုယိုင့်ဖှေ်ဝေ့ဍးလှ်။
၅။ လ်ုမာ့ဖင့်ခေါဟ် ၀းအ်ှကှေ်လင်ဆ်ုအဲဆ်ုကဲု လ်ုအုဍောဟ်ထုက်ဏ်ှလှ်။
၁။ ဝေ့ဟှိင်းဖိုင်မ်ုဟှေဝ်ဃှီ့သိုဝ် ၀းအင်းတာင်ဝေ့လှ်။
၂။ ၀ါဟှယ့်ထာင်ဖ်ုအောဝ်ထဒြပ်ခ်ုသိုဝ်လ်ုဖးဏှ် ၀းယောဝ်.ခိုင့်အ်ှကှေ်ဝေ့ဍးလှ်။
၃။ လ်ုအုဝါဖင့်ခေါဟ်သုဂ်ကျာလုံ. အဲဝုံဝးအေးလှ်။
၄။ ၀းယောဝ်.ဟှေဝ်အင်းဏင်ဖါဝေ့ ခံင်အယ်သယ်ဏ်ှလှ်။
ဆံင့်ကါင်ဝးဝေင် အင်းဏင်ဃှဲို့ဟှံင်။
၃။ စုဂ်ဆာ့အေအှ် လ်ုမိင်မိင်လာ.၀းဝေင်ဖှေ်ဝေ့ဍးလှ်။
၄။ ၀းအင်းဏင်ဖှေ်ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာ အေသ္မ၀့်ဃှဲိုဟှံင်လှ်။
၅။ အ်ုခါ့အေထံင်ဏှ် မ်ုဝးဖ်ုလျာ.ဝေ့ဍးလှ်။
၄။ က်ုဆာ.ဆ်ုဖါ်ဆ်ုမာသယ်လ်ုဖးဏှ် မ်ုဝးလံင်ယောဝ်.အေဃှိင်လှ်။
၅။ လ်ုဟုဖင့်ခေါဟ်က်ုဆာ.အ်ုဂုဏ်တာလ်ုဖး မ်ုဝအင်းအုဂ်ဝေ့ဍးလှ်။
၅။ က်ုလုံ့ဆ်ုမာအေအ်ှလုမိင်မိင်လာ. ၀းမာဝိုဝ်ဝေ့ဍးလှ်။
၃။ လ်ုသောဟ်သင့်လင်ဆ်ုနုံ့ဏာခါ့ အင်းလယ်ဍေသာဝးကဲလှ်။
၄။ အေ၀းလင်ဒဒုက်ဍ၀် ခိုဝ်ထ၀်.လိုဝ်းအေးလှ်။
၁။ ဆ်ုလုဟှေဝ်၀းလ်ုဖး ၀းယာထဝေ့လှ်။
၃။ လ်ုဟှိုင့်ဝးဍာ် ဓ၀်.အ်ုသင့်လ်ုဖးဏ်ှအိုဝ် ၀းတွဝ့်ဖှေ်ဝေ့ဍးလှ်။
၄။ ဓ၀်.လီလ်ုဖးဏ်ှသီး ဝေ့မ်ုထီ့ဆာထါင်သိုဝ် ၀းလ၀်ဖှေ်ဝေ့ဍးလှ်။
၅။ ၀းဍုဂ်ဏဲဖှေ်ဝေ့ သွဝ့်ဖိုင်သာဏ်ှလှ်။
၂။ ၀းပ္ကုံဝေ့ ဆ်ုဝုံးဆ်ုဝါမုက်မုက်လာလာလှ်။
၃။ ၀းလ၀်ဍေ မေံဏီ.အိင်လှ်။
၅။ ၀းအ်ုခါ့ဆ်ုဝုံးအေထံင် မာပ္တဲုကဲဝေ့ဍးလှ်။(၂၅-၁၀-၂၀၀၈)
koko at 9:05 PM